ပုံပြင်ထဲမှာ လမ်းလျှောက်ခြင်း-သစ္စာနီ.pdf by yephyo thu - issuu
yjkH yixfr J mS vr;f avQmujf ci;f သစ္စာနီ
Aမှာစကား စာကိုဖတ်တော့ Aရယ်ရသား၊ လူကိုတွေ့တော့ ရယ်လည်းမရယ်ရဘူးဟု ပြောသူများနှင့် ကြုံဖူးပါသည်။ သူတို့သည် လူရွှင်(လူပြက်)နှင့် ဟာသစာရေးဆရာကို မခြွဲ ခားတတ်သူများသာ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော့်ကို ဘာကြောင့် ရယ်စရာတွေ ရေးနေတာလဲဟု မေးသူတိုင်းAား “လူတွေ ရယ်စေချင်လို့ပါ”ဟုသာ ကျွန်တော် ရိုးရိုးသားသား
သံပန်းပုက့သဲို့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဟုထင်ရန်ရှိသော်လည်း လေးနက်ပါသည်။ လူတွေ ရယ်နေတာဟာ လူတွေ ငိုနေရတာထက် ပိုမကောင်းပေဘူးလား။ ကျွန်တော် ကူညီပါရစေ။ သို့သော်
ကျွန်တော်ရည်ရယ်ွပါသည်။ “ပုံပြင်ထမှဲာ လမ်းလျှောက်ခြင်း”မှာ ရယ်စရာသက်သက်မဟုတ်ပါ။ ပရိသတ်Aများစု သိပြီး၊ ကြားဖူးပြီးသား ပုံပြင်များကိုပင် ခေတ်၊ AခြေAနေနှင့် လိုက်ဖက်ေAာင် Aသွင်သစ် Aမြင်သစ်ဖြစ်ေAာင် ဖန်တီး တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပြီး
Aဓိကရည်ရယ်ွချက်မှာ
(ဒဿနဟုဆိုလျှင် ကြီးကျယ်ပေမည်)ကို စာဖတ်သူများ ခြေရာခံမိဖို့မျှသာ ဖြစ်ပါသည်။ ဆင့်ပွားAဓိပ္ပါယ်ကို ရှာဖွေရာတွင် လွယ်ကူမှု ရှိစေရန် လူသိများပြီးဖြစ်သော (Aီစတ်ွပုံပြင်လို၊ ငါးရာ့ငါးဆယ်လို)ပုံပြင်များကိုပင် Uီးစားပေးရွေးချယ် ဖော်ပြထားပါသည်။ လူ့Aဖွ့Aဲစည်း၏ AမြီးAမောက် မတည့်မှုကို လှောင်ပြောင်ရင်း Aသိပေးရန် ကြိုးစားထားပါသည်။ တချို့Aပုဒ်များတွင် မူလစာရေးဆရာ၏ Aာဘော်ကို ဆန့်ကျင်သော တင်ပြမှုမျိုးကို
ကျွန်တော့်ရည်ရယ်ွချက်ကို
ငဲ့ကကွ်၍
ကျွန်တော့်ရှေ့က ရေးခဲ့ဖူးသော ဆရာမြသန်းတင့်၏ “ကျွန်တော်ဆက်၍
တင်ပြပုံနှင့် ဆင်ကောင်းဆင်နေသည်ကိုလည်း နားလည်ပေးကြစေလိုပါသည်။ ပုံပြင်ထမှဲာ လမ်းလျှောက်ခြင်း တစ်မျိုးတည်း စုပေါင်းထုတ်ဝေရန် စာမျက်နှာမှာ
ရည်ရယ်ွခ့ေဲသ်ာလည်း စာAုပ်၏ ကျွန်တော်ရယ်စရာမဂ္ဂဇင်းတွင်
ရေးလက်စဖြစ်သော “Eဝံ မေ သုတံ”စာမူAချို့ကို ပူးတွဲဖော်ပြလိုက်ပါသည်။ မတူသော Aရသာနှစ်ခုကို ပူးတွဲပေးလိုက်သည့်Aတွက် နှစ်သက်ကြလိမ့်မည်ဟု ထင်ပါသည်။ ကျွန်တော်သည်
သစ္စာနီ (၂၄ ဇွန် ၂၀၁၀)
မြေခွေးနှင့် ကျီးကန်း တစ်နေ့သ၌ ကျနွုပ်သည် ပုံပြင်ထမှဲာ လမ်းလျှောက်လာစU် တဲတစ်တဲ၏ ပြတင်းပေါက်ကနေ ဒိန်ခတဲစ်ခကဲို ကိုက်ချီကာ
မော့ကြည့်လိုက်လေသည်။ ယင်းကိုမြင်သည်နှင့် (ပုံပြင်ထတွဲင်
Aီစတ်ွပုံပြင်ထမှဲ
ကျနွုပ်သိလိုက်သည်။
ကျီးကန်းပါးစပ်ထမှဲ
ဒိန်ခကဲိုစားလိုသဖြင့်
သစ်ပင်ေAာက်တွင် ထိုင်ကာ ကျီးကန်းကို Aမျိုးမျိုး မြှောက်ပင့်ပြောဆိုလေသည်။ နောက်ဆုံး ကျီးကန်း၏ Aသံသာသာလေးကို ကြားလိုပါသည်ဆိုသဖြင့် ကျီးကန်းသည် သီချင်းဆိုလိုက်ရာ ကိုက်ချီထားသော ဒိန်ခဲသည်
ကျနွုပ်
မြေခွေးသည် ကျီးကန်းကို Aမျိုးမျိုး မြှောက်ပင့်ပြောနေသည်ကို ကြားရ၏။ “မင်းရဲ့တစ်ကိုယ်လုံး နက်မှောင်လှပပြီး ကျော့ရှင်းနေတာပဲ။ ပွဲရတီ ရှန်ပိုန့မျဲား ရေချိုးထားသလားကွယ်။ သင်လှပသလိုပဲ သင့်ရဲ့Aသံဟာ Aင်မတန်လှပမယ်လို့ ငါထင်တယ်။ သင်သာ သီချင်းဆိုလကိုရင် ချောစုခင်ကတောင်
ဆိုပြပါလားကွယ်။ မင်းသာ သီချင်းဆိုပြရင် ငါ့လောက်ကံကောင်းတဲ့သူ ရှိမှာမဟုတ်ဘူး” တကယ်လို့သာ ကျီးကသာ သီချင်းဆိုပြလိုက်ရင် သူကိုက်ထားတဲ့ ဒိန်ခဟဲာ ပါးစပ်ကထွက်ပြီး မြေခွေးစားဖို့ ဖြစ်သွားမှာကို သိလို့ မြေခွေးဟာ“ငါ့လောက်ကံကောင်းတဲ့သူ ရှိမှာမဟုတ်ဘူး”လို့
တွေးပြီးပြောတာ။ ကျီးကန်းက သီချင်းဆို
ပါလေတော့ (သူတို့ရပ်ကက်ွထကဲကာရာAိုကေဆိုင်မှာဆို သူက ဖောက်သည်ပတဲ့) မြေခွေးက သူ့Aသံ ဘယ်လောက်ကောင်းလဲ သိရေAာင် ဆိုလိုက်ချင်တယ်။ (တကယ်တော့ သူ့Aသံက တဗြဲဗြဲတAဲAနဲ့မဲို့ Aတော်ဆိုးဝါးပါတယ်) ဆိုပေမယ့်လည်း ဒီကျီးက ‘A’သုံးလုံးလောက်တော့ ကြေပုံစာတတ်ပုံရတယ်။ ပုံပြင်ထကဲကျီးလောက်တော့ မိုက်ပုံမရဘူး။ သူက သီချင်းမဆိုခင် ပါးစပ်ထကဲဒိန်ခကဲို သစ်ကိုင်းပေါ်ချေAာက်ကျ
စဆိုတော့တယ်တ့။ဲ သူ့Aသံက တော်တော်ဆိုးပါတယ်။ မြေခွေးဟာ မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက်မကိုက်တော့ စိတ်ညစ်သွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကောက်ကျစ်ပြီး ဉာဏ်များတဲ့သူပီပီ“ကျီးရယ်... မင်းAသံကတော့ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆိုရုံဆိုပြီး ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမပါတော့ ကြည့်လို့ မကောင်းပါဘူး။ ဂျနီဖာလိုပက်တို့ဆို သီချင်းလည်းဆို
ထပ်ကနွ့်တယ်။
တင့်တင့်ထနွ်းဖွင့်တဲ့
တက်ခ့ဖဲူးသူဆိုတော့ Aစ်ကိုကာလသားတွေ ရင်ဖိုသွားေAာင် ဘော်ဒီရှိတ်ပြလိုက်Uီးမယ် တွေးပြီး-
သီချင်းဆိုရင်း Aတောင်နှစ်ဘက်ကို ဖြန့်ပြီး ကပါလေရော။ Aဲသလိုလည်း ကရော သစ်ကိုင်းကို ဒိန်ခနဲ့ ရောပြီးကုပ်ထားရတဲ့
ပြုတ်ကျလာတုန်း Aသင့်စောင့်နေတဲ့ မြေခွေးက ခုန်ဟပ်လိုက်တာနဲ့
ကျီးကန်းဟာ မြေခွေးပါးစပ်ထဲ ရောက်ပြီး ဇာတ်သိမ်းသွားပါလေရော။ တကယ့်Aဖြစ်တွေဟာ ပုံပြင်တွေနဲ့ မတူဘူး။ ပုံပြင်တွေဟာလည်း
လွတဲတ်တယ်လို့
ကျနွုပ်လည်း
ဟဒယမဂ္ဂဇင်း၊ မတ်လ၊ ၂၀၀၆ခုနှစ်။
AဘွားAိုနှင့် Aလုပ်သမားများ တစ်နေ့သ၌
မေးကြည့်၍ သိရသောAခါ ကျွန်ုပ်သည်. .. ‘AဘွားAိုနှင့် Aလုပ်သမားများ’ ပုံပြင်ထဲ ရောက်ရှိနေကြောင်း သဘောပေါက်၍ သွားလေတော့သည်။ ပုံပြင်ကား ဤသို့ဖြစ်၏။ တစ်ခါက Aလုပ်ကို Aင်မတန် မြတ်နိုးတဲ့ AဘွားAိုတစ်ယောက် ရှိတယ်။ သူက ကြက်တန်ွတိုင်း Aိပ်ရာက
လင်းကြက်တန်ွသံကြားလို့
သူ့Aိပ်ရာက ထလာတာနဲ့ Aလုပ်သမားတွေကိုနှိုးပြီး
Aိပ်ရာကထခိုင်းတယ်။ နိုးလာရင် Aလုပ်ခွင် ဝင်ခိုင်းလေ့ရှိတယ်။ ပျင်းရိတဲ့
စောစောစီးစီးလည်း Aလုပ်မလုပ်ချင်ကြဘူး။ ဒီတော့ ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ တိုင်ပင်ကြတယ်။ (သူတို့ ဒီလိုစောစောထ
ဒီပြဿနာ မပေါ်နိုင်တော့ဘူးလို့ တွေးကြတယ်။ ဒီလိုနဲ့ တစ်ရက်မှာ AဘွားကြီးမသိေAာင် ကြက်ကို ခိုးသတ်စားလိုက်ပြီး ကြက်မွေးတွေကို မြေမြှုပ်ပစ်လိုက်တယ်။ AဘွားAိုကတော့ သူ့ကြက်ဖ သာမန် Aခိုးခံလိုက်ရပြီလို့ပဲ ထင်တယ်။ “ငါ့ကြက်ဖ Aခိုးခံလိုက်ရတော့ ကြက်တန်ွသံ မကြားနိုင်တော့ဘူး။ Aဲဒါဆို မိုးလင်းပြီဆိုတာ ဘယ်လိုသိပြီး ငါဘယ်လိုလုပ်စားနိုင်တော့မှာလဲ”လို့ တွေးတောပူပန်တယ်။ ဒါကြောင့် သူဟာ ညဆို တစ်ရေးပဲAိပ်တယ်။ ဆက်Aိပ်လိုက်ရင်
Aချိန်လန်ွသွားမှာစိုးတဲ့Aတွက်
Aိပ်ရာကထတယ်။ ပြီးတော့ Aလုပ်သမားတွေကို Aလုပ်လုပ်ဖို့ သွားနိုးတော့တာပဲ။ တစ်ခါတစ်လေ Aလုပ်သမားတွေ
Aိပ်ရာဝင်ကာစ သန်းကောင်ကျော်ရုံပဲ ရှိသေးတယ်။
Aလုပ်သမားတွေဟာ စောစောစီးစီးAိပ်ရာက ထပြီး Aလုပ်ဝင်ကြရတော့တာပဲ။ Aခုတော့ ကြက်ဖကြီးကို သတ်မိတာ သူတို့မှားတယ်လို့ မြင်လာကြပြီလေ။ ကျွန်ုပ်ကို Aလုပ်သမားများက ဤသို့ ပြောလေသည်။ “ကြက်ဖတွန်လို့ နှိုးတုန်းကမှ Aချိန်မှန်သေးတယ်။ Aခုတော့ AဘွားAိုက သူနိုးတဲ့Aချိန် ကျုပ်တို့ကို နှိုးတယ်။ တစ်ခါတလေ သန်းကောင်ကျော်ထပြီး ကျုပ်တို့Aလုပ်လုပ်ကြရတယ်။ဒီဒုက္ခက လွတ်ေAာင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ” ကျွန်ုပ်ဟာ Aလုပ်ရှင်AဘွားAိုထံ သွားကာ ဆွေးနွေးရလေသည်။ “ဒီကိစ္စ ပြေလည်သွားေAာင် နောက်ထပ်ကြက်ဖတစ်ကောင် Aစားဝယ်လိုက်ပါ”
သို့သော် AဘွားAိုက လက်မခံ။ “ဟိုတစ်ကောင်တုန်းကတော့ ဘူးသီးနဲ့တွေ့သွားပြီ။ ဒီတစ်ကောင်လည်း Aာလူးနဲ့တွေ့Uီးမှာပဲ” သူ့ကြက်ကို
မသိဆိုတ့Aဲတွက်
ဆိုလေသည်။) “သူတို့ကို တမင် သင်ခန်းစာပေးချင်လို့ Aခုလို မနက်မတိုင်မီ နှိုးပြီး ခိုင်းနေတာပဲ” ဟုဆိုသည်။ AဘွားAို၏လုပ်Aား ခေါင်းပုံဖြတ်မှုကို မာ့က်စ်၏ ‘Aပိုတန်ဖိုး ထုတ်လုပ်မှု သီAိုရီ’ထဲတွင် ရှာမတွေ့ခ့ပဲါ။ AဘွားAိုက“မင်းမပူနဲ့ ငါလည်း ဒီလောက် သင်ခန်းစာပေးရတာ ကျေနပ်ပါပြီ။ မနက်ဖြန်ကစပြီး Aချိန်မှန်ပါတော့မယ်” “ခင်ဗျား ကြက်ဖတစ်ကောင်ဝယ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီပေါ့” “ဟင့်Aင်း... စားပွတဲင်နှိုးစက်နာရီတစ်လုံး ဝယ်လိုက်တာ” မှန်ပါသည်။ စားပွတဲင်နာရီသည် Aာလူးနှင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဘူးသီးနှင့်သော်လည်းကောင်း တွေ့နိုင်ရန် Aကြောင်းမရှိပါ။
ဟဒယမဂ္ဂဇင်း၊ Eပြီလ၊ ၂၀၀၆ခုနှစ်။
သိုးကျောင်းသားနှင့် ဝံပုလွေ တစ်နေ့သ၌
ကျနွ်ုပ်သည်
လမ်းလျှောက်ထက်ွလာစU်
ပုံပြင်ထတွဲင် ဖြစ်သဖြင့်
သွားမယ်ပြုခိုက် ဝံပုလွေက လှမ်းကာ နှုတ်ဆက်သဖြင့် မလွှဲသာဘဲ စကားစမြည် ပြောဆိုရလေသည်။ “ကျုပ်ကတော့
ပုံပြင်ထမှဲာ
လမ်းလျှောက်တ့သဲူပါ။
သဘာဝမကျဘူး။ ယုတ္တိမရှိဘူး။ တချို့ပုံပြင်တွေကျတော့ ပေးတဲ့သင်ခန်းစာတွေက မှားယွင်းနေတယ်။ ကျွန်ုပ်Aတွေ့AကြုံAရတော့ လူတွေဟာ ပုံပြင်တွေကို မယုံသင့်ကြဘူး။ ဒါထက်ခင်ဗျားရော ပုံပြင်တွေ ဖတ်သလား” လို့ သူ့ကို မေးတော့ သူက“ဖတ်တာပေါ့။ သိပ်ဖတ်တာပေါ့။ ကျုပ်Aကြိုက်ဆုံးကတော့ Aီစတ်ွပုံပြင်ပဲ”လို့ဖြေတယ်။ ကျွန်ုပ်က“Aခု
ခင်ဗျား ဘယ်သွားမလို့လဲ မေးတော့
သူကရယ်ကျဲကျဲနဲ့ တောင်ပေါ်က သိုးကျောင်းသားကို
သွားစားမလို့” လို့ပြောပြီး ထွက်သွားတယ်။ သူထက်ွသွားမှ သတိရတယ်။ ဒီပုံပြင်ကို ကျနွုပ်ဖတ်ဖူးတယ်။ ပုံပြင်က ဒီလိုပါ။ တစ်ခါတုန်းက
တောင်စောင်းမှာ နေ့စU် သိုးကျောင်းလေ့ရှိတယ်။ သူဟာ သိုးကျောင်းနေရတာ တစ်ယောက်တည်းမို့ ပျင်းလျှင် တောင်စောင်းကနေပြီး“ဝံပုလွေဗျို့... ဝံပုလွေ... လာကယ်ကြပါUီး” လို့
ရရာလက်နက်ဆြွဲ ပီး တကယ်မလာဘဲ
တောင်ခြေမှာ Aလုပ်လုပ်နေတဲ့ လူတွေကလည်း
Aဲဒီလူတွေကို ကြည့်ပြီး ရယ်မောနေတာပေါ့။ ကောင်လေးဟာ
‘ဝံပုလွေလာပြီ။ ဝံပုလွေလာပြီ’ဆိုတဲ့ေAာ်သံကြားပေမယ့် သူတို့ဟာ ရောက်မလာတော့ဘူးတဲ့။ “Aလကားပါကွာ...
ကောင်လေးဟာ ဝံပုလွေမလာဘဲ တို့ကိုနောက်ပြောင်ချင်လို့ေAာ်နေတာပါ”လို့
ပြောပြီး ကိုယ့်Aလုပ်ပဲ ကိုယ်ဆက်လုပ်နေကြတော့တယ်တ့။ဲ ဒီလိုနဲ့
သိုးတွေကလည်း Aလန့်တကြား ပြေးလွှားကြတယ်။ ကောင်လေးကလည်း“ဝံပုလွေ လာပြီ။ ဝံပုလွေ လာပြီ”
လို့ Aသံကုန်ေAာ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ တောင်ေAာက်က လူတွေကတော့ ကောင်လေး Aရင်ကလိုပဲ နောက်တယ်ထင်ပြီး
လူတွေရောက်လာမှာစိုးပြီး ကောင်လေးကိုAရင် ကိုက်သတ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သူကြိုက်တဲ့ သိုးတွေကို သတ်စားတယ်။
ဝမ်းနည်းသွားကြတယ်။ ပုံပြင်လေးကတော့ Aဲဒါပါပဲ။ ကျွန်ုပ်လည်း
ကောင်လေးဆီကို ဝံပုလွေတစ်ကောင် သွားနေပြီ ဆိုတ့Aဲကြောင်းပေါ့။ သူတို့က“မပူပါနဲ့ဗျာ။ ကောင်လေးသိုးကျောင်းတဲ့နေရာမှာ တယ်လီဗီးရှင်းကင်မရာ ကျနွုပ်တို့ ဆင်ထားပါတယ်။ ဒီဝံပုလွေလာတာနဲ့ ကျုပ်တို့သိမှာပဲ” လို့
ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ သူတို့လည်း လက်နက်တွေဆြွဲ ပီး တောင်ပေါ်တက်သွားကြတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ခေတ်ကြီး
ဟဒယမဂ္ဂဇင်း၊ မေလ၊ ၂၀၀၆ခုနှစ်။
မြေခွေးနှင့် ကြက်ဖ တစ်နေ့သ၌ ကျနွ်ုပ်သည် ပုံပြင်ထမှဲာ လမ်းလျှောက်လာစU် မြေခွေးတစ်ကောင်နှင့် ကြက်ဖတစ်ကောင်ကို တွေ့ရလေသည်။
သစ်ပင်ေAာက်မှ ထိုင်ကာ စကားဆိုနေကြသည်။ မြေခွေးက“မင်္ဂလာပါ ကြက်ဖ... ခင်ဗျားရဲ့တွန်သံက တကယ်မင်္ဂလာနဲ့ ပြည့်စုံတာပဲ။ ကျုပ်ပြောမယ့်သတင်းက ဒီထက်ပိုပြီး မင်္ဂလာရှိသေးတယ်။ ခင်ဗျားေAာက်ကိုဆင်းပြီး လာနားထောင်ပါလား” လို့ဆိုတယ်။ The Fox and the cock (မြေခွေးနဲ့ ကြက်ဖ) ဆိုတဲ့ ပုံပြင်ကို ကျွန်ုပ်ဖတ်ပြီးပြီ။ ပုံပြင်ထကဲAတိုင်းဆိုရင်တော့
ကြက်ဖကလည်း ပါးနပ်တယ်။ မြေခွေးရဲ့Aကြံကို ရိပ်မိတော့“မလာတော့ပါဘူး ကိုမြေခွေးရယ်. .. Aဲဒီကသာ ပြောပါ။ ကျုပ်ကောင်းကောင်း ကြားနေရတာပဲ။ သတင်းက ဘာသတင်းများလဲ” “ဒီလိုလေ...
မဟုတ်လား။ Aခု ကြောက်စရာ မလိုတော့ဘူး။ ငှက်တွေ၊ ငါးတွေပါမကျန် တိရစ္ဆာန်တွေ Aားလုံးဟာ မဟာမိတ်ဖ့ဖွဲို့
နာကျင်ေAာင် မလုပ်တော့ဘူး” “ဒီသတင်းက တကယ့်သတင်းမှန် ဟုတ်ရဲ့လား” “Aမှန်ပေါ့. .. ကိုကြက်ဖရယ်။ ဝံပုလွေကိုလည်း သိုးကကြောက်ဖို့ မလိုတော့ဘူး။ ကြွက်ကလည်း ကြောင်ကို ကြောက်ဖို့
ခင်ဗျားနဲ့ကျုပ်လည်း Aတူတူကစားနိုင်ပြီ။ သစ်ပင်ေAာက်ကိုသာ ဆင်းခဲ့စမ်းပါ” ဒါပေမဲ့ ကြက်ဖက ဆင်းမလာဘူး။ “ဒီသတင်းက တကယ်မှန်ရဲ့လား” “မှန်ပါတယ်။ သတင်းစာထဲမှာတောင် ပါသေးတယ်” “ကျုပ်ကစာမှ မဖတ်တတ်ဘဲ” “ဒါဆိုရင်လည်း ကျုပ်ပြောတာကို ယုံစမ်းပါ။ ဒါထက် ခင်ဗျား ဘာကို မျှော်ကြည့်နေတာလဲ” “ကျုပ်လား... ကျုပ်က Aပင်ပေါ်ကဆိုတော့ ခပ်လှမ်းလှမ်းကို မြင်ရတယ်။ ဒီဘက်ကိုဆာလောင်နေတဲ့ ခွေးတစ်Aုပ် ဆင်းလာနေတယ်။ ကျုပ်ကြည့်ရတာ သူတို့လည်း သတင်းစာဖတ်ရUီးမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီတော့ တိရစ္ဆာန်တွေ မဟာမိတ်ဖြွဲ့ ကတဲ့သတင်းကို သိကြပုံလည်း မရဘူး” ဒီကြက်ဖ စကားကိုကြားတော့ မြေခွေးက ဟားတိုက် ရယ်တယ်။
“ကိုကြက်ဖ... ခင်ဗျား ဒီနည်းသုံးလို့ မရဘူး။ ကျုပ်က Aီစတ်ွပုံပြင်စာAုပ်ကို ဖတ်ပြီးသား။ ခင်ဗျားက ဒီလိုပဲ လှိမ့်လိုက်ရော
တကယ်တော့ ဘယ်ခွေးမှ မလာပါဘူး” လို့
မရတော့ဘကဲိုး။
ကြက်ဖက“Aင်း... ခင်ဗျားက ကျုပ်Aသား သိပ်စားချင်ပုံရတယ်။ ဒါဆိုရင်လည်း ကျုပ်ကျွေးပါ့မယ်။ တကယ်တော့ ကျုပ်ကလည်း သိပ်မျှော်လင့်ချက် မရှိတော့ဘူး။ ကျုပ် ရေရှည်Aသက်ရှင် မနေနိုင်တော့ဘူး။ ကျုပ်မှာ Aဆိုးဝါးဆုံး ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါ ရနေတာ ကြာပြီ။ ဒီတော့ ခင်ဗျား စားချင်လည်း စားတော့။ ခင်ဗျားAနားကို ကျုပ်လာခဲ့မယ်” လို့ ပြောလိုက်တယ်။ ဒီစကားလည်း ကြားရော... “မင်း ငါ့နားကို မလာနဲ့။ ငါ့နားကို မလာနဲ့” လို့ပြောပြီး မြေခွေးဟာ သစ်ပင်ေAာက်က Aမြန်ဆုံး ထွက်ပြေးသွားတော့တယ်။ ကျွန်ုပ်လည်း Aမြန်ဆုံး Aဲဒီနေရာက
ကြောက်စရာကောင်းတာကိုး။ Aခုပြဲ ကည့်. .. ဒီရောဂါဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးတင်မကဘူး ပုံပြင်ထမှဲာတောင် ကူးစက်နေပြီ။
ဟဒယမဂ္ဂဇင်း၊ ဇွန်လ၊ ၂၀၀၆ခုနှစ်။
ဆားAိတ်တင်လာတဲ့ မြည်း တစ်နေ့တော့
ကျနွုပ်ဟာ ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့ ပုံပြင်ထမှဲာ လမ်းလျှောက်လာရင်း ချောင်းတစ်ချောင်းနား
ရောက်လာတယ်။ Aဲဒီနေရာမှာ ချောင်းကို
ရှိတယ်။ တံတားက ကျU်းလည်းကျU်း၊ AရံAတားလည်း မရှိဘူး။ Aဲဒီနားမှာ မြည်းတစ်ကောင်နဲ့ မြည်းပိုင်ရှင် ကုန်သည်တစ်ယောက်ကလည်း တံတားကို ဖြတ်ကူးဖို့ ပြင်ဆင်နေတာ တွေ့ရတယ်။ မြည်းရဲ့ ကျောပေါ်မှာလည်း ဘယ်ရောညာပါ Aိတ်ကြီးတွေနဲ့ ထည့်ထားတဲ့ ဘာမှန်းခြွဲ ခားမရတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေ တွေ့ရတယ်။ ကျနွုပ်က စပ်စပ်စုစု“မိတ်ဆွေ... ဘာပစ္စည်းတွေများ ရောင်းဝယ်ဖို့ တင်လာတာလဲ” လို့
ခေါ်သွားတယ်။ ကျုပ်တို့ပြောတဲ့စကားကို ဒီမြည်းမကြားစေချင်ဘူးလို့ ပြောတယ်။ “ဒီတိရစ္ဆာန်တွေဟာ
မဟုတ်ဘူးဗျ။ ပုံပြင်တွေထမှဲာဆို
သတ္တဝါတွေချည်းပဲ” လို့ ခပ်တိုးတိုး ပြောသေးတယ်။ ပြီးတော့ သူကဆက်ပြောတယ်။ “ကျုပ်က ဆားကုန်သည်ပါ။ Aရင်ကတော့ ပင်လယ်ကမ်းခြေက ဆားတွေကို ဝယ်ပြီး ကျုပ်တို့Aရပ်မှာ ပြောင်းရောင်းတာပေါ့” လို့ ပြောတယ်။ ဒီတော့မှ ကျုပ်လည်း ကျုပ်ဟာ The Ass with the Load of Salt ပုံပြင်ထဲ ရောက်နေမှန်း သဘောပေါက်သွားတယ်။ ပုံပြင်က ဒီလိုပါ။ တစ်ခါက ပင်လယ်ကနေ မြည်းနဲ့ ဆားAိတ်တင်ပြီး ပြန်လာတဲ့ ကုန်သည်တစ်ယောက်ဟာ ချောင်းကို ဖြတ်ထိုးထားတဲ့ တံတားကျU်းလေးတစ်ခုကို ကူးရင်း သူ့မြည်းဟာ ခြေချော်ပြီး ရေထဲ ကျသွားတယ်တဲ့။ မြည်းဟာ ရုန်းကန်ပြီး ခက်ခက်ခဲခနဲ့ ကုန်းပေါ်
Aိတ်ထကဲဆားတွေကတော့
ချောင်းရေနဲ့ တွေ့ထိတုန်း A တော်များများ A ရည်ပျော်သွားတယ်တ့။ဲ A ဒဲီမှာ သူ သယ်ရတဲ့ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး တော်တော်ပေါ့ပါးသွားတာ မြင်တော့ မြည်းဟာ A င်မတန် သဘောကျသွားတယ်။ ကုန်သည်ကတော့ ဆားတွေ ဆုံးရှုံးကုန်တာပေါ့။ နောက်တစ်ကြိမ် ကျတော့လည်း ဒီလိုပဲ။ မြည်းဟာ တော်တော်ပါးနပ်နေပြီ။ သူပထမ ပြုတ်ကျခဲ့တဲ့ ဒီတံတားပေါ် ရောက်တော့ မတော်တဆ ခြေချော်သလိုနဲ့ ရေထဲကို ဟန်ဆောင် ပြုတ်ကျပြန်တယ်တ့။ဲ ဒီတစ်ခါလည်း ချောင်းရေနဲ့တွေ့ပြီး ဆားတွေ A တော်များများ A ရည်ပျော်ကုန်တယ်။ မြည်းဟာ ရုန်းကန်ပြီး ကုန်းပေါ်ပြန်ရောက်တော့ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး ပေါ့သွားတာ တွေ့ရတယ်။ ငါ တယ်ဟုတ်ပါလားလို့ သူလည်း
ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ နောက်တစ်ခါ ပင်လယ်ကို ကုန်ဝယ်ထက်ွတ့Aဲခါမှာတော့ မြည်းရှင်ဟာ ခါတိုင်းလို ဆားတွေ မဝယ်ဘဲ ရေမြှုပ်တွေ ဝယ်ပြီး မြည်းကိုAသယ်ခိုင်းတယ်။ ဒီလိုနဲ့ Aဲဒီချောင်းကို ဖြတ်တ့တဲံတားပေါ်လည်းရောက်ရော မြည်းဟာ
သူကံဆိုးတယ်လို့ ဆိုရမယ်။ သူ့ကျောပေါ်မှာ Aိတ်နဲ့ ထည့်လာတဲ့ ရေမြှုပ်တွေဟာ ရေနဲ့ တွေ့တော့ ဆားတွေလို
Aရင်ကထက် ပိုပြီး လေးလံနေတာ တွေ့ရတယ်။ သူဟာ Aဲဒီကတည်းက သင်ခန်းစာ ရသွားတော့တယ်။ နောက်တစ်ကြိမ်တွေမှာ ဘာပစ္စည်းတွေပဲ တင်လာတင်လာ ဒီတံတားပေါ်ရောက်ပေမယ့် မတော်တဆ ပြုတ်မကျတော့ဘူးတဲ့။ ပုံပြင်ကတော့ Aဲဒါပါပဲ။ ကျွန်ုပ်က ကုန်သည်ကို သူ့စကား မဆုံးခင်“ဒီတစ်ခါ ခင်ဗျား မြည်း ကျောပေါ်တင်လာတာ ရေမြှုပ်တွေပေါ့” လို့ ပြောလိုက်တယ်။ ကုန်သည်က ကျနွုပ်ကို Aံ့သြသလို ကြည့်ပြီး“ခင်ဗျားလည်း ဒီပုံပြင်ကို ဖတ်ဖူးသလား” လို့ မေးတယ်။ “ကဲ ကြုံတုန်း ဒီလို မိုက်မတဲ့ ကောက်ကျစ်တဲ့ မြည်းတစ်ကောင်ကို ကျုပ်ပညာပေးတာ ခင်ဗျားလည်း ကြည့်သွားပါUီး” လို့ ဖိတ်ခေါ်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ သူနဲ့ သူ့မြည်းဟာ တံတားကို ဖြတ်ကူးတယ်။ ပုံပြင်ထကဲAတိုင်းပဲ မြည်းဟာ ရေထဲ ချော်ကျတယ်။ ရေမြှုပ်တွေက လေးလံလနွ်းလို့ မြည်းဟာ ကုန်းပေါ် ရုန်းမတက်နိုင်ဘူး။ သူနဲ့ ကူပြီး ကျနွုပ်ပါ ရေထဲကနေ ကုန်းပေါ်
ဆွတဲင်ပေးပါတယ်။
ခါးကျိုးပြီး သေရှာပါလေရော။ ဒီတော့ မြည်းရှင်ဟာ မြည်းတစ်ကောင်လုံး ဆုံးပါပြီဆိုပြီး ချောင်းဘေးမှ ထိုင်ငိုနေလေရဲ့။ ကျွန်ုပ်သိတာကတော့ ပုံပြင်တွေမှာလည်း Aချိန်Aဆဆိုတာ ရှိတယ်။ Aချိန်Aဆ လွန်ကဲရင် ဘယ်ဟာမှ မကောင်းဘူးဆိုတာပါပဲ။
ဟဒယမဂ္ဂဇင်း၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၀၆ခုနှစ်။
နွားစာခွက်ထဲက ခွေး တစ်နေ့တွင်
ကျနွုပ်သည်
ပုံပြင်ထတွဲင်လမ်းလျှောက်၍
ညU့်ယံလန်ွပြီးစ မိုးUီးသောက်ကာလ ဖြစ်သည်။ တစ်နေရာတွင် Aိပ်ချင်မူးတူး လမ်းလျှောက်လာသော ခွေးတစ်ကောင်နှင့် ရင်ဆိုင်တိုးရလေသည်။ သူက နိုက်ကလပ်တွင် တစ်ညလုံးကကာ ပြန်လာသော ခွေးဟု ပြောသည်။ ကျနွုပ်က တည်းခိုခန်း တစ်ခုခုတွင်သွားAိပ်ဖို့ ပြောသည်။ “မိတ်ဆွေ စU်းစU်းစားစား ပြောပါ။ ကျုပ်မှာ မှတ်ပုံတင်မှ မရှိဘဲ” ဟုတ်သည်။ တည်းခိုခန်းနှင့် ဟိုတယ်များတွင် တည်းခိုရန် မှတ်ပုံတင်ပြနိုင်ဖို့ လိုသည်။ ဒါဆိုလည်း လမ်းဘေးက သစ်ပင်တစ်ပင်ေAာက်မှာ ထိုးAိပ်လိုက်ပါလား ဆိုတော့“ကျုပ်က
နေရာလေးတစ်ခုတော့ ရမှ ဖြစ်မယ်” လို့ပြောတယ်။ သူ့Aိမ်ကလည်း ပြန်ဖို့ ဝေးပုံရတယ်။ ဒါမှမဟုတ် Aိမ်ခြေရာခြေ မရှိတဲ့ ခွေးတစ်ကောင် ဖြစ်ပုံရတယ်။ နောက်တော့ သူသတိရပြီး“ဟော... ကျုပ်သိပြီ။ ဒီနားမှာ နွားတင်းကုပ်တစ်ခုရှိတယ်။ Aဲဒီကို သွားမယ်။ သူတို့ရဲ့ နွားစာခွက်ဟာ ကောက်ရိုးပုံတွေနဲ့ ပြည့်နေတာပဲ။ Aဲဒီထဲ ခုန်တက်ပြီး Aိပ်လိုက်ရရင် ဇိမ်ပဲ။ ကြယ်ငါးပွင့်ဟိုတယ်က ဒီလက်စ်Aခန်းနဲ့တောင် မလဲနိုင်ဘူး” လို့ ပြောတယ်။ ကျွန်ုပ်က“ကျုပ် ဒီပုံပြင်ကို ဖတ်ဖူးတယ်။ ခင်ဗျားကို နွားတွေက Aပြစ်လိမ့်မယ်” လို့ ပြောပေမယ့် သိပ်Aိပ်ချင်နေတော့ သူ ဂရုစိုက်ပုံမရဘူး။ နွားတင်းကုပ်ဆီပဲ ထွက်သွားတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်ုပ်လည်း AခြေAနေကို သိရေAာင် နောက်ကနေ လိုက်သွားကြည့်တယ်။ ခွေးပြောတာ မှန်တယ်။ နွားတင်းကုပ်ထမှဲာ ကောက်ရိုးတွေ ပြည့်နေတဲ့ နွားစာခွက်ကြီး ရှိတယ်။ ခွေးဟာ Aဲဒီ နွားစာခွက်ထဲ ခုန်တက်ပြီး ဇိမ်နဲ့ လှလဲိုက်တယ်။ ကျွန်ုပ်က“မကြာခင် နွားတွေ ရောက်လာလိမ့်မယ်။ သူတို့က ကောက်ရိုးတွေကို ဆွစဲားရင် မင်းကို လှုပ်နှိုးသလို ဖြစ်လိမ့်မယ်” ဆိုတော့ ခွေးက“Aဲဒါဆို ကျုပ်က ဝုန်းခနဲ ထပြီး ရန်တွေ့လိုက်မှာပေါ့။ ထွက်သွားကြစမ်း။ ဒီမှာ ကျုပ်ရှိနေတာ မမြင်ဘူးလား။ ခင်ဗျားတို့ လာမထိန့လဲို့ ပြောပစ်လိုက်မယ်” လို့ ဆိုတယ်။ ပုံပြင်ထမှဲာတော့ ဒီAတိုင်းပဲ။ နွားတွေက လက်မှိုင်ချပြီး“ဒီခွေးဟာ တော်တော် တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တယ်။ ကောက်ရိုးတွေကို သူကိုယ်တိုင်လည်း စားလို့ မရဘဲနဲ့ သူများကိုလည်း စားခွင့်မပေးဘူး” လို့ Aပြစ်တင်ကြမယ်။
ကျွန်ုပ် စောင့်ကြည့်နေတုန်းပဲ နွားတင်းကုပ်ထကဲို နွားတွေဝင်လာတယ်။ သူတို့ဟာ Aလုပ်လုပ်ရာက ပြန်လာကြတာဆိုတော့ တစ်ယောက်တစ်ပေါက်
မောပန်းဆာလောင်လာကြတယ်။ ဆွစဲားကြတယ်။
နားရွက်တစ်ဖက်ကို ကိုက်မိပြီး နွားတစ်ကောင်က ခွေးရဲ့ Aမြီးကို ကိုက်မိတယ်။ ခွေးဟာ နာလွန်းလို့ Aိပ်နေရာက လန့်နိုးပြီးေAာ်တယ်။ “ခင်ဗျားတို့ကျုပ်Aိပ်နေတာ မမြင်ကြဘူးလား” မေးတော“ဒါ မင်းရဲ့Aိပ်ရာမဟုတ်ဘူး။ နွားစာခွက်ကွ” “မင်းမြန်မြန်မဆင်းရင် တို့Aဆိုးမဆိုနဲ့” ဒီတော့ ခွေးဟာ ဟိန်းဟောက်မနေနိုင်ဘဲ ခုန်ဆင်းလိုက်ရတယ်။ “နွားတွေက ခွေးဟောက်သမျှ ခံရမယ်လို့ မကြားဖူးပါဘူး” “ဒီAီစတ်ွဆိုတဲ့ လူဟာ စိတ်မှ နှံ့ရဲ့လားမသိဘူး” “ေAး... ဒီခွေးကတော့ စိတ်နှံ့ပုံမရဘူး။ ဒါကြောင့် နွားစာခွက်ထဲ ဝင်Aိပ်တာပေါ့” နွားတစ်ကောင်က ကန်လိုက်တယ်။ နွားတစ်ကောင်က ချိုနဲ့ လိုက်ဝှေ့တာနဲ့ နွားတင်းကုပ်ထကဲAသက်လု ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်တ့။ဲ
ဟဒယမဂ္ဂဇင်း၊ သြဂုတ် လ၊ ၂၀၀၆ခုနှစ်။
ရွှေU Uသော ငန်း တစ်နေ့တော့
ကျနွုပ်ဟာ
ဒါနဲ့AနီးAနားမှာ တွေ့တဲ့ လူတစ်ယောက်ကို“ဒီရွာမှာ AထူးAဆန်း ဘာများရှိသလဲဗျာ” လို့မေးမိတယ်။ ရွာကို ကြည့်ပြီး စိတ်ထကဲတော့ ဘာမှ ထူးထူးဆန်းဆန်း ရှိမယ့်ရွာ မဟုတ်ဘူးလို့ တွေးမိလိုက်သေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်ုပ်Aမေးခံရတဲ့သူက Aားတက်သရောပုံစံန့-ဲ “ထူးထူးဆန်းဆန်း... ဟုတ်လား။ ရှိပါ့ဗျာ... ရှိပါ့။ ကျနွုပ်တို့ရွာ ထဲက လူတစ်ယောက်ဆီမှာ ငန်းတစ်ကောင် ရှိတယ်။
မဟုတ်ဘူး။ တစ်နေ့ကို ရွှေU တစ်U မှန်မှန်Uပေးနိုင်တဲ့ ငန်းပေါ့ဗျာ” လို့ ပြောတယ်။ ဒီစကားမေးတော့မှ ကျနွုပ်လည်း ငါဟာ Aီစတ်ွပုံပြင်ထကဲ‘ရွှေU Uတဲ့ငန်း’ ပုံပြင်ထဲ ရောက်နေတာပဲလို့ သိသွားတော့တယ်။ Aဲဒီလူက ဆက်ပြောသေးတယ်။ “ဒီငန်းAကြောင်းကတော့
မသိတ့သဲူ
ဘယ်လောက်ပေးရ ပေးရ ပေးဝယ်မယ်ဆိုတဲ့ သူဌေး သူကြွယ်တွေလည်း ဒုန့ေဲဒး။ ဒါပေမဲ့ ငန်းပိုင်ရှင်က ဘယ်သူ့မှ
မိုက်မတဲ့
ဘယ်သူက မိုက်မမှဲာလဲဗျာ” ကျွန်ုပ်ကတော့
တားရေAာင်ဆိုပြီး Aဲဒီလူ Aိမ်ဘက် ထွက်လာခဲ့တယ်။ ခင်ဗျားတို့လည်း သိကြမှာပေါ့။ Aဲဒီငန်းပိုင်ရှင်ဟာ လောဘတက်ပြီး တစ်နေ့ ရွှေUတစ်U Uပေးနေတာကို မကျေနပ်ဘဲ ဒီငန်းရဲ့ ဗိုက်ထမှဲာ ရွှေUတွေ Aများကြီးရှိမှာဘဲလို့ဆိုပြီး ဗိုက်ခလွဲိုက်တာ ငန်းလည်းဆုံး၊ ရွှေUတွေလည်းဆုံး ဖြစ်ရော မဟုတ်လား။ AဲဒီAိမ်ဘက်ရောက်တော့
Aင်းလေ... Aခုတလော ရွှေဈေးတွေကလည်း ကောင်းတော့ ဒီလောက်တော့ ရှိမှာပေါ့။ ငန်းပိုင်ရှင်က သူ့ငန်းကြီး တပိုက်ပိုက်နဲ့ တစ်ခုခု လုပ်ဖို့ ပြင်နေတာနဲ့ မေးကြည့်တော့. .. “ဒီငန်းကို ဒီAတိုင်းမထားတော့ဘူးဗျ။ တစ်ချီတည်း ပွပေါက်ကြံမလို့” လို့ ပြောတယ်။ ဒီလူဟာ ပုံပြင်ထကဲပါတဲ့Aတိုင်း လုပ်တော့မယ် ထင်ပါရဲ့။ ဒါကြောင့် ကျွန်ုပ်က ပျာပျာသလဲ တားရတယ်။ ငန်းရဲ့ ဗိုက်ကိုခြွဲ ကည့်ရင် ခင်ဗျား ထင်သလို ရွှေUတွေတွေ့ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ ငန်းသေမှာပဲလို့ ပြောတယ်။ ဒီတော့ ငန်းပိုင်ရှင်က ရယ်မောပြီး“ကျုပ်က ဒီလောက်မိုက်မပဲါ့မလား။ ငန်းဗိုက်ကို ခွမှဲ ငန်းသေမှာပေါ့”
“ဒါဆို ခင်ဗျားက ဒီငန်းနဲ့ Aပွကြံမယ်ဆိုတာ...” “ဒီငန်းကို ဈေးကောင်းကောင်းနဲ့ ရောင်းထုတ်တော့မလို့ဗျ။ ဝယ်ချင်တ့သဲူတွေက ဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတာ။ AဲဒီထကဲဈေးAများဆုံး ပေးနိုင်တ့သဲူကို ရောင်းလိုက်မယ်” မကြာခင် ကျုပ်ရှေ့မှာပဲ ငန်းဝယ်မယ့်လူ ရောက်လာတယ်။ ငန်းပိုင်ရှင်ကလည်း ဈေးကောင်းကောင်းနဲ့ ရောင်းလိုက်တယ်။ သူ ဈေးကောင်းကောင်း ရတယ်ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်နေ့ ရွှေU တစ်U Uပေးနေတဲ့
လွယ်လယ်ွနြဲ့ ဖတ်လို့
ဒါကြောင့်“ကျုပ်သာဆိုရင် မရောင်းဘူး” လို့ ပြောလိုက်တယ်။ ငန်းပိုင်ရှင်က ပြုံးလိုက်ပြီး“Aဖြစ်မှန်ကို သိရင်တော့ ခင်ဗျားလည်း ရောင်းမှာပါပဲ။ ကျုပ်ငန်းက ကြက်ငှက်တုပ်ကွေး ရောဂါ ဖြစ်နေပြီ။ ကြာကြာမနေရတော့ဘူး” ဒီငန်းပိုင်ရှင်ကိုမှ လည်တယ်မပြောရင် ဘယ်သူ့ကို ပြောရတော့မလဲဗျာ။
ဟဒယမဂ္ဂဇင်း၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၀၆ခုနှစ်။
ကန္တာရထဲက ရေ တစ်နေ့သ၌
ရောက်ရှိသွားလေသည်။ မတွေ့။
Uီးတည်လျှောက်လာမိသည်။ သူတို့ထံမှ ရေတောင်းသောက်ရန်
ရည်ရယ်ွချက်ဖြင့်
ကျွန်ုပ် ထိုနေရာသို့ရောက်သောAခါ စိတ်ပျက်Aားလျော့၍ သွားသည်။ ထိုသူတို့ကား ကျွန်ုပ်က့သဲို့ပင် သဲကန္တာရထဲ၌
ငါးရာဖြစ်ကြောင်း တွေ့လိုက်ရသောကြောင့် ဖြစ်၏။ ကျနွုပ်က ထိုလှည်းသားငါးရာ၏ AကြီးAမှူးAား“ဘယ်Aရပ်ကလဲ” ဟု မေးသောAခါ“ဗာရာဏသီပြည်ကပါ” ဟု ဖြေလေသည်။ ဒီတော့မှ ကျွန်ုပ်သည် ငါးရာ့ငါးဆယ်နိပါတ်တော် ဝဏ္ဏပထဇာတ် (ဝဏ္ဏပထ= သဲခရီး) ထဲ ရောက်နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သတိထားမိတော့သည်။ လှည်းမှူးကြီးက ပုံပြင်ထကဲAတိုင်းပင် သဲကန္တာရထဲမှ မြေဇာမြက် ပေါက်နေသော နေရာကို တွေ့လေရာ“ဟောဒီမှာ Aစိုဓါတ်ရှိလို့ မြက်ပင် ပေါက်တာပဲ။ ဒီနေရာကို တူးကြ” ဟု ညွှန်ပြလေသည်။ လှည်းသားငါးရာလည်း လှည်းမှူးကြီး ညွှန်ပြသော နေရာကို Aားကြိုးမာန်တက် တူးကြလေသည်။
ထိုင်စောင့်နေစU် လှည်းမှူးကြီးရောက်လာကာ“ခင်ဗျားမှာ လက်ကိုင်ဖုန်း ပါသလား။ ခဏငှားပါ” ဟု ဆိုလေသည်။ ကျနွုပ်ငှားလိုက်သောAခါ ခပ်လှမ်းလှမ်းသို့ သွားကာ ဖုန်းဆက်နေသည်ကို တွေ့ရ၏။ လှည်းသားငါးရာ တူးကြသည်မှာ Aတောင်ခြောက်ဆယ် ရောက်၍သွားသည်။ သို့သော် ရေကိုကား မတွေ့။ ကျောက်ဖျာကြီး
သွားကြလေသည်။ ကျွန်ုပ်လည်း လှည်းမှူးကြီးထံ သွားကာ“ဒီကျောက်ဖျာကြီးကို ခွဲခိုင်းလိုက်လေဗျာ။ ဒါဆိုရေတွေပန်းထွက်လာမယ် မဟုတ်လား” ဟု ပြောလိုက်မိ၏။ လှည်းမှူးကြီးကေAးေAးလူလူAမူAရာဖြင့်“Aဲဒါ ကျုပ်သိတယ်လေ။ ကျောက်ဖျာကြီးကို နားကပ်ထောင်တော့ေAာက်က ရေသံကြားရတယ်” “ခင်ဗျား ဒီAတိုင်းဆို လူတွေ ရေငတ်သေတာ ကြည့်နေမယ်ပေါ့” “ဒီကိစ္စAတွက် မပူပါနဲ့။ Aခုနပဲ ခင်ဗျားလက်ကိုင်ဖုန်းနဲ့ ကျုပ်ရေသန့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို ဖုန်းဆက်ထားတယ်။ မကြာခင် သူတို့ ရောက်လာကြလိမ့်မယ်” သူပြောသည့်Aတိုင်းပင် ရောက်ရှိလာကြသည်။
ဝယ်သောက်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်လည်း ရေသန့်တစ်ဘူး ဝယ်သောက်လိုက်ရသည်။ လှည်းမှူးကြီးမှာ ဈေးရောင်းထွက်လာရာ ဈေးရောင်းမည့် နေရာမရောက်မီမှာပင် Aမြတ်Aစွန်းများစွာ ရရှိသွား၏။ မကြာခင် လှည်းမှူးကြီးUီးစီးသည့် လှည်းသားငါးရာ ခရီးဆက်လက် ထွက်ခွာ သွားလေသည်။ ကျွန်ုပ်လည်း ထိုနေရာကပင် လှည့်ပြန်လာခဲ့သည်။ Aိမ်ရောက်မှ သတိရတော့သည်။ လှည်းမှူးကြီးထံတွင် ကျွန်ုပ်၏ လက်ကိုင်ဖုန်း မေ့ပါသွားလေသည်။ (မှတ်ချက်။
။ လူကြုံရှိလျှင် ပြန်ပေးပါရန်)
ဟဒယမဂ္ဂဇင်း၊ေAာက်တိုဘာလ၊ ၂၀၀၆ခုနှစ်။
သစ်ခုတ်သမားနှင့် ရွှေပုဆိန် တစ်နေ့တော့ ကျနွုပ်ဟာ ပျင်းပျင်းနဲ့ လမ်းလျှောက်လာရင်း မြစ်ကမ်းပါးတစ်ခုကို ရောက်ရှိသွားပါတယ်။ Aဲဒီမြစ်ကမ်းပါးAစပ်မှာ ပေါက်နေတဲ့ သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ကို သစ်ခုတ်သမားတစ်ယောက် ခုတ်နေတာ တွေ့ရတယ်။ Aဲသလို ခုတ်နေတုန်းပဲ သူ့လက်ထကဲပုဆိန်ဟာ လွတ်ထက်ွပြီး ရေထဲ ကျသွားတယ်။ ဒီလူပုံစံက
ထပ်ဝယ်နိုင်ပုံမရဘူး။ Aဲဒီ မြစ်ကမ်းပါးမှာ ထိုင်ငိုနေတော့တာပဲ။ “Aင်း...
ငတ်သေတော့မှာပဲ” Aဲသလို ငိုနေတာကို ကောင်းကင်က ပျံသန်းသွားတဲ့ မာကျူရီနတ်သားက ကြားသွားပြီး ဆင်းလာတယ်။ AကျိုးAကြောင်းကို မေးတယ်။ Aဲဒါကို မြင်တော့ ကျနွုပ်ဟာ Aီစတ်ွပုံပြင်ထကဲMercury and the Woodmen ပုံပြင်ထဲ ရောက်နေပါလားလို့ သဘောပေါက်သွားတယ်။ ဒါနဲ့ Aနားက ရပ်ပြီး AခြေAနေကို Aကဲခတ်ကြည့်နေမိတယ်။ AကျိုးAကြောင်းကို သိတော့ မာကျူရီနတ်သားက သူ ကူညီပါ့မယ်ဆိုပြီး ရေထဲက ရွှေပုဆိန်တစ်လက် ဆယ်ပေးတယ်။ “ဒါသင့် ပုဆိန်လား” ဆိုတော့“မဟုတ်ဘူး” လို့ သစ်ခုတ်သမားက ငြင်းတယ်။ နောက်ဆုံး သံပုဆိန်ကို ဆယ်ပြီး ပြတော့မှ ဝမ်းသာAားရ“ဒါမှ ကျုပ်ပုဆိန်ပါပဲ” လို့ဆိုတယ်။
ရွှေပုဆိန်၊ ငွေပုဆိန်တွေပါ လက်ဆောင်ပေးပြီး ပြန်သွားတယ်။ ကျွန်ုပ် ကြည့်နေတုန်းမှာပဲ Aဲဒီ သစ်ခုတ်သမားဟာ သူ့လက်ထကဲရွှေပုဆိန်နဲ့ ငွေပုဆိန်ကို ရေထဲ ပြန်လွှင့်ပစ်လိုက်တယ်။ သူ့ပုဆိန်ပဲ သူAမြတ်တနိုးယူပြီး Aိမ်ပြန်မယ်လုပ်တော့ ကျနွုပ်က သူ့Aနားသွားပြီး ချီးကျူးစကား ပြောခဲ့တယ်။ “ကျုပ်တွေ့ဖူးသမျှ
ပုံပြင်တွေထမှဲာတော့
ငွေပုဆိန်တွေကိုတောင် သူ့ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူး ငြင်းခဲ့တယ်။ ခင်ဗျားကတော့ သူ့ထက်သာတယ်။ သူက ရွှေပုဆိန်၊ ငွေပုဆိန်တွေရတော့ Aိမ်ပြန်ယူသွားခဲ့တယ်။ ခင်ဗျားကတော့ ရေထဲ ပြန်လွှင့်ပစ်ခ့တဲယ်။ ခင်ဗျားက ပိုပြီး မက်မောတွယ်တာမှုကို ချိုးနှိမ်နိုင်တယ်” ဆိုတော့ သစ်ခုတ်သမားက ကျနွုပ်ကို Aံ့သြသလို ကြည့်ပြီး“ခင်ဗျား
စU်းစားကြည့်။ ကျုပ်က ထင်းခုတ် Aသက်မွေးသူပဲ။ ရွှေပုဆိန်၊ ငွေပုဆိန်ဆိုတာ သံပုဆိန်လို ဘယ်မှာ
Aိမ်သယ်မသွားတော့ဘဲ ဒီနေရာမှာဘဲ လွှင့်ပစ်ခ့တဲာ”
။တစ်ခါတစ်ရံ၌ ရိုးသားခြင်းသည် နုံAခြင်းနှင့် ဒင်္ဂါးတစ်ပြား၏ ခေါင်းနှင့် ပန်းလို
ကပ်လျှက်ရှိတတ် သည် ) နောက်တစ်ရက်ကျတော့ ဒုတိယ သစ်ခုတ်သမားကို တွေ့ချင်တာနဲ့ ကျွန်ုပ်လည်း Aဲဒီမြစ်ကမ်းပါးကို လျှောက်သွားခဲ့မိတယ်။
ထင်တ့Aဲတိုင်းပဲ
လွှတ်ချလိုက်ပြီး ထိုင်ငိုနေတယ်။ ထုံးစံAတိုင်းပေါ့
မာကျူရီနတ်သား ပေါ်လာပြီး AကျိုးAကြောင်း
မေးတယ်။ ပြောပြတော့“မပူနဲ့. .. သင့်ပုဆိန်ကို ပြန်ရေAာင် ကျုပ်တာဝန်ယူပါတယ်” ဆိုပြီး
သစ်ခုတ်သမားကို ပြပြီး“ဒါသင့် ပုဆိန်လား” လို့ မေးတော့- သစ်ခုတ်သမားAတုက ဝမ်းသာAားရ ဟန်တောင်မဆောင်ပဲ“Aစစ်ပေါ့. .. ဒါ... ကျုပ်ပုဆိန်ပဲ” လို့ ပြောတယ်။ မာကျူရီနတ်သားဟာ“သင့်ပုဆိန်ဆိုလည်း သင် ယူသွားပေတော့” ဆိုပြီး ပေးလိုက်တော့
Aဲဒီလူက ရွှေပုဆိန်ကို ယူကာ ဝမ်းသာAားရ ထွက်သွားပါတယ်။ ကျနွုပ်
Aံ့Aားသင့်သွားတယ်။ တကယ့်ပုံပြင်ထမှဲာက ရွှေပုဆိန်ကို မပေးဘဲ မာကျူရီနတ်သားက ပျောက်သွားလို့ ဒီလူရဲ့ သံပုဆိန်ပါ ဆုံးရတဲ့Aကြောင်း ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်က မာကျူရီနတ်သားကို“နတ်သား... ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲ။ ဒီလူက သစ်ခုတ်သမားAတု” လို့ပြောတော့ နတ်သားက“ကျုပ်သိပါတယ်။ သူ့ကို ပေးလိုက်တာလည်း ရွှေရည်စိမ်ထားတဲ့ ပုဆိန်Aတုကြီးပါ” လို့ ပြောတယ်။
လိမ်လည်မှုဖြင့် Aဖမ်းခံခ့ရဲလေသည်။ ဟဒယမဂ္ဂဇင်း၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၀၆ခုနှစ်။
Aကြံကြီးသော မျောက်များ တစ်နေ့သ၌ ကျနွုပ်သည် ပျင်းပျင်းရှိလာသည်နှင့် ပုံပြင်ထတွဲင် လမ်းလျှောက်ရင်း ရေကန်တစ်ကန်Aနီးသို့ ရောက်၍ သွားလေသည်။ ထိုရေကန်Aနီးတွင် ဝန်းရံနေသော မျောက်တစ်Aုပ်ကိုလည်း တွေ့ရလေသည်။ မျောက်တွေသည်
မဆင်းသည်ကို မြင်သဖြင့် မေးမြန်းကြည့်သောAခါ မျောက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဟန်တူသော မျောက်က“ဒီရေကန်ကို ကျနွုပ်တို့ လေ့လာကြည့်တဲ့Aခါ ကန်ထဲသို့ ဆင်းသွားတဲ့ ခြေရာကိုသာ တွေ့ရတယ်။ ပြန်တက်လာတဲ့
ဘီလူးစောင့်တ့ကဲန်
ဒါကြောင့် ငံ့လင့်နေတယ်” လို့ ဖြေတယ်။ AဲဒီAချိန်မှာပဲ ကန်ရေပြင်ကို ခြွဲ ပီး ဘီလူးက ထွက်လာတယ်။ “မျောက်တွေ
ဆင်းသောက်ကြပါလား” လို့ ဆိုတယ်။ ဒီတော့မှ မျောက်မင်းက“ငါတို့ဆင်းသောက်ရင် သင်စားမှာ မုချပဲ။ သင်မစားနိုင်ေAာင် ငါတို့ ကြံမယ်” ဆိုပြီး Aဲဒီနေရာက ထွက်သွားတယ်။ ဒီတော့မှ
ပုံပြင်ထတွဲင်
ကန်စပ်တွင် ပေါက်နေသော ကျူပင်တို့ကို ခူးကာ သစ္စာပြု၍ နှုတ်သီးဖြင့် မှုတ်တ့Aဲခါ ကျူပင်ကျူရိုးတွင် ရှိသော
ကန်ထမှဲ
မျောက်တစ်ကောင်ကိုမှ မစားရဘဲ ရှိလေသည်။ (ဒါဝင်၏ AဆိုAရ မျောက်က ဆင်းသက်လာသော လူတို့သည်
AေAးသောက်သောဓလေ့ ထွန်းကားနေဟန် ရှိပေသည်) Aတွေးစကို
ကျနွုပ်Aား
ဘီလူးပြုံး ပြုံးပြကာ“ဒီလို ကျူပင်တွေကို ကျုပ်က ကြိုတင်ခုတ်ထားလိုက်တော့ မျောက်တွေ ရေသောက်ချင်ရင် ရေကန်ထဲ မဆင်းဘဲ နေလို့ မရတော့ဘူးပေါ့” ဟု
ပိုက်ကို ရေထဲချကာ စက်ဖြင့်
Aားရပါးရ ဆော့ကြတော့သည်။ ဘီလူးကား မျောက်တွေ ရေကန်ထဲသို့ မဆင်းသဖြင့် တစ်ကောင်မှ မစားနိုင်ဘဲ ရှိလေသည်။ သို့သော် Aပျော်လန်ွနေသော
သေဆုံးကုန်လေရာ ဘီလူးသည် မျောက်သားကို Aားရပါးရ စားလိုက်ရသည်ဟု ဆိုလေသည်။
ဟဒယမဂ္ဂဇင်း၊ Eပြီလ ၊ ၂၀၀၇ခုနှစ်။
ရွှေU Uသောငန်း(၂) တစ်နေ့သ၌ ကျနွုပ်သည် ပျင်းပျင်းရှိသည်နှင့် ပုံပြင်ထတွဲင် လမ်းလျှောက်သွားရာ ရွာလေးတစ်ရွာ သို့ ရောက်ရှိသွားလေသည်။ ဆင်တူယိုးမှားသာ
ကျနွုပ်မရိပ်စားမိပါချေ။
မတွေ့ရသဖြင့် Aနီးရှိရွာ သားတစ်UီးAား မေးကြည့်ပါလေမှ ထိုသူက“ဒီရွာထက်ထူးဆန်းတဲ့ရွာ ငန်းမကြီးတစ်ကောင်
ကဲ. .. မဆန်းဘူးလား” ဒီတော့မှ ကျွန်ုပ်လည်း ကျွန်ုပ်ရောက်နေသောပုံပြင်သည် Aီဂျစ်ပုံပြင်ထမှဲ ရွှေU Uသောငန်း (The Goose with the Golden Eggs ) ပုံပြင်ဖြစ်ကြောင်း ရိပ်စားမိသွားလေသည်။ ဤပုံပြင်ထတွဲင်ငန်းပိုင်ရှင်လယ်သမားသည် စောင့်စားရတာကို
လောဘကြီးသည်။ သူက တစ်နေ့
ရွှေU တစ်U တစ်U Uပေးနေတာ
စိတ်မရှည်။ ထိုငန်းမကြီး ဗိုက်ထတွဲင် နောင်
ရှိလိမ့်မည်။ Aကုန်လုံးတစ်ချီတည်း Aပွကြံမည်ဟု တွေးကာ ငန်းမကြီးကို သတ်၍ ဗိုက်ခြွဲ ကည့်ရာ သူထင်သလို ရွှေUတွေ မတွေ့ဘဲ ငန်းမကြီးဆုံးရသည့် ပုံပြင်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် ကျွန်ုပ်တားလို့ရရင် ငန်းမကြီးလည်း မသေ၊ လယ်သမားလည်း တစ်နေ့ ရွှေU တစ်U မှန်မှန်ရနေမည်၊ ဤAတိုင်းဆိုလျှင် သူက ကျေးဇူးတင်ကာ ကျနွုပ်Aား လက်ဖက်ရည်တစ်ခက်ွတော့ တိုက်လိမ့်မည်ဟု ထင်၏။ ထို့ကြောင့်
ကျနွုပ်က
Aလွန်ထင်ရှားသူဖြစ်ရာ လွယ်လယ်ွကူကူပင် ငန်းAသေတစ်ကောင်ကို
သူ့Aိမ်သို့ ရောက်ရှိသွားလေသည်။ လယ်သမားသည်
ကျန်ွတော်က
Aလာကောင်းသော်လည်း Aခါနှောင်းသွားပြီဟု သိလိုက်ရသည်။ လယ်သမားAား“ခင်ဗျားဟာ လောဘကြီးပြီး ဗိုက်ထကဲရွှေUတွေ Aကုန်လိုချင်လို့ သတ်ပစ်လိုက်တာမဟုတ်လား။ ခင်ဗျား တော်တော် မိုက်မတဲာပဲ” ဟု ပြောသောAခါ လယ်သမားက“ကျုပ် ဒီလောက် မမိုက်ပါဘူးဗျာ။ Aီစတ်ွပုံပြင်လည်း ကျုပ်ဖတ်ဖူးပြီးသားပါ” “ဒါဆို ခင်ဗျား ငန်းက ဘာလို့ သေရတာလဲ။ ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးမိလို့လား” “Aဲဒါလည်း မဟုတ်ဘူး။ တကယ်တော့ ကျွန်တော် လောဘကြီးတာပေါ့” “ဘယ်လို လောဘကြီးတာလဲ” “Aခု ရွှေဈေးတွေ ကျနေတယ်။ Aခုနေ ရွှေU Uလာရင် ကျွန်တော်ပိုက်ဆံAရနည်းမှာပေါ့။ ဒါကြောင့် သူ့ဖင်ကို
ဒီငန်းမကြီး သေသွားတာပဲ။ Aခု ကျန်ွတော် ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ” ထိုလယ်သမားAိမ်မှ ထွက်လာသောAခါ ကျန်ွတော် တစ်လမ်းလုံး စU်းစား၍လာသည်။ Aီစတ်ွပုံပြင်ထကဲငန်းပိုင်ရှင်နှင့် ဒီငန်းပိုင်ရှင် မည်သူက ပို၍ မိုက်မဲသနည်းဆိုသော Aချက်တို့ ဖြစ်လေသည်။
ဟဒယမဂ္ဂဇင်း၊ ဇွန်လ၊ ၂၀၀၇ခုနှစ်။
ရေတကောင်းနှင့် ကျီးကန်း တစ်နေ့သ၌
ပူပြင်းနေသည်ကို တွေ့ရလေသည်။ လမ်းတွင် တွေ့ရသော AေAးဆိုင်တစ်ဆိုင်သို့ ဝင်ကာ ကိုကာကိုလာ တစ်ပုလင်း
ထိုAခိုက်တွင် ပျံသန်းလာသော ကျီးကန်းတစ်ကောင်ကို တွေ့ရ၏။ ကျွန်ုပ်သည် ပုံပြင်ထတွဲင် လမ်းလျှောက်လာသော်လည်း ကျွန်ုပ်ရောက်နေသော ပုံပြင်မှာ မည်သည့် ပုံပြင်နည်း။ Aီစတ်ွပုံပြင်လား၊ ငါးရာ့ငါးဆယ်လား၊ ဂရင်းညီနောင်လား စသည်ဖြင့် ခြွဲ ခားမသိသေးဘဲ ရှိသည်။ ပျံသန်းလာသော ကျီးကန်းတစ်ကောင်ကို တွေ့ရုံဖြင့် မည်သည့်ပုံပြင်ဟု Aကဲခတ်ပြောဆိုရန် မလွယ်ချေ။
ပုံပြင်တိုင်းလိုလိုတွင် မကြာခဏတွေ့ရတတ်သော တိရစ္ဆာန်မျိုး ဖြစ်နေသောကြောင့်ပင်။ နေပူကြီးထဲတွင် ပျံသန်းလာသော ရုတ်တရက်
ရေရှိမှာပဲဟူသော Aတွေးဖြင့် ရေတကောင်းနားကို ပျံသန်းသွားလေသည်။ ရေတကောင်းနှင့် ရသွားသည်။
ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ပင် သူတို့သည် လူနားနီးနီးတွင် နေကာ လူတို့ထံမှ ခိုးယူစားသောက်နေကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ပုံပြင်ထကဲကျီးကန်းသည် ရေတကောင်းနားသို့ ချU်းကပ်သွားကာ ငုံ့ကြည့်လိုက်ရာေAာက်ခြေတွင် Aရောင်လက်နေတာ
ပြောင်လက်နေတာ ရေရှိသောကြောင့်ဟု သူသိသည်။ သို့သော် သူ့နှုတ်သီးကို ရေတကောင်းဝထဲသို့ ထိုးထည့်ကာ သောက်ဖို့ ကြိုးစားသော်လည်း ရေကို မမှီပဲ ရှိနေလေသည်။ ရုပ်မြင်သံကြား
ထိုကျီးကန်းကို Aဝတိုက်ပေမည်။ ကျီးကန်းဟာ တဂွတ်ဂတွ် မြည်ေAာင် သောက်ချကာ“ဂွတ်. ..” ဟု ပြောပေမည်။ သို့သော် ပုံပြင်ထတွဲင် ကြေငြာမဝင်။ ဒီတော့ ကျီးကန်းသည် ကိုယ့်Aားကိုယ်ကိုးရုံသာ ရှိသည်။ သူ ပထမ ဒီလို တွေး၏။ ငါရေတကောင်းကို တွန်းလှပဲစ်မယ်။ ဒါဆို ရေတွေ Aပြင်ထက်ွကျပြီး မြေကြီးပေါ်မှာ ရေAိုင်ကလေး ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ ဒါဆို ငါAလွယ်တကူ သောက်ရုံပဲ။
သို့သော် ရေတကောင်းသည် မလဲ။ နေရာပင်မရွေ့။ ကျီးကန်းဟာ ရေမသောက်ရတော့လို့ Aားမရှိဘူး ဖြစ်နေပုံရတယ်။
ကျောက်စရစ်ပုံက ကျောက်စရစ်တုံးတစ်တုံးကို ကိုက်ချီပြီး ရေတကောင်းထဲ ပစ်ချလိုက်တယ်။ တစ်တုံးပြီး တစ်တုံး။ ဒီလိုနဲ့ တဖြည်းဖြည်း ကျောက်စရစ်တုံးတွေဟာ မြင့်လာတာနဲ့Aမျှ ရေမျက်နှာပြင်ဟာလည်း မြင့်တက်ပြီး
သူလရိုာ
သောက်နိုင်တော့တယ်တ့။ဲ ဒါက ပုံပြင်ထမှဲာ ပြောတာ။ Aပြင်မှာတော့ ကျီးကန်းဟာ ထပျံသွားတော့မယ် ပြင်တယ်။ ကျနွုပ်က Aနားကပ်သွားပြီး“ငါ ဖတ်ဖူးတဲ့ ပုံပြင်ထမှဲာတော့. ..” လို့ ပုံပြင်ကို AစAဆုံး ပြောပြတယ်။ ကျီးကန်းက“တကယ့် လက်တွေ့ဘဝဆိုတာ... ပုံပြင်နဲ့ တူတာမဟုတ်ဘူးဗျ” လို့ ပြောတယ်။ “ခင်ဗျား စU်းစားကြည့်။ ဒီရေတကောင်းလောက်တော့ ကျုပ်Aသာလေး တွန်းလှနဲိုင်တယ်။ မြေကြီးက သဲမြေ။
သေလိမ့်မယ်” လို့ ပြောပြီး Aနားက ပျံထက်ွသွားတယ်။ ကျွန်ုပ်က ဒီကျီးဟာ ရေသောက်ဖို့ ကိစ္စ လက်လျှော့သွားပြီလို့ ထင်တယ်။
တပ်ပြီးသောက်တဲ့ ပလတ်စတစ်ပိုက်ကလေး တစ်ချောင်းကိုက်ချီလာတယ်။ “AေAးဆိုင်ဘေးမှာ လွှင့်ပစ်ထားတဲ့ Aထဲက ကောက်လာတာ” ရေတကောင်းထဲကို ပိုက်ထည့်ပြီး သောက်နေတဲ့ပုံက စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် ဂိုက်ပေးနေတဲ့Aတိုင်းပဲ။
ပန်းလှိုင်ဂျာနယ်၊ မေလ၊ ၂၀၀၆ခုနှစ်။
သဘောဖြူတဲ့ ငှက်ကျားဖြူ တစ်နေ့သ၌
ညစာစားပွတဲက်
ရွှင်လန်းမြူးကြွစွာ လျှောက်လာသဖြင့် ကျနွုပ်က“ဘယ်သွားမလို့လဲ ငှက်ကျားဖြူ” လို့မေးလိုက်မိလေသည်။ ငှက်ကျားဖြူက“ဒီနေ့ မြေခွေးက ညစာစားပွဲ ဖိတ်ထားလို့ သွားမလို့ဗျ။ သူ့လို ငနဲမျိုးက ဒီလိုဖိတ်တယ်ဆိုတော့ ဂုဏ်ယူစရာ မကောင်းဘူးလားဗျာ။ တခြားသတ္တဝါတွေကတော့ မြေခွေးတွေဟာ စိတ်ထားပုပ်တယ်လို့ ပြောနေကြတာပဲ။ သူတို့ပြောသလောက်လည်း မဆိုးပါဘူးဗျ။ သူတို့က ခင်တတ်သားပဲ” လို့ ပြောတယ်။ ဒီတော့မှ ကျနွုပ်က Aီစတ်ွပုံပြင်ထကဲမြေခွေးနဲ့ ငှက်ကျားဖြူပုံပြင်ထဲ ရောက်နေမှန်း သိတော့တယ်။ ဒီပုံပြင်ရဲ့ဇာတ်ကြောင်းက ဒီလို. ..။ မြေခွေးဟာ Aင်မတန်ယုတ်မာတဲ့ သတ္တဝါဆိုတော့ ငှက်ကျားဖြူကို ညစာကောင်းကောင်း မကျေွး ချင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်
ပန်းကန်ပြားပက်လက်ထဲ ပန်းကန်ပြားပက်လက်ထကဲ
စွပ်ပြုတ်ကို နှုတ်သီးဖျားနဲ့ တို့ရုံပဲ တတ်နိုင်တယ်။ မြေခွေးကတော့ လျှာနဲ့လျက်ပြီး စားလိုက်တာ ခဏလေးနဲ့ ပြောင်သွားတာပေါ့။
ပုံပြင်ထကဲAတိုင်း
ကျွေးတယ်။ ဒီတော့ ငှက်ကျားဖြူဟာ Aာစွတ်ရုံကလေးသာ သောက်ရပြီး Aရှက်တကွဲ ပြန်လာတာပေါ့။ ကျုပ်န့ေဲတွ့တော့“ဒီမြေခွေးဟာ
ဖိတ်ခ့ပဲါတယ်” လို့ ပြောပြီး Aိမ်ပြန်သွားတာပေါ့။ ပုံပြင်ထမှဲာ ဆက်ဖြစ်တာက ဒီလို. ..။ ငှက်ကျားဖြူဟာ မြေခွေးကို ကလဲ့စားချေဖို့ AကြံAစည်နဲ့ Aမဲသားစင်းကော ချက်တယ်။ မြေခွေး လာတဲ့Aခါမှာတော့ လည်တံရှည်ရှည် ကရားတစ်လုံးထဲမှာ ထည့်ကျွေးတယ်။ မြေခွေးက နှုတ်သီးတိုတော့ နှိုက်မစားနိုင်ဘူးပေါ့။ Aပေါ်က နည်းနည်းလောက်ပဲ စားနိုင်တယ်။ ငှက်ကျားဖြူကတော့ နှုတ်သီးရှည်တော့ ကုန်ေAာင် နှိုက်စားနိုင်တာပေါ့။ ဒီတော့ မြေခွေးလည်းရှက်ရှက်နဲ့ ပြန်လာရတယ်။ ပုံပြင်ထမှဲာတော့ ဒီAတိုင်းပဲ ဖြစ်ခ့တဲာပဲ။ သူတို့ဘာဆက်ဖြစ်မလဲ
တစ်ခေါက်ပြန်သွားတယ်။ Aချိန်တန်တော့ ငှက်ကျားဖြူAိမ်ကို မြေခွေးရောက်လာတယ်။ မြေခွေးရဲ့ပုံကို မြင်တော့ ကျွန်ုပ်Aံ့Aားသင့်သွားတယ်။ မြေခွေးဟာ (Aီစတ်ွပုံပြင်ကို ဖတ်ဖူးဟန်တူတယ်) သူ့ရဲ့နှုတ်သီးကို ငှက်ကျားဖြူတစ်ကောင်ရဲ့ နှုတ်သီးနဲ့တူေAာင် ဆေးရုံတက်ပြီး ခွစဲိတ်ပြုပြင်လာခဲ့တာကိုး။ သူရဲ့မျက်နှာက ပြုံးစိစိနဲ့-
“ကဲ. .. ခင်ဗျားရဲ့ Aသားစင်းကောဟင်းကို ချကျွေးပေတော့။ လည်တံရှည်ကရားထဲ ထည့်ကျွေးလည်း ကျုပ်မမှုပါဘူး။ Aလွယ်တကူ နှိုက်စားဖို့ Aသင့်ပါပဲ” လို့ပြောလိုက်တယ်။ ဒီတော့ ငှက်ကျားဖြူလည်း Aံ့သြတဲ့မျက်နှာနဲ့“ဘုရားရေ... ခင်ဗျားကို Aမဲသားစင်းကော ကျွေးမယ်လို့ ဘယ်သူက ပြောလို့လဲ” မေးတော့ မြေခွေးက“Aီစွတ်ပုံပြင်ထမှဲာ ဒီAတိုင်းပဲ ပါတာပဲကွ” “ကျုပ်
ခင်ဗျားAကြိုက်ဆုံး AစားAစာ ထင်ပြီး Aခုလည်း ကျေွး ဖို့ စွပ်ပြုတ်ပဲ ချက်ထားတယ်။ ပြီးတော့ ခင်ဗျားသောက်လို့လယွ်ေAာင်
လို့ ပြောပြီး စွတ်ပြုတ်ကို ပန်းကန်ပြားပက်လက်ထဲ ထည့်တိုက်တယ်။ သူကတော့ စားသောက်ပြီးပြီဆို ဘာမှ
စွပ်ပြုတ်ကို သောက်မရ ဖြစ်နေတယ်။ သူ့Aတတ်နဲ့ သူစူးတာပဲ။ သူ့ကိုယ်သူလည်း လည်လနွ်းတယ် ထင်ပေမယ့်
သူန့မဲလိုက်တဲ့
။ရိုးသားခြင်းသည်ေAာင်နိုင်ရာ၏) ဟဒယမဂ္ဂဇင်း၊ မေလ၊ ၂၀၀၇ခုနှစ်။
ခြင်္သေ့သားရေ ခြုံထားသောမြည်း တစ်နေ့တော့ ကျနွုပ်ဟာ ပုံပြင်ထမှဲာ လမ်းလျှောက်သွားရင်းနဲ့ လမ်းမှာ ခြင်္သေ့တစ်ကောင်နဲ့ တွေ့တော့ Aဲဒီခြင်္သေ့က ရယ်တယ်။ ဒီတော့မှ Aဲဒီခြင်္သေ့ဆီက မြည်းတစ်ကောင်ရဲ့ Aသံထက်ွလာပြီး Aဲဒါဟာ ခြင်္သေ့သားရေခြုံထားတဲ့ မြည်းတစ်ကောင်မှန်း ကျနွုပ်သိသွားတော့တယ်။ ဒါကြောင့် ကျနွုပ်က ခြေနဲ့ ပိတ်ကန်လိုက်တယ်။ ဖြစ်ပုံက ဒီလိုတ့။ဲ တစ်နေ့တော့ Aဲဒီမြည်းဟာ ခြင်္သေ့သားရေတစ်ခုကို တွေ့တယ်တ့။ဲ ဒီတော့ သူက... (Aတော်ပဲ. .. ဒီသားရေခြုံပြီး
သိပ်ရယ်ရမှာပဲ)လို့ တွေးပြီး Aဲဒီမြည်းဟာ ခြင်္သေ့သားရေကို ခြုံပြီး သိုးတွေ ရှိရာကို သွားတယ်။ သိုးတွေက မြင်တော့ ခြင်္သေ့ထင်ပြီး ကြောက်လန့်တကြား ထွက်ပြေးကြတယ်။ ဒီတော့ သူက ကျေနပ်နေတယ်။ နောက်တော့ နွားတွေဆီ သွားပြန်တယ်။ နွားတွေကလည်း သူတို့ကို စားမယ့် ခြင်္သေ့တစ်ကောင်တော့ ရောက်လာပြီဆိုပြီး
ပီတိဖြစ်နေပြန်တယ်။ နောက်ဆုံး သူက သူ့သခင်ကို ခြောက်လှန့်မယ်ဆိုပြီး သခင် ရှိရာကို သွားတယ်။ သူ့သခင်က ပထမတော့ ထိတ်လန့်သွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ သေသေချာချာ ကြည့်လိုက်တော့ ခြုံထားတဲ့ ခြင်္သေ့သားရေထဲက ထွက်နေတဲ့ မြည်းရဲ့ နားရွက်ရှည်နှစ်ဘက်ကို တွေ့သွားတယ်။ ဒီတော့ သူ့လက်ထကဲနှင်တံနဲ့ မြည်းကို ရိုက်လိုက်တယ်။ ဒီတော့မှ မြည်းဟာ Aလန့်တကြား ထေAာ်တယ်။ “မင်းဟာ ခြင်္သေ့သားရေ ခြုံထားတာ မှန်ပေမယ့် မင်းရဲ့နားရွက်တွေကို လုံေAာင် မဖုံးနိုင်ဘူး။ Aဲဒါဟာ မင်းAတွက် သင်ခန်းစာပဲ” လို့ ပြောလိုက်တယ်။ ကျွန်ုပ်ကို ခြောက်လှန့်တ့Aဲခါ မြည်းဟာ သူ့နားရွက်တွေကို လုံခြုံေAာင်
မြည်းဟာ“ခင်ဗျားဟာ ကျုပ်ကို မြည်းတစ်ကောင်မှန်း ဘယ်လိုလုပ် သိတာလဲ” လို့မေးတယ်။ ကျွန်ုပ်က“မင်းဟာ
ပြောင်းလဲလို့ရပေမယ့် Aသံကိုတော့ ပြောင်းလဲလို့ မရပါဘူး။ မြည်းဟာ မြည်းAသံပဲ ထွက်နိုင်တယ်” လို့ ပြောလိုက်တယ်။ မြည်းဟာ“ဒါဟာ ကျုပ်Aတွက် သင်ခန်းစာပဲ” လို့ ပြောပြီးထွက်သွားတယ်။
ကျွန်ုပ်ဟာ ဆက်လျှောက်လာရင်း စU်းစားလာတယ်။ ဒီမြည်းဟာ ဘာကြောင့် ခြင်္သေ့ဖြစ်ချင်ရတာလဲ။ ခြင်္သေ့ဘဝဟာ
စိတ်သက်သက်ပလဲား...။
ဘာAကျိုးရှိသလဲ။ စုံလို့ပဲ. ..။ AဲဒီAခိုက်မှာပဲ
လျှောက်သွားတယ်။ ခြင်္သေ့သားရေ
မြည်းဖြစ်နေကြောင်း Aသံလေးတော့ ပြုသင့်တယ်” တဲ့။ Aဲဒီမုဆိုးဟာ မြည်းပိုင်ရှင်ကို လျော်ကြေးပေးလိုက်ရလေသလားတော့ ကျွန်ုပ်လည်း မသိတော့ပါဘူး။
ဟဒယမဂ္ဂဇင်း၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၀၇ခုနှစ်။
Aမြီးပြတ်သော မြေခွေးများ တစ်နေ့မှာ
ပုံပြင်ထကဲို
လမ်းလျှောက်သွားရင်းနဲ့ ထောင်ချောက်က
ထောင်ချောက်ထမှဲာ
ကျန်ခ့တဲာပေါ့။ သူကတော့ လွတ်သွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြေခွေးAုပ်စုထဲ ရောက်တော့ သူ လှောင်ပြောင်ခံရတော့တာပဲ။ “ဟေ့ကောင်. .. မင်းAမြီး ဘယ်ရောက်သွားသလဲ။ Aပေါင်ဆိုင် ပို့လိုက်သလား” “မဟုတ်ဘူး။ ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ ခါးပိုက်နှိုက်ခံရတာ ဖြစ်မယ်” “မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒီကောင် ကာရာAိုကေဆိုင်မှာ မေ့ကျန်ခ့တဲာ နေမှာပေါ့” “ဘာပဲပြောပြော Aမြီးမရှိတဲ့ မြေခွေးဆိုတာ တံခန်ွမရှိတ့ရဲထားလို မတင့်တယ်ဘူးပေါ့ကွာ ” ဒီလို တစ်ကောင်တစ်ပေါက် ပြောသံတွေ ကြားတော့ Aမြီးပြတ်တဲ့ မြေခွေးဟာ နားမခံသာဘူးပေါ့။ သူက လူပေါ်လူဇော်
ပြန်ပြောတယ်။ “ဟေ့ကောင်တွေ. .. ဒါ ဗြူတီဆလွန်းတစ်ခုမှာ ဒေါ်လာ ၃၀၀ ပေးပြီး ပြုပြင်လာတာကွ။ မင်းတို့ Aခု ကြည့်လိုက်စမ်း။ Aမြီးမရှိတော့ ငါ့ကိုယ်ဟာ ဘယ်လောက် ကြော့ရှင်းလှပသွားသလဲ။ နို့မို့ဆို သွားလေရာ ဒီAမြီး တန်းလန်းတန်းလန်းနဲ့ ရှုပ်နေတာ။ Aခုမှ ငါ့မှာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လွတ်လတ်ွလပ်လပ် ရှိလိုက်တာ။ မင်းတို့လည်း
တိုက်တနွ်းနေရတာ။ ဒါကြောင့် ငါ့ကို Aတုယူပြီး မင်းတို့ရဲ့ ရုပ်ဆိုးတဲ့ Aမြီးတွေကို ဖြတ်ပစ်လိုက်ကြပါ” ဒီမြေခွေးဟာ Aရင်က ကွန်မြူနစ်ပါတီလည်း ဝင်ဖူးတော့ ကြမ်းပိုးကိုလိပ်ဖြစ်ေAာင် ပြောနိုင်တယ်။ ကျန်တဲ့ မြေခွေးတွေလည်း Aားကျကုန်တာပေါ့။ Aဲဒီထမှဲာ မြေခွေးAိုကြီးတစ်ကောင်က“Aချင်း... မြေခွေးAပေါင်းတို့. .. သူ့စကားကို မယုံကြနဲ့။ ငါ ငယ်ငယ်က Aီစတ်ွပုံပြင်စာAုပ် ဖတ်ဖူးတယ်။ Aမြီးပြတ်တဲ့ မြေခွေးဟာ ကိုယ်Aမြီးပြတ်သလို တခြားမြေခွေးတွေလည်း Aမြီးပြတ်ကုန်ေAာင် ဒီလို Aယုံသွင်းစကား ပြောတာပဲ။ Aခုလည်း သူ့စကားကို မယုံကြနဲ့” လို့ သတိပေးစကား ပြောတယ်။ ဒါပေမဲ့ စာပေ ဗဟုသုတနည်းတဲ့ မြေခွေးတွေက မယုံကြဘူးတဲ့။ Aမြီးပြတ်နေတဲ့ မြေခွေးက“ခင်ဗျားတို့ စိတ်ကူးမလြွဲ ကနဲ့။ ကျွန်တော်ဆို Aခုမှ လှသွားတယ်ဆိုပြီး ဟောလိဝုဒ်ကတောင် ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ ကမ်းလှမ်းနေတယ်။
လှမှာ မနာလိုလို့ ပြောနေတာ” လို့ ပြောတယ်။ ကျန်တဲ့ မြေခွေးတွေက“သူ့စကားကို
ကမ်းလှမ်းလာရင်တော့ ဂျင်ဆန်းမီနဲ့ တြွဲ ပီး ဇာတ်လမ်းတွဲ တစ်တွဲလောက်တော့ ရိုက်လိုက်ချင်တယ်”
သက်မန်ွမြင့်နဲ့
ကြော်ငြာတစ်ခုလောက် ရိုက်ရရင် Aမြီးဖြတ်ရကျိုးနပ်ပါတယ်” လို့ တစ်ယောက်တစ်ပေါက် ပြောကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခက်တာက သူတို့မှာ Aမြီးဖြတ်ခ ဒေါ်လာသုံးရာ ပေးစရာမရှိတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ Aဲဒီကိစ္စကို ကျနွုပ်ကပဲ ကူညီဖြေရှင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ Aလှပြင်ခ မယူပဲ Aမြီးကို Aခမဲ့
ခဏလေးနဲ့ ရေပန်းစားသွားတယ်။ ကျွန်ုပ်ပုံပြင်ထကဲAိတ်ကြီးနဲ့
Aမွေးပွပနွဲ့
ဈေးကောင်း ရနိုင်တာပါပဲ မဟုတ်လား။
ဟဒယမဂ္ဂဇင်း၊ သြဂုတ် လ၊ ၂၀၀၇ခုနှစ်။
မြည်းနှင့် ခွေးကလေး တစ်နေ့တော့
ကျနွုပ်ဟာ ပုံပြင်ထမှဲာ လမ်းလျှောက်သွားရင်း ယာတောတစ်ခုကို ရောက်သွားတယ်။
တစ်ယောက်မှန်း သိနေတယ်။ ယာတောထဲက မြည်းတစ်ကောင်က Aိမ်ထကဲို ပြတင်းပေါက်က တစ်ဆင့် ငေးကြည့်နေတာကို
Aိမ်မှာမွေးထားတဲ့ ခွေးကလေးနဲ့ ကစားနေတာ တွေ့ရတယ်။ ခွေးကလေးဟာ သူ့သခင်ကို လှည့်ပတ်ပြေး၊ ပွတ်သီးပွတ်သပ်လုပ်၊
သူ့သခင်ထိုင်နေရင် သူ့သခင်ပေါ်ခုန်တက် Aဲဒါကို သူ့သခင်က သဘောကျ
ရယ်မောပြီး သူစားတဲ့ ဘီစကွတ်တွေ ချကျွေးနေတယ်။ Aဲဒါကို ကြည့်နေတဲ့မြည်းဟာ“ကြည့်စမ်းပါUီးဗျာ။ ကျုပ်တို့မှာ လေးလေးပင်ပင် ဝန်တွေသယ်ရတာ။ ဒီခွေးကလေးကတော့
မလုပ်ဘူး။ သူ့သခင်နဲ့ ဆော့ကစားတာပဲ ရှိတယ်။ သူက သခင် စားတာမျိုးတွေလည်း စားရတယ်။ သူ့Aလုပ်မျိုးတော့ ကျုပ်လည်း လုပ်နိုင်ပါတယ်” လို့ ပြောတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်ုပ်လည်း Aီစတ်ွပုံပြင်ထဲ ရောက်နေမှန်း ရိပ်စားမိသွားတယ်။ ဒါကြောင့် မြည်းကို“သတ္တဝါဆိုတာ ကိုယ့်နေရာနဲ့ ကိုယ်နေတာပဲ ကောင်းတယ်။ Aဓိက ကိုယ့်ဘဝကို ကျေနပ်ဖို့ပဲ။ မတူတာ မတုန့။ဲ တုရင် ကိုယ်ပဲ ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်” လို့ တားမြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ မြည်းက နားမထောင်ဘူး။ “မယုံရင် ခင်ဗျား ဒီက ကြည့်နေ” ဆိုပြီး
လှည့်ပတ်ပြေးတယ်။ သူ့သခင်က Aံ့သြပြီး“ဒီမြည်း ဘာဖြစ်နေတာလဲ” လို့ ရေရွတ်တယ်။ မြည်းက သူ့သခင် သဘောကျေAာင် ခြေထောက်တွေကို လေထဲမှာ မြှောက်ပြီး ခုန်ပေါက်တော့ Aိမ်ထကဲပရိဘောဂတွေ ထိခိုက်မိပြီး ပျက်စီးကုန်တယ်။ မြည်းက သူ့ကို ဘီစကွတ်တွေ ချကျွေးမလား မျှော်လင့်နေသေးတယ်။ သူ့သခင်ကတော့ စိတ်ဆိုးလှပြီ။ Aဲဒါကို မရိပ်မိတော့ မြည်းဟာ သူ့သခင်ပေါ် ခုန်တက်မယ် လုပ်တယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ သူ့သခင်ဟာ ကြောက်လန့်တကြား ဖြစ်သွားတယ်။ မြည်းရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးသာ သူ့Aပေါ်ပိရင် သူ ဒဏ်ရာရသွားမှာကိုး။ ဒါကြောင့်“လာကြပါUီးဟေ့။ ဒီမြည်း ရူးသွားပြီ။ ငါ့ခြံထကဲမောင်းထုတ်လိုက်ကြ” လို့ သူ့Aလုပ်သမားတွေကိုေAာ်ပြောတယ်။ Aလုပ်သမားတွေလည်း Aိမ်ထဲ ဝင်လာပြီး မြည်းကို ဝိုင်းရိုက်ကြ နှက်ကြတာပေါ့။ မြည်းတစ်ကိုယ်လုံးဟာ Aရှိုးရာတွေနဲ့ ယာတဲက ထွက်ပြေးသွားရတယ်။
Aပြန်လမ်းကျတော့ သစ်ပင်တစ်ပင်ေAာက်မှာ မှိုင်တွေနေတဲ့ မြည်းကို တွေ့ရတယ်။ သူက“ခင်ဗျား ပြောတာ မှန်တယ်။ ခွေးတစ်ကောင်လုပ်တာ မြည်းတစ်ကောင် မလုပ်သင့်ဘူး။ Aခုတော့ ကျုပ်မှာ နေစရာ စားစရာ မရှိတော့ဘူး။ ကျုပ်က Aင်မတန်နုံတယ်” လို့ ညည်းတယ်။ နောက်တော့ ကျနွုပ်သိရတာတော့ Aဲဒီမြည်းဟာ ‘မြည်းတစ်ကောင်နဲ့ သားAဖနှစ်ယောက်’ ပုံပြင်ထကဲို ရောက်သွားတယ်လို့ ကြားရတယ်။ Aဲဒီတော့မှ မြည်းဟာ လောကမှာ သူ့ထက် နုံတဲ့ Aတဲ့လူတွေ ရှိနေပါသေးတယ်လို့ စိတ်သက်သာရာ ရသွားတယ်လို့ ဆိုတယ်။
ဟဒယမဂ္ဂဇင်း၊ ဇန်နဝါရီလ၊ ၂၀၀၇ခုနှစ်။
မြည်းတစ်ကောင်နဲ့ သားAဖနှစ်ယောက် တစ်နေ့တော့ ကျနွုပ်ဟာ ပုံပြင်ထမှဲာ လမ်းလျှောက်ထက်ွလာရင်းနဲ့ လမ်းမှာ မြည်းတစ်ကောင်ကို ဆြွဲ ပီး လမ်းလျှောက်လာကြတဲ့ သွားရောင်းမလို့
ဆွလဲာကြတယ်ဆိုတာ
ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်မှုမျိုး လုပ်ကြမှာကိုလည်း သိနေတာပဲ။ လမ်းမှာ ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့တော့“ကြည့်ပါUီး... မိုက်မလဲိုက်တဲ့ သားAဖ။ တစ်ယောက်ယောက်က မြည်းကို စီးရင်ရရဲ့သားနဲ့ နှစ်ယောက်လုံး လမ်းလျှောက်လာကြတယ်” လို့ ကဲ့ရဲ့စကား ပြောတယ်။ ဒီတော့ သူ့Aဖေက သားကို မြည်းပေါ်တက်ခိုင်းပြီး သူက ဘေးကနေပဲ ခြေကျင်လျှောက်လိုက်ခ့တဲယ်။ မကြာခင် သူတို့ဟာ လမ်းဘေးမှာ စကားဝိုင်းဖွ့ေဲနကြတဲ့ AဘိုးAိုတစ်စုAနားကို ရောက်သွားတယ်။ ဒီတော့ AဘိုးAိုတစ်ယောက်က“ကြည့်ပါUီး... သားမိုက်ကတော့ မြည်းပေါ်မှာ Aခန့်သားစီးလာလိုက်တာ။ သနားစရာ သူ့Aဖေကတော့ လမ်းလျှောက်လာရတယ်။ ဟဲ့ ငပျင်းလေး... မြည်းပေါ်ကဆင်းစမ်း။ မင်းAဖေပဲ စီးပါစေ” လို့
သားလုပ်တ့သဲူက တွေ့ပြန်တယ်။
Aမျိုးသမီးတွေက“ဟေ့. .. ငပျင်းကြီး။ ရှင်ကတော့ မြည်းပေါ်မှာ ဇိမ်ကျလို့၊ေAာက်ကကလေးဟာ မြည်းကို မှီေAာင် မနည်းလျှောက်နေရတယ်။ ကလေးကိုပါ တင်စီးတော့ ဘာဖြစ်မှာလဲ” လို့ Aပြစ်တင်ကြတယ်။ ဒါကြောင့် Aဖေလုပ်သူက သားကိုမြည်းနောက်မှာ တက်ထိုင်ခိုင်းပြီး နှစ်ယောက်သား ခရီးဆက်ခြဲ့ ကတယ်။ လမ်းမှာ မြို့သားတစ်ယောက်န့ေဲတွ့တော့“ဒီမြည်းကို ခင်ဗျားတို့ သွားရောင်းမလို့ မဟုတ်လား။ Aခု မြည်းဟာ မနိုင်ဝန်ထမ်းနေရတော့ ခါးကျိုးပြီး သေသွားနိုင်တယ်။ ခင်ဗျားတို့က သူ့Aပေါ်တက်စီးမယ့်Aစား သူ့ကို ထမ်းသွားတာ ပိုကောင်းတယ်” လို့
Aကြံပေးပြန်တယ်။ ဒါနဲ့ သူတို့ဟာ မြည်းခြေထောက်တွေကို ကြိုးနဲ့ စုချည်ပြီးတော့
ဘယ်လိုဇာတ်သိမ်းမယ်ဆိုတာ ကျန်ွတော်က သိနေတော့ ရင်တထိတ်ထိတ်ပေါ့။ လမ်းတစ်လျှောက်လုံး တွေ့တ့လဲူတွေက
မြည်းကလည်း နေရထိုင်ရခက်လို့ Aားရှိသမျှ ရုန်းကန်တော့
ဆုံးပါပြီလို့ တွေးပြီး ဝမ်းနည်းပက်လက်နဲ့ Aိမ်ပြန်သွားကြတယ်။ ကျွန်တော်သာ ပုံပြင်ထမှဲာ လမ်းလျှောက်မလာမိရင် ဒီပုံပြင်တော့ ဒီမှာပဲ Aဆုံးပေါ့။ ကျန်ွတော်က ရေထဲ ခုန်ချပြီး
သားAဖနှစ်ယောက်ရဲ့ Aိမ်ကို ရောက်သွားတယ်။ “ဟောဒါဟာ ခင်ဗျားတို့ ရေထဲကျသွားတဲ့ မြည်း၊ ကျန်ွတော်ဆယ်ပြီး ခင်ဗျားတို့ကို လာပြန်ပေးတာ” ဆိုတော့ Aဖေလုပ်တဲ့သူက“ဘာလို့ ယူလာတာလဲဗျာ။ ဒီမြည်းကို ကျုပ်တို့ မြင်တောင် မမြင်ချင်ဘူး။ သူ့ကြောင့် လူတကာက ကျုပ်တို့သားAဖကို ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်တာခံရတယ်” သားလုပ်သူကလည်း“ဟုတ်တယ်. ..
ပေးချင်တ့လဲူသာ ပေးလိုက်ပါ” လို့ ပြောတယ်။ ကျွန်ုပ်လည်း
ဒီတစ်ခေါက်ပုံပြင်ထကဲို
လမ်းလျှောက်ထက်ွတာ
ဒီပုံပြင်ထကဲသဘာဝကျကျ
မလုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့ သားAဖ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်ကို Aလေးထားလွန်းတဲ့ သားAဖဟာ Aပြစ်လား...။ ဒါမှမဟုတ် တွေ့သမျှ မြင်သမျှ ကိစ္စတိုင်းမှာ လက်ညှိုးထိုး Aပြစ်ရှာ ပြောဆိုတတ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကပဲ Aပြစ်ရှိသလား။
(ယနေ့ထက်တိုင် ကျွန်ုပ်ထံ တွင် မြည်းတစ်ကောင် ရှိနေရာ လိုချင်သည်ဆိုပါက မည်သည့် သားAဖမဆို လာရောက်တောင်းဆိုနိုင်သည်။ Aမဲသားသည် သားAဖတောင်းရန်မလိုပါ) ဟဒယမဂ္ဂဇင်း၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၀၇ခုနှစ်။
ယုန်နဲ့ လိပ် Aပြေးပြိုင်ပွဲ တစ်နေ့
Aီစတ်ွပုံပြင်ထမှဲာ
ကျွန်ုပ်သွားစူးစမ်းကြည့်တော့ ယုန်နဲ့ လိပ် Aပြေးပြိုင်ပွဲ ကျင်းပဖို့ စီစU်နေတာ တွေ့ရတယ်။ ခြသေ့င်္တွေ၊ မြင်းကျားတွေ၊ မြေခွေးတွေ၊ သစ်ကုလားAုပ်တွေ၊ ငှက်ကြီးဝန်ပိုတွေ၊ မျောက်လွှဲကျော်တွေ စုံလို့ပဲ။ သူတို့က ဒီပကွဲို Aလောင်းAစား လုပ်နေကြတယ်။ Aားလုံးက ယုန်ဘက်ကနေ လောင်းကြတာပေါ့။ “မိုက်တိမိုက်ကန်းကွာ... လိပ်ဘက်ကနေတဲ့ ကောင်က ရှိသေးတယ်။ ကုဋေရှစ်ဆယ် သူဌေးသားလား မသိဘူး” ဆိုလို့ ကျနွုပ်သွားကြည့်တော့ တစ်ဖက်က နေတဲ့သူက ကြွက်နီ ဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်တော်က“ကိုကြွက်. .. ခင်ဗျား ဘာလို့ ဒီတိရစ္ဆာန်တွေကြားထဲ ရောက်နေရတာလဲ” လို့ မေးတော့“ကျွန်တော့်နာမည် ကြွက်နီလေ” လို့ဖြေတယ်။ ပြီးတော့ စပ်ဖြီးဖြီး မျက်နှာနဲ့“ခင်ဗျားလည်း ဒီပုံပြင်ကို ဖတ်ဖူးတာပဲ။ နောက်ဆုံးတော့ လိပ်ပနဲိုင်တယ် မဟုတ်လား။ ဒီထက်ပိုင်တာ မရှိတော့ဘူး။
ဝင်လောင်းလိုက်ပါလား။ Aလကားလိုလို ရမယ့် ပိုက်ဆံတွေ. .. ဒီတိရစ္ဆာန်တွေ Aားလုံး AချU်တွေချည်းပဲ” လို့
ဒီပြိုင်ပြွဲ ဖစ်လာပုံက ဒီလိုတဲ့. ..။ Aိုလံပစ်က ရွှေတံဆိပ် ၃ခု ရလာတဲ့ ယုန်က သူAပြေးသန်တဲ့ Aကြောင်း Aမြဲကြွားရုံမကဘူး လိပ်ကို သွားပြီး လှောင်တာနဲ့ လိပ်က မခံချင်ဖြစ်ပြီး စိန်ခေါ်တာတဲ့။ ဒီလိုနဲ့ ပြိုင်ပစွဲ တယ်။ စစချင်း ထုံးစံAတိုင်း ယုန်က ရှေ့က ပြေးတာပေါ့။ လိပ်က နောက်က Aပြတ်Aသတ် ကျန်ခ့တဲာပဲ။ ယုန်ဘက်က လောင်းထားတဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေကေAာ်ဟစ် Aားပေးကြတယ်။ ကြွက်နီကတော့ ပြုံးဖြီးဖြီးနဲ့ စောင့်ကြည့်နေတာပေါ့။ ပုံပြင်ထကဲAတိုင်းပါပဲ။ ပြေးလမ်းAလယ်ရောက်တော့ လိပ်လည်း နောက်မှာ Aများကြီး ပြတ်ကျန်ခ့တဲာပဲ။ ခဏနားUီးမယ်ဆိုပြီး ယုန်က မြက်ခင်းပေါ်
လှလဲိုက်တာ
ခဏလေးနဲ့ Aိပ်ပျော်သွားတော့တယ်။ ဒီယုန်က Aိုလံပစ်ဂျာနယ်က (Fun Club) Aဖွဲ့ဝင်တဲ့ မနေ့ညက ရီးရဲမက်ဒရစ်နဲ့ မန်ချက်စတာ ကစားတဲ့ (ည ၁နာရီခပွဲ) ကို သွားကြည့်ထားတော့ Aိပ်ရေးပျက်ပြီး Aိပ်ချင်နေတာပေါ့။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့လျှောက်လာတဲ့ လိပ်က သူ့ကို ကျော်တက်သွားတာတောင် မနိုးဘူးတဲ့။ တိရစ္ဆာန်တွေကေAာ်ဟစ်သတိပေးတာလည်း သတိမရဘူးတဲ့။ လိပ်ကတော့ ပန်းတိုင်နားကိုတောင်
AဲဒီAချိန်မှာပဲ ပန်းတိုင်နားမှာရှိတဲ့ ကာရာAိုကေဆိုင်က သီချင်းသံက ပျံ့လွင့်လာတယ်။ လိပ်ကလည်း ပန်းချီမောင်မောင်သိုက်တို့၊
လှမ်းကြည့်လိုက်တော့လည်း သူ့မိတ်ဆွေ ကိုမြတ်သစ်တို့၊ ကိုကြည်သစ်တို့၊ ကိုမောင်မောင်ဇေယျတို့ကို သွားတွေ့ရတယ်။
မတွေ့ဖူးတော့ လိပ်လည်း ဝမ်းသာAားရနဲ့ ကာရာAိုကေဆိုင် ရောက်သွားတယ်။ ယုန်လည်း တော်တော်နဲ့ နိုးUီးမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီတော့ ကြုံတုန်း သီချင်းလေးတစ်ပုဒ် နှစ်ပုဒ်လောက်တော့ ဟစ်Uီးမှပဲဆိုပြီး ကာရာAိုကေ ဝင်ဆိုနေလိုက်တယ်တဲ့။ AဲဒီAချိန်မှာ ယုန်က တစ်ရေးနိုးပြီး ပန်းတိုင်ကို ပြေးလာပါရော။ ယုန်ပြေးလာတာ မြင်ပေမယ့် လိပ်ဟာ ကာရာAိုကေက ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ ‘ပန်းပိတောက်ကို
ဆက်ဆိုနေလိုက်တာနဲ့ ယုန်လည်း ပန်းဝင်သွားရောတဲ့။ ကိုကြွက်နီကတော့ AဲဒီAချိန်ကစပြီး ပိတောက်ပန်းကို မုန်းသွားတာတဲ့။ “ယုန်က မုန်လာUကို ချစ်တယ် ဆိုရမှာ” လို့ ဒေါသနဲ့ ပြောသေးတယ်။ ဘာပဲပြောပြော သူ့ခမျာ Aဲဒီတုန်းက ရှုံးထားတဲ့ လောင်းကြေးတွေ ကျေေAာင်
လူလှနေခ’ စသဖြင့် ကလောင်နာမည်ပေါင်းစုံနဲ့ စာတွေရေးပြီး ကြွေးတွေ ဆပ်နေလိုက်ရတာ Aခုထိ ဝဋ်မကျွတ်နိုင်သေးဘူးလို့ ကြားတာပါပဲ။
ဟဒယမဂ္ဂဇင်း၊ေAာက်တိုဘာလ၊ ၂၀၀၇ခုနှစ်။
ကြောင်နှစ်ကောင်ရဲ့ ကလဲ့စား တစ်နေ့သ၌ ကျနွုပ်သည် Aီစတ်ွပုံပြင်ထတွဲင် လမ်းလျှောက်လာရာ ဒိန်ခတဲစ်ခစဲီ သယ်ဆောင်လာကြသော ကြောင်နှစ်ကောင်နှင့် ဆုံမိလေသည်။ ကြောင်နှစ်ကောင်က ကျွန်ုပ်ကို တွေ့သောAခါ“ခင်ဗျားက မျောက်လား” ဟု မေးလေသည်။ ကျနွုပ်က“လူဆိုတာ
မျောက်မဟုတ်ဘူး” “ဒါဆို ကျုပ်တို့ မျောက်ကို သွားရှာUီးမယ်” ဟုပြောကာ လှည့်ထက်ွသွားကြမည်ပြုစU် ကျွန်ုပ်က ဟန့်တားလိုက်၏။ “နေပါUီး။ မင်းတို့ မျောက်ကို သွားရှာမယ်ဆိုတာ ဒိန်ခဲတွေကို ညီမျှေAာင် ခွဲခိုင်းမလို့ မဟုတ်လား။ ဒီနေ့ ဒိန်ခဲတစ်ခဲ မင်းတို့ ရတယ်။ တစ်ယောက် တစ်ဝက်စီ စားမယ်လို့ ခွလဲိုက်တော့ တစ်တုံးက ကြီးပြီး တစ်တုံးက သေးနေတယ်။ နှစ်ကောင်စလုံးက ကြီးတာလိုချင်တော့ Aဝေမတည့်ဘူး။ ဒါကြောင့် မျောက်ဆီ သွားAကူAညီတောင်းမလို့ မဟုတ်လား” ကျွန်ုပ်စကားကို ကြားသောAခါ ကြောင်နှစ်ကောင်က Aံ့Aားသင့်ကာ“ဒီကိစ္စတွေ ခင်ဗျား ဘယ်လို သိတာလဲ” “လွယ်ပါတယ်။ ငါက Aီစတ်ွပုံပြင်စာAုပ် ဖတ်ထားတာကိုး။ ငါသိတာတွေ ဆက်ပြောလိုက်Uီးမယ်။ မျောက်ဆီ မင်းတို့ ရောက်တော့ မျောက်က ချိန်ခွင်ကို ထုတ်ပြပြီး သူကူညီနိုင်တယ်လို့ ပြောမယ်။ ဒိန်ခဲနှစ်ခကဲို ချိန်ခွင်တစ်ဖက်စီမှာ ထည့်ပြီး ချိန်ကြည့်တယ်။ ကြီးလို့ လေးနေတဲ့ Aခဲကို ညီမျှေAာင် သူတစ်ကိုက် ကိုက်လိုက်တယ်။ သူကိုက်တာများသွားတော့ ချိန်ခွင်က မညီပြန်ဘူး။ ဒီလိုနဲ့ ကျန်တဲ့ တစ်တုံး ကိုက်လိုက်ပြီး
ဟိုဒိန်ခကဲိုက်ချိန်လိုက် ကျန်တော့တယ်။
ဒီဒိန်ခကဲို
တော်ပါတော့ ကျန်တဲ့Aပိုင်းလေးတွေပဲ ပြန်ပေးပါ။ ကျန်ွတော်တို့ တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုတော့ မျောက်က မင်းတို့
Aလုပ်ရှုပ်သွားတယ်။ ငါ့လုပ်AားခAတွက် မင်းတို့
ဘာပေးမှာလဲ။ မင်းတို့မှာလည်း ဘာမှ ပေးစရာ မပါဘူး။ ဒီတော့ ဒီဒိန်ခဲလေးတွေပဲ တရားမျှတေAာင် လုပ်ပေးရတဲ့Aတွက်
ဒိန်ခလဲက်ကျန်ကို
ထည့်လိုက်တယ်တဲ့။ ဒီတော့ မင်းတို့ မျောက်ဆီ မသွားကြနဲ့” “ကျုပ်တို့ မျောက်ဆီပဲ သွားမယ်” ဟုဆိုကာ ထွက်သွားကြလေသည်။ ကျွန်ုပ်သည် မကြာခင်
ပုံပြင်ထကဲAတိုင်းပင် ဖြစ်လေသည်။ သို့သော် နောက်ဆုံး ဒိန်ခတဲုံးကို သူ့ပါးစပ်ထဲ ထည့်ပြီး မကြာခင်
ရယ်မောနေလေသည်။ ကျနွုပ်Aနား ရောက်သွားကာ မေးမိသည်။ “မျောက် ဘာဖြစ်သွားတာလဲ” “Aဆိပ်မိ သေသွားတာလေ။ ကျုပ်တို့က ဒီဒိန်ခဲတွေထမှဲာ Aဆိပ်ထည့်ထားတယ်” “မျောက်ဒီလို လုပ်မယ်ဆိုတာ မင်းတို့လည်း သိနေလို့လား” “သိတာပေါ့ ကျုပ်တို့လည်း Aီစတ်ွပုံပြင်စာAုပ် ဖတ်ထားပြီးသားပဲ” ဟုဆိုကာ
ဟဒယမဂ္ဂဇင်း၊ နိုဝင်ဘာလ၊ ၂၀၀၇ခုနှစ်။
ကျနွုပ်၏ရှေ့တွင်
ဖြစ်၏။ သူ့ခေါင်းပေါ်မှ ပုံးထဲတွင် နို့များAပြည့်ပါရှိသဖြင့် လေးလံပုံရ၏။ သို့သော် သူ့ကို ကြည့်ရသည်မှာ ပစ္စုပ္ပန်တွင် Aာရုံရှိပုံမရ။ ဝေရီရီ မျက်လုံးများဖြင့်တစ်စုံတစ်ခုကို တွေးတောလာဟန်ရှိ၏။ တကယ်တော့ စိတ်ကူးယU်စီမံကိန်းတွေ ရေးဆွဲနေခြင်း ဖြစ်သည်။ ‘နွားနို့ရောင်းလို့ရတဲ့ ဝပ်ကျင်းထဲ
ကြက်ပေါက်စလေးတွေဟာ Aချိန်ကျရင် ကြက်ဝဝတုတ်တုတ်ကြီးတွေ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်’ သူAဲသလို စိတ်ကူးလိမ့်မယ်ဆိုတာ ကျနွုပ်သိ၍နေလေသည်။ ကျနွုပ်သည် Aီစတ်ွပုံပြင်ထမှဲ နွားနို့သည်နှင့် နို့
ပုံပြင်ထကဲAတိုင်းဆိုလျှင်
ရောင်းရရင် ငါငွေတွေ Aများကြီး ရမယ်။ ရရင် ငါဝတ်ဖို့ Aင်္ကျီAသစ်လှလှလေး တစ်စုံကို ဗိုလ်ချုပ်ဈေးထဲ သွားဝယ်မယ်။
သက်မန်ွမြင့်ထက်တောင်
မြင်တ့လဲူက ရပ်ကက်ွထကဲ
ကာလသားတွေလည်း ငါ့ကိုဝိုင်းကြည့်ကြမှာပဲ။ ထွန်းထွန်းတို့Aဖွဲ့ စတိတ်ရှိုးကို Aတူတူ ကြည့်ဖို့တောင် လာဖိတ်ချင်ဖိတ်နေမှာ။ ငါကတော့ Aရေးမလုပ်ပါဘူး။ ဟောဒီခေါင်းကလေး မော့ပြီး ရှောင်သွားမယ်’ လို့ စိတ်ကူးရင်းနဲ့ ခေါင်းကို မော့လိုက်တော့ ခေါင်းက နို့ပုံးဟာ မြေကြီးပေါ် ပြုတ်ကျပြီး နွားနို့တွေ Aကုန်လုံး ဖိတ်စU်ကုန်ရောတဲ့။ Aဲဒါကို သိသဖြင့် ကျနွုပ်သည် နို့သည်မလေးရှေ့ သွားရပ်ကာ“နေUီး... နေUီး... မင်း စိတ်ကူးတာတွေ ခဏရပ်Uီး” ဟုတားလိုက်မိ၏။ သူမက မကျေမနပ်ဖြစ်ကာ“ကျွန်မဘာသာ စိတ်ကူးတာကို ဘယ်သူမှ တားပိုင်ခွင့် မရှိဘူး။ ကျန်ွမ စိတ်ကူးဖို့Aတွက် ရှင့်ဆီမှာ ခွင့်ပန်နေရမှာလား” လို့ ပြန်ရန်တွေ့လေသည်။ ကျွန်ုပ်က Aကြောင်းစုံ ပြောပြကာ“Aဲသလို လုပ်ရင် နောက်ဆုံး မင်းနို့ပုံး မှောက်လိမ့်မယ်” သို့သော် မိန်းကလေးက ခေါင်းမာပုံရသည်။ “ရှင့်Aပူ မပါပါဘူး”
ဒီတော့မှ“Aို. .. ငါ့ကြက်Uလေးတွေ၊ ငါ့ကြက်ပေါက်စတွေ၊ ငါ့ကြက်ဝဝတုတ်တုတ်ကြီးတွေ၊ သူတို့ကို ရောင်းလို့ရတဲ့ ပိုက်ဆံတွေ၊ Aဲဒီပိုက်ဆံန့ဝဲယ်တဲ့ Aင်္ကျီစလှလှလေးတွေ၊ ငါ့ကိုကြိုက်တဲ့ ရပ်ကက်ွထကဲကာလသားတွေ ကုန်ပါပြီ၊ ကုန်ပါပြီ” ဆိုပြီး လမ်းပေါ်မှာ ထိုင်ငိုနေတယ်တဲ့။ AဲဒီAချိန်မှာပဲ ဘေးနားကိုတန်ဖိုးကြီး ဇိမ်ခံကားတစ်စီး ထိုးဆိုက်လာကာ ကားပေါ်မှ ချောမောလှပ၍ သနားကြင်နာတတ်ပုံရသော ကားပိုင်ရှင် သူဌေးသားကလေးတစ်Uီး ဆင်းသက်လာပြီး ငိုယိုနေသော နွားနို့သည် မိန်းကလေးကို ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင် မေးလေသည်။ နွားနို့သည်လေးက ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင် ပြောပြသောAခါ သူက ရယ်မော၍“မငိုန့ေဲတာ့ ညီမလေး၊ Aခု ဖိတ်ကုန်တဲ့ နွားနို့ဖိုးတွေလည်း Aစ်ကိုပြန်လျော်ပေးမယ်” “ထွန်းထွန်းတို့ စတိတ်ရှိုးကော လိုက်ပြမှာလား” “မင်းကြည့်ချင်ရင် ပြမှာပေါ့” သို့ဖြင့် နွားနို့သည် ကောင်မလေးတစ်ယောက် ဇိမ်ခံကားကြီးပေါ် ပါသွားသည်ကို မြင်လိုက်ရလေသည်။
။လူ့ကံဆို သည်မှာ ခန့်မှန်းရခက်သောAရာ ဖြစ်သည်) ဟဒယမဂ္ဂဇင်း၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၀၇ခုနှစ်။
မြည်းတစ်ကောင်နှင့် ဖြစ်တည်မှုပဓါနဝါဒ တစ်နေ့သ၌ ကျနွုပ်သည် ပုံပြင်ထတွဲင် လမ်းလျှောက်လာရာ လမ်းတွင် ကျွန်ုပ်ရှေ့မှ သွားလာနေကြသော မြင်းတစ်ကောင်၊ မြည်းတစ်ကောင်နှင့် လူတစ်ယောက်ကို မှီလာလေသည်။ Aဲဒီနေ့က တော်တော်ပူတယ်။ လမ်းကလည်း
မြည်းရဲ့ကျောပေါ်မှာတော့ Aတော်များများ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတွေ တင်ထားတယ်။ မြင်းကိုယ်ပေါ်မှာတော့ ဘာမှ
ရောက်သွားတော့ မြည်းက မြင်းကို တောင်းပန်နေတဲ့Aသံ ကြားရတယ်။ `မိတ်ဆွေ. .. ကျေးဇူးပြုပြီး ကျုပ်ကိုယ်ပေါ်က
ဖျားနေလို့ပါ´ လို့ ပြောတယ်။ မြင်းက ခေါင်းတခါခါ လည်တခါခါနဲ့. .. `မကူညီနိုင်ဘူး၊ မကူညီနိုင်ဘူး။ ကိုယ်ဝန်ထုပ် ကိုယ်သယ်´ လို့ ခါးခါးသီးသီး ပြောတယ်။ ဒီတော့မှ ကျနွုပ်ရောက်နေတဲ့ ပုံပြင်ဟာ Aီစတ်ွရဲ့ The Horse and the loaded Ass (မြင်းနဲ့ ဝန်တင်မြည်း)ဆိုတဲ့ ပုံပြင်မှန်း သိတော့တယ်။ ဒီပုံပြင်ကို ကျွန်ုပ်က ဖတ်ဖူးတော့ ရှေ့ဆက်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာ သိနေတယ်။ ဖြစ်တာက နောက်ဆုံး မြည်းဟာ ဒဏ်မခံနိုင်တော့လို့ လဲကျသေသွားတော့တယ်။ Aဲဒီတော့ သူတို့သခင်က မြည်းသယ်လာတဲ့
ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်း လမ်းမှာ ပစ်မထားရက်ဘူးဆိုပြီး A သယ်ခိုင်းတော့ မြင်းဟာ A င်မတန်လေးလံတဲ့ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတွေကို သယ်ခဲ့ရပြီး A င်မတန် ဒုက္ခရောက်ရတယ် ဆိုထားပါတယ်။ AဲဒီA ချိန်မှာ မြည်းက တောင်းပန်ပြန်တယ်။ `မိတ်ဆွေ. ..
ကျုပ်ဆက်မသယ်နိုင်တော့လို့ပါ´ လို့ ပြောတယ်။ Aဲဒါလည်း မြင်းက လက်မခံဘူး။ ငြင်းမြဲ ငြင်းတယ်။ ဒါကြောင့် ကျနွုပ်လည်း သူတို့A နား ကပ်သွားပြီး ဖျောင်းဖျပါတယ်။ `ကူသယ်လိုက်ပါ
ကူညီကောင်းပါတယ်´ ဒါပေမယ့် မြင်းဟာ ခေါင်းမာတယ်။ ပြီးတော့ ပြောသေးတယ်။ `ခင်ဗျား Aိတ်ဇင်စတယ်ရှယ်လစ်ဇင်း ဆိုတဲ့ ဝါဒကို ကြားဖူးလား။ သတ္တဝါတိုင်းဟာ ကိုယ့်ဖြစ်တည်မှုကို ကိုယ်တာဝန်ယူရတယ်ဗျ။ သူက မြည်းဘဝ၊ ကျုပ်က မြင်းဘဝ၊ ဖြစ်တည်မှုချင်းမတူရင် A နှစ်သာရ မတူဘူး။ ကျုပ်က သာမန်မြင်း မဟုတ်ဘူး´ `ဒါဆို ဘာမြင်းလဲ၊ သိန္ဓောမြင်းလား´ လို့ မေးတော့-
ဆော်ဘနွ်းတက္ကသိုလ်ထမှဲာ
ယန်းပေါဆတ်တို့ ဆီမန်ွဒီဗိုးဘွားတို့လည်း တွေ့တယ်။ သူတို့တွေက ဒီဝါဒတွေAကြောင်း ဆွေးနွေးနေတာ ကြားရတော့ ကျုပ်လည်းနားရည်ဝနေပြီ။ ဒါကြောင့် ဒီမြည်းပြောနေတာတွေ လက်မခံနိုင်ဘူး´ လို့ ပြောသေးတယ်။ ရှေ့ဆက်သွားပြီး မကြာပါဘူး။ မြည်းက ဝန်ပိပြီး လဲကျ သေပါလေရော။ Aဲဒီတော့ ပုံပြင်ထကဲAတိ်ုင်းပေါ့။ သူတို့သခင်က
ဖြစ်တည်မှု ပဓါနဝါဒကိုတော့ သေတစ်ပန် သက်တစ်ဆုံး စွန့်လွှတ်လိုက်တယ်လို့ ကြားရတာပါပဲ။
ဟဒယမဂ္ဂဇင်း၊ မတ်လ၊ ၂၀၀၇ခုနှစ်။
ထူးထူးခြားခြား မင်္ဂလာပွဲများ (Eဝံ- ဤသို့ Aနှီသို့ ထိုသို့၊ မေ-ကျွန်ုပ်တည်းဟူသော မAူမလည် ကလောင်တစ်ချောင်းပိုင်ရှင် ဟိုမရောက် ဒီမရောက်ငနဲသည်၊ သုတံ-Aမှတ်မထင် ကြားနာလိုက်ပါ၏) ရှေးလူကြီးများ ကြားသည်ရှိသော် ကျားသားမိုးကြိုးဟု Aထိတ်တလန့် ရယ်ဖယ်ွကောင်းပေ၏။ Aိန္ဒိယနိုင်ငံ သြရိသခပြည်နယ်
ကျင်းပခဲ့တာ လူ-၃၀၀၀ ကျော် တက်ရောက်ခြဲ့ ကတယ်တဲ့။ မင်္ဂလာဆောင်တာ ဘာထူးသလဲ မေးAံ့။ မင်္ဂလာဆောင်သူ နှစ်Uီး။ လူမဟုတ်ဘဲ မျောက်နှစ်ကောင် ဖြစ်နေတာပါပဲ။ (ဒီနေရာမှာတော့ Liv ing together
Aလှပြင်ထားသေးတယ်တဲ့။ သူတို့စုံတကွဲို ဘုရားကျောင်း မင်္ဂလာမဏ္ဍပ်ကို AတီးAမှုတ် AကAခုန်တွေနဲ့ ပရိသတ်က
ပွတဲက်သူတွေက
လက်ဖ့ပွဲ စ္စည်းတွေ
ပဲကြီးလှော်တွေ နေမှာပေါ့နော်။ သူတို့ပလဲားဆိုတော့ မဟုတ်သေးဘူး။ မကြာခင်က ချင်းမိုင်တိရစ္ဆာန်ရုံမှာလည်း ချွမ်ချွမ်နဲ့ လင်ဟီဆွိုတဲ့ ပန်ဒါဝက်ဝံလေးနှစ်ကောင် လက်ထပ်ပကွဲို တာဝန်ရှိသူတွေက ကျင်းပပေးခဲ့သေးတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည် ဒီပန်ဒါဝက်ဝံနှစ်ကောင်ပဲ ရှိတယ်။ Aဲဒီနှစ်ကောင်ကို Aမေရိကန်က ၁၀နှစ်စာချုပ် ဒေါ်လာ ၂သိန်းခွနဲ့ ငှားထားတယ်တဲ့။ Aဲဒီပကွဲိုလည်း ထိုင်းလူမျိုးတွေ Aတော်များများ တက်ရောက်ခြဲ့ ကတယ်။ ပန်ဒါဆိုတာ တရုတ်ပြည်မှာ ပေါက်ဖွားပြီး AခုAခါ မျိုးတုန်းတော့မယ့် Aန္တရာယ်နဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ တိရစ္ဆာန်လေးတွေမို့ Aားလုံးဟာ
ထားရှိနိုင်တာကို ရှားပါးတဲ့ ဂုဏ်Aဖြစ် မှတ်ယူလေ့ရှိကြပါတယ်။ မကြာခင် စီချွမ်မှာ လှုပ်ခတ်ခ့တဲ့ ငလျင်မှာ တိရစ္ဆာန်ရုံလည်း ဆုံးရှုံးသွားပါတယ်။
ပြိုပျက်ခ့ေဲတာ့ သူ့ကို
သဘာဝသစ်တောထဲမှာမြှုပ်နှံခ့ပဲါတယ်။
မော်မော်ကယ်ွလန်ွတော့
ကလေးငါးယောက်ကျန်ခ့တဲယ်တဲ့။
ရှားပါးတိရစ္ဆာန်ဆိုတဲ့ ပန်ဒါဝက်ဝံတွေဟာ သူတို့မူလ ဇာတိဖြစ်ခ့တဲ့ တရုတ်ပြည်မှာတောင် Aကောင်ရေ ၁၆၀၀ လောက်သာ ကျန်တော့တယ်တဲ့။
တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာ သတင်းမဟုတ်ဘူး။ လူက ခွေးကို ကိုက်တယ်ဆိုတာမှ သတင်း´ တဲ့။ မကြာမီက ဘရာဇီးနိုင်ငံသတင်းတစ်ပုဒ် ဖြစ်ခ့တဲယ်လို့ ပြောရမယ်။ ဂေဘရီရယ် ဆိုတဲ့ ၁၁နှစ်သားလေးဟာ ခြံထမှဲာ ကစားနေတုန်း ခွေးဘီလူးတစ်ကောင် ရုတ်တရက်ရောက်လာပြီး သူ့ကို ကိုက်တော့ Aားကျမခံ သူကလည်း ပြန်ကိုက်လိုက်တာ သွားတစ်ချောင်းတောင် ကျွတ်ထက်ွသွားတယ်တဲ့။ သူက ခွေးလည်ပင်းမှ ပြန်ခတဲာ။ ဒီကိစ္စကို ဘရာဇီးသတင်းစာတွေက တခမ်းတနား ဖော်ပြကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့
ခွေးAသုံးဆောင်တွေ တွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ ခွေး AစားAစာ စည်သတ်ွဘူးတွေ၊ ခွေး ရေချိုးတဲ့ဆပ်ပြာတွေ၊ ခွေးစားစရာထည့်တဲ့ ပန်းကန်ခက်ွယောက်တွေ၊ ခွေးမွေးဖြီးတဲ့ ဘီးတွေ၊ ခွေးဝတ်တဲ့ Aဝတ်Aစားတွေ စသဖြင့်ပေါ့လေ။ ကျွန်တော့်မျက်လုံးထဲမှာတော့ Aဝတ်Aစား ဝတ်ထားတဲ့ ခွေး၊ ကြောင်တွေ ကြည့်ရတာ တော်တော် ဘဝင်မကျစရာ
ဆန့်ကျင်ရာရောက်တ့Aဲတွက်
ကိုယ်ခံစမွ်းAားကိုလည်း တစ်စတစ်စ ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်) တကယ်တော့ တိရစ္ဆာန်ကို တိရစ္ဆာန်လို သဘောထားတာပဲ ကောင်းပါတယ်။ တချို့ တစ်ခြင်ထောင်တည်း Aိပ်၊ တစ်ပန်းကန်တည်း စားကြတယ်ဆို တွေးကြည့်လို့တောင် မရပါဘူး။ တလောက ဖတ်လိုက်ရတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ ဂျာမနီမြို့တစ်မြို့က ရဲတွေဟာ သူတို့ရတဲပ်ဖ့ပွဲိုင် ခွေးတွေကို
ကင်းလှည့်ထက်ွတဲ့
ပေးထားကြပါတယ်။ ရဲခွေးAကောင်၂၀၀ ကို ဖိနပ်နဲ့ လမ်းလျှောက်တတ်ေAာင် လေ့ကျင့်ပေးနေပါတယ်။ Aဲဒီမြို့မှာက ဘီယာဆိုင်တွေ များတယ်။ ဘီယာမူးပြီး ရမ်းကားတဲ့ Aရက်သမားတွေလည်း များတယ်။ လမ်းပေါ်မှာ
ခြေထောက်ဒဏ်ရာ ရလေ့ရှိပါတယ်။ ဖိနပ်စီးရတာ AဲဒီAန္တရာယ် ကင်းေAာင်တ့။ဲ တစ်ခေတ် တစ်ခါက ဆရာရန်ကုန်ဘဆွေတို့၊
Aမှတ်ရမိသေးတော့တယ်။ ခေါင်းစU်က `လူသည် ခွေးထက် မိုက်သည်´တဲ့။
ရယ်စရာမဂ္ဂဇင်း၊ေAာက်တိုဘာလ၊ ၂၀၀၈ခုနှစ်။
သူတို့Aကြောင်းနဲ့ သူတို့ (Eဝံ- ဤသို့
မှားယွင်းစာမစီပါနှင့်”၊ Aဟုတ် ကျွန်ုပ် ကလောင်Aကောင်းစားလေးသည်၊ သုတံ-ကြားလိုက် နာလိုက် မှတ်လိုက် ဖတ်လိုက်ရပါကြောင်း၊ နောက်ကယ်ွမှ ဖောက်သည်ချလိုက်ရပါ၏) ကမ္ဘာ့
ထင်ပေါ်ကျော်ကြား လူသိများတဲ့သူတွေထမှဲာတော့
သတင်းဖြစ်နေတော့တာပါပဲ။ သတင်းစက်ရုံများလို့လည်း ခေါ်လို့ ရတာပေါ့လေ။ Pop မဂ္ဂဇင်းဂျာနယ်တွေရဲ့ Aသက်ဟာလည်း သူတို့ပါပဲ။ ဒါကလည်း သဘာဝတော့ ကျပါတယ်။ ပိုက်ဆံပေးဝယ်ရတဲ့သူတွေက ရပ်ကက်ွထကဲAကြော်သည် ဒေါ်ဘုမနဲ့ ဆိုက္ကားသမား ကိုခွေးAကြောင်းတော့ ဘယ်ဖတ်ချင်ပါမလဲ။ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရာမှာလည်း ဇ မသေးတဲ့ ဒေါ်မက်ဒေါနားက (Aာဂျင်တီးနား Aာဏာရှင် AီဗာAတ္ထုပတ္တိကို ရိုက်တဲ့Aခါ ကမ္ဘာကျော် ဒါရိုက်တာကြီး မေးလော့ဖိုမန်ကတောင် မက်ဒေါနားကို ခေါ်ရိုက်ရတယ်) ဂန္ဓီ၊ မာတင်လူသာကင်းနဲ့
ဂျွန်လင်နန်ွတို့လို
(sirius) ကို ထုတ်ပြောလိုက်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးနဲ့နယ်ွတဲ့ ဇာတ်ကားကို ရိုက်လို့ ပိုးဝင်သွားပြီး ဂန္ဓီ၊ မာတင်လူသာကင်း ဖြစ်ချင်တာလားဆိုတော့ ဟုတ်ပုံမရဘူး။ သူဖြစ်ချင်တဲ့သူတွေကို ကြည့်လိုက်တော့ (ဂျွန်လင်နနွ် AပါAဝင်) Aားလုံးဟာ သူများ လုပ်ကြံခံရမှုကြောင့် Aသက်ဆုံးရသူတွေ ဖြစ်နေတယ်။ မနှစ်က
ဖျော်ဖြေပွတဲစ်ခုမှာလည်း
Aယူဝါဒတစ်ခုပါ) Aားကျစရာ ရှားလို့ မက်ဒေါနားရယ်လို့ပဲ ပြောရမလား။ ဒီလိုမှန်း စောစောက သိရရင် ဘာနာဇီယာဘူတိုနဲ့ လူချင်း လဲပေးလိုက်ရရင် မကောင်းပေဘူးလား။ သူလိုပဲ
ပဲရစ်ဟီတန်ကတော့ ရန်တွေ့ကောင်းတဲ့ Aတွက် နာမည်ကြီးတယ်။ သူနဲ့ ခေတ်ပြိုင် ရုပ်ရှင်မင်းသမီး Aဆိုတော်တွေထမှဲာ သူနဲ့ စောင်းမြောင်းရိပ်ခြည် မပြောဖူးတဲ့သူ ခပ်ရှားရှား။ ဒါပေမဲ့ ဒီတစ်ခါ သူရန်တွေ့တဲ့ လူကတော့ ထူးခြားတယ်။ Aမေရိကန် ရီပတ်ဘလီကင် သမ္မတလောင်း ဂျွန်မက်ကိန်း ဖြစ်နေလို့ပါ။ သူမက ဂျွန်မက်ကိန်းကို
သမ္မတပြိုင်ပဝွဲ င်မယ်လို့ ဂျွန်မက်ကိန်းဟာလည်း
သမ္မတလောင်း Aိုဘားမားကို (ပဲရစ်ဟီတန်လို Aပေါစား နာမည်ကြီးတစ်ယောက်) လို့ ခေါ်လိုက်တာကိုး။ သူငယ်မ နာမယ်ဆိုလည်း နာလောက်တာပေါ့နော်။
ထုတ်ဝေလိုက်ပါတယ်။ သူက Aခုမှ သမ္မတAားကိုးနဲ့ ထလုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ သမ္မတနဲ့ မရခင်ကတည်းက မော်ဒယ်Aဟောင်း၊ ပေါ့ပ်Aဆိုတော်ပါ။ ၂၀၀၃က ထုတ်တဲ့သူ့ရဲ့ ပထမဆုံး Aယ်လ်ဘမ်ဟာဆိုရင် ချပ်ရေ ၂ သန်းလောက်
ဒါက ပြင်သစ်စကားပြောတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာချည်း ရောင်းရတာပါ။
သူက ပြင်သစ်ဘာသာနဲ့ပဲ ဆိုတာကိုး။ Aခု ထုတ်ဝေတာက သူ့ရဲ့ တတိယမြောက် Aယ်လ်ဘမ်တဲ့။ AဲဒီAယ်လ်ဘမ်ထကဲသီချင်းAများစုက သူကိုယ်တိုင်ရေးတာတဲ့။ လုပ်ပလဲုပ်နိုင်တဲ့ သမ္မတကတော်လို့ ပြောရမလားပဲ။ ဟော... ကမ္ဘာကျော် ဘောလုံးမင်းသားကတော် စပိုက်ဂလဲ် Aဆိုတော်မလေး ဗစ်တိုးရီးယားဘက်ဟမ်း Aကြောင်းကြားလိုက်ရတာတော့ မထိတ်သာ မလန့်သာပဲ ခင်ဗျ။ Aဲဒီ ဆတ်ကော့လတ်ကော့လေးက Aထင်ကရ ကွန်မြူနစ်ဝါဒရဲ့ ဖခင်ကြီး ကားလ်မာ့စ်နဲ့ ဆွေမျိုးစပ်လို့ ရတယ်တဲ့။ ဗစ်တိုးရီးယားရဲ့Aမေဟာ ဂျာမန်လူမျိုး ဟိန်းနရစ်ဖန်ဒါရဲ့ သုံးဆက်မြောက်မြေးတဲ့။ ဖန်ဒါဟာ မာစ်န့Aဲတူ ၁၈၄၈ တော်လှန်ရေးမှာ ပူးတွဲ ပါခ့တဲယ်။ တော်လှန်ရေး မေAာင်မြင်လို့ လန်ဒန်ကို ထွက်ပြေးပြီး ပန်းချီဆရာ လုပ်ခ့တဲာတဲ့။ ကဲ. ..
ဆက်နယ်ွပုံတွေက
Uုံ မပျင်းနဲ့ Aမေရိကန်က လူတွေ ပျော်ကြရဲ့လား။ Aဲဒါတော့ ကျွန်တော်လည်း မသိဘူးခင်ဗျ။ ဒါပေမယ့် ရှီကာဂို တက္ကသိုလ်တစ်ခုက ပြုလုပ်တဲ့ စစ်တမ်းကောက်ယူမှုAရတော့ Aမေရိကန်မှာ သက်ကြီးရွယ်Aိုတွေဟာ Aပျော်ရွှင်ဆုံးလူတွေလို့ Aဖြေထွက်လာတယ်တဲ့။ သူတို့ဟာ လူငယ်တွေထက် ပိုပြီး ဘဝကို ကျေနပ် ရောင့်ရလဲယ်ွကြတယ်။ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်း Aားတက်သရော ပါဝင်ဆောက်ရက်ွနေကြတယ်။ မှန်ပါတယ်။
မွေးနေ့Aကြိုပွမှဲာ
Aလုပ်လုပ်တာဟာ Aသက်ရှည်ရခြင်းရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တဲ့။ ဒီဘွားတော်ကြီးကလည်း ပေါ့သေးသေးတော့ မဟုတ်ဘူး။ Aမေရိကန်က ကမ္ဘာကျော် မီလျှံနာသူဌေးကြီး ရူးပတ်မားဒေါခ်ျရဲ့ Aမေပါ။ မားဒေါခ်ျဟာ ၇၆ နှစ်ရှိပြီ။ AခုAချိန်Aထိ သူ့ကုမ္ပဏီမှာ Uက္ကဌတာဝန် ယူထားတုန်းပဲ။ ကျန်ွတော်တို့ဆီမှာ ဆင်းရဲတယ်ဆိုပြီး Aချိန်တွေကို Aလဟဿ ဖြုန်းတီးနေတဲ့သူတွေ Aတုယူစရာပဲ။ ဒါကြောင့် ဆရာကြီး ပီမိုးနင်းက မြန်မာတွေကို Aချိန်မီလျှံနာတွေလို့ ခေါ်ဖူးတာ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ Aလုပ်တကယ်လုပ်တဲ့
ဘွားဘွားဖီးလစ္စတာနာဟာ Aာဒီလိတ်တက္ကသိုလ်က ဆေးပညာ မဟာသိပ္ပံဘ့ကွဲို Aသက် ၉၄ နှစ်မှာ ဆွတ်ခူးနိုင်လိုက်တဲ့Aတွက် ကမ္ဘာ့Aသက်Aကြီးဆုံး မဟာဘွ့ရဲသူAဖြစ် ဂင်းနစ်စာAုပ်မှာ မော်ကနွ်းတင် ခံလိုက်ရပါပြီ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ Aသက်Aကြီးဆုံး ပါရဂူစံချိန် ထူထားတဲ့သူက လန်ဒန်က Aဂ္ဂါဒေါင်းဖြစ်ပြီး သူ ဘာသာရေးတက္ကသိုလ်က Aဲဒီဘ့ကွဲိုယူတော့ Aသက် ၉၃နှစ် ရှိပြီတဲ့။ Aိုမင်းမစွမ်းဆိုတဲ့
တတ်သူတွေAတွက် Aတုယူစရာပါ။ ဘေးဂျင်း Aိုလံပစ်တုန်းက ဒီလို တရုတ်ဘွားဘွားတစ်ယောက် ပေါ်လာသေးတယ်။ သူ့နာမည်က ဒေါ်ရှောင်ရင်းတဲ့။ သူက ဘေဂျင်းက တရုတ်ကြက်တောင်Aသင်း ကစားတာကို
ဇွပဲါပဲ။
တရုတ်မီဒီယာတွေရဲ့ ဂုဏ်ပြုတာ ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဆရာတော်ဘုရားကြီးတစ်ပါးက
ကြားဖူးပါတယ်။ Uုံ မပျင်းနဲ့ တဲ့။ ပျင်းရင်တော့ ဖျင်းရောပေါ့ ခင်ဗျာ။
ရယ်စရာမဂ္ဂဇင်း၊ နို ဝင်ဘာလ၊ ၂၀၀၈ခုနှစ်။
စုပေါင်း လက်ထပ်၊ မီးဖွား၊ ကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်း ကိစ္စများမြောင်၊ လူတို့ဘောင်မှာ Aာဝါဟ ဝိဝါဟ ကိစ္စဟာလည်း ရှေ့တန်းက ပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ Aာဒမ်နဲ့ Eဝတို့ကတော့
စတင်တွေ့မြင်ရစပြုပါပြီ။ Aကုန်Aကျခံနိုင်တဲ့သူ၊ Aကျယ်ချဲ့နိုင်တဲ့သူတွေAတွက်ကတော့ တတ်နိုင်ရင် တတ်နိုင်သလောက်ပေါ့လေ။ မင်္ဂလာလည်း
စုပြီး စုပေါင်းမင်္ဂလာဆောင်ကြပေါ့။ မကြာခင်က
Aဲဒီမင်္ဂလာပွကဲို
Aစ္စလာမ် လူမှုရေးAဖွ့Aဲစည်းကြီးကပါ။ ဒီလက်ထပ်ပမွှဲာ စုံတွဲ ၅၈တွဲ ပါဝင်ဆင်နြွှဲ ကတယ်။ ဒါက ၁၅ကြိမ်မြောက် စုပေါင်းလက်ထပ်ပတွဲ့ဲ။ တောင်Aာဖရိကနိုင်ငံ
နောက်ဆက်တလွဲို့တောင် ဆေးရုံတစ်ရုံတည်းမှာ မှတ်တမ်းတင်တဲ့
ဒီပဟွဲာ
စုပေါင်းပွကဲတော့
ဆိုပါတယ်။ လောကဓမ္မတာ စေ့စပ်လက်ထပ်တာ ရှိရင် မွေးဖွားတာလည်း ရှိရမှာပေါ့ဗျာ။ Aဲသလိုပဲ ကွာရှင်းတာလည်း ရှိရတာ သဘာဝကျပါတယ်နော်။ သြစတြေးလျနိုင်ငံ ဗီယင်နာမြို့မှာတော့ ကမ္ဘာပ့  ထမဆုံး ကွာရှင်းပွေဲတာ် (World's First Divorce Fair) ကို ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ (Aဲဒီမြို့ဟာ လင်ကွာ မယားကွာနှုန်း Aတော်မြင့်မားတဲ့ မြို့လို့လည်း ဆိုပါတယ်) ဇိမ်ခံဟိုတယ်ကြီးတစ်ခုမှာ
ဒီကွာ ရှင်းပြတ်စတဲ့
Aများကြီးပဲတဲ့။ Aဲဒါ ဘယ်သူတွေမှတ်လဲ။ Aလွတ်စုံထောက်တွေ (ကိုယ့်မိန်းမ၊ ကိုယ့်ယောင်္ကျား၊ တိတ်တိတ်ပုန်း ဘယ်သူနဲ့ တွဲခုတ်နေတယ်ဆိုတာ စုံစမ်းပေးရတဲ့သူတွေ) ကိုယ့်ရင်သွေး ကိုယ်န့ရဲတာ ဟုတ်မဟုတ်
ဓါတ်ခမွှဲူးတွေ
လျော့ပါးေAာင် ပညာပေး ဆွေးနွေးမယ့် စေတနာရှင်တွေ ကွာရှင်းပြီးလျှင် လက်ရှိAိမ်ကို ရောင်းပစ်မလား၊ Aိမ်Aသစ်
ဆောင်ရက်ွပေးမယ့်
Aိမ်ပစွဲားတွေ၊
စာနယ်ဇင်းသမားတွေ။ ကဲ. .. ဘယ်လောက် စည်ကားလိုက်မလဲ စU်းစားသာ ကြည့်ကြပေတော့ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့
ကွာရှင်းပြတ်စတဲာမျိုးကို
ထောက်ခံAားပေးလေ့ မရှိဘူး။ ရိုးမြေကျ တစ်Aိုးတစ်Aိမ်စနစ်ပဲ တန်ဖိုးထားကြပါတယ်။ Aိမ်ထောင်မှု ဘုရားတည် ဆေးမှင်ရည် စုတ်ထိုးဆိုတဲ့ စကားတောင် ရှိတယ်မဟုတ်လား။ ဒါပေမဲ့
လူ့Aဖွ့Aဲစည်းမှာတော့
ရှီကာဂိုမြို့မှာ Aမျိုးသမီးရှေ့နေ (Aသက်ငယ်ငယ် ချောချောလေးပဲ ခင်ဗျ) ကော်ရီဖက်ဂမင် ဆိုတာ ရှိတယ်။ ဒါနဲ့
ကွာရှင်းပြတ်စမှဲုတွေ
ဖြေရှင်းကိုင်တယ်ွရတာတဲ့။
ကြော်ငြာလိုက်တယ်။ စာသားကလည်း တော်တော်ထိမိပါတယ်။
ဘဝဆိုတာ Aလွန်တို Aမြန်ပြတ်စဖဲို့ လို... တဲ့။ ဒါပေမဲ့
ရှားရှားပါးပါး လေလံပွဲများ သစ်ပင်
ဆောက်ရက်ွလာပါတယ်။
တောခေါင်းဒေးဗစ်ဆိုတ့လဲူဟာ
ဆန်းသလားမေးပါက ဆန်းတယ်ဟု ဆိုရပါမယ်။ ဒီAပင်က လွန်ခ့ေဲသာ နှစ်သန်းပေါင်း ၉၀ ကျော်က ဒိုင်နိုဆောကြီးတွေန့Aဲတူ
မျိုးတုန်းပျောက်ကယ်ွသွားပြီလို့
ယူဆထားကြတဲ့ Aပင်တဲ့။ AမျိုးAစားက ၀ူလမ္မီတဲ့။ Aခု AဲဒီAပင်တွေကို ခင်ဗျားတို့ စိုက်ချင်တယ်ဆို စိုက်လို့ရပါပြီ။ လန်ဒန်က ခယူးUယျာU်မှာ မျိုးပွားပြီး ‘ဆော့သ်ဘီ’ လေလံကုမ္ပဏီက တစ်ဆင့် လေလံတင် ရောင်းချနေပြီတဲ့။ မျိုးစေ့က ဖောက်တဲ့Aပင်က ဒေါ်လာ ၂၀၀၀၊ ကိုင်းဖြတ်ပွားတဲ့ Aပင်က ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ တဲ့။ သမိုင်းUီး
လေလံတင်ခ့တဲ့
သမိုင်းUီးဆင်ကြီးရဲ့ Aရိုးစုကတော့ ဒေါ်လာ ၄ သိန်း ရသွားပါတယ်။ AဲဒီAရိုးစုကြီးကို သမ္မတကြီးလို့ Aမည်ပေးထားတယ်တဲ့။ Aမြင့် ၁၂ပေခွဲ၊ Aလျား ၁၆ ပေရှိတဲ့ AဲဒီEရာမဆင်ကြီးရဲ့ သက်တမ်းကတော့ Aနှစ် တစ်သောင်းခွဲလောက် ရှိပြီတဲ့။ ရေကြံ့Aရိုးစုက ဒေါ်လာ တစ်သိန်းခွဲ၊ ဂူေAာင်း ဝက်ဝံAရိုးစုက ဒေါ်လာခြောက်သောင်းကျော်
ဆိုရမလားပဲ။ Aိုင်တီနည်းပညာ ထွန်းကားနေတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ လေလံတင်တ့ပဲုံစံတွေလည်း ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ မောင်းကလေးထုကာေAာ်နေစရာ မလိုတောဘူးပေါ့။ ဒီAန်ွလိုင်း လေလံပမွှဲာ တလောက eBay မှာ ထူးထူးခြားခြား
လေလံတင်ခ့တဲာကတော့
ရွှေရောင်ဆံပင်တဲ့။ မကြာခင်က ကိတ်မော့စ်ဟာ ဂျာမနီနိုင်ငံ Aလည်ရောက်နေတုန်း သတင်းဓါတ်ပုံသမား ပါပရာဇီတွေ ရန်က ထွက်ပြေးရင်း ဆံပင်Aနည်းငယ် ကျွတ်ကျန်ခ့တဲာတဲ့။ Aဲဒီဆံစ တစ်ချို့ကို ရသွားတဲ့ ဓါတ်ပုံဆရာ တစ်ယောက်က
မဟုတ်ပါဘူး။ ရတဲ့ AကျိုးAမြတ်ကို မူးယစ်ဆေးဝါး ဆန့်ကျင်ရေးAဖွ့ကဲို လှူဒါန်းမယ်ဆိုတော့လည်း သာဓုခေါ်စရာပေါ့ ကိတ်မော့စ်ရယ်။ မကြာခင်က Aင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ လေလံတင်ရောင်းချတဲ့ ပစ္စည်းကတော့ တကယ့်ကို ရှားရှားပါးပါး ခေါ်ရမယ်။ Aင်္ဂလန်က ဝိတိုရိယဘုရင်မကြီးဝတ်တဲ့ Aတွင်းခံဘောင်းဘီတဲ့။ ၁၈၉၀ ခုနှစ်လောက်က ဘုရင်မကြီး
Aပျိုတော်တစ်ယောက်က သိမ်းထားရာက လေလံတင်တာတဲ့။ ကြမ်းခင်းဈေးက စတာလင်ပေါင် ၅၀၀ ကစလိုက်တာ။
ပိုင်ဆိုင်သွားပါတယ်တဲ့။ သူတို့Aတွက်တော့ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတဲ့ သမိုင်းဝင်လူမှုရေးပစ္စည်းလို့ ဆိုကြတာပါ။
ရယ်စရာမဂ္ဂဇင်း၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၀၈ခုနှစ်။
Aမျိုးသမီးရေးတဲ့ Aမျိုးသားသီချင်း တို့Aလံကို ကောင်းကင်မြင့်သလောက် မြင့်ေAာင်ထူမည်... တို့Aသည်းနှလုံးမှာ ဂုဏ်ကျက်သရေAဖြစ် လက်ခံ ယုံကြည် ... Aာဆီယံတို့ဟာ တစ်ခုတည်းသော Aနှောင်Aဖွဲ့ ဖြစ်သည် ... Aထက်က စာပိုဒ်ဟာ ‘Aာဆီယံလမ်းစU်’ဆိုတဲ့ သီချင်းရဲ့ ပထမဆုံး Aပိုဒ် ဖြစ်ပါတယ်။ AဲဒီAာဆီယံ Aမျိုးသားသီချင်းကို ရေးစပ်ခ့တဲ့သူကတော့ Aမျိုးသားမဟုတ်ပါ ခင်ဗျာ။ ထိုင်းAမျိုးသမီး ဂျာနယ်လစ် Aယ်ဒီတာဟောင်း
မစ္စပဂွန်ဗလိုင့်ဖက်ရန်ွရာ
နိုင်ငံများAဖွ့ကဲို တည်ထောင်ခ့တဲာ သက်တမ်းAားဖြင့် ၄၂ နှစ် ရှိခပ့ဲါပြီ။ Aဲသလောက် ရှည်ကြာပြီးမှပဲ ခုလို
နိုဝင်ဘာလကုန်လောက်က ဘန်ကောက်မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ Aာဆီယံ ဂီတစာဆိုများ ဖိုရမ် ဆွေးနွေးပွမှဲာ Aကဲဖြတ်Aဖွ့ကဲဒီသီချင်းကို
ရွေးချယ်ပကွဲို
Aဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀ နိုင်ငံက သီချင်းပုဒ်ရေ ကိုးဆယ့်ကိုးပုဒ် ဝင်ရောက်ယှU်ပြိုင်ခ့ပဲါတယ်တဲ့။ AဲဒီAထဲမှာ ထူးခြားထူးချွန်စွာ Aရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာကတော့ မစ္စပဂွန်ပါပဲ။ AဲဒီAတွက် ဆုငွေ ဒေါ်လာ ၂၀၀၀၀ (နှစ်သောင်း) ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရပါတယ်။ သီချင်းက တစ်မိနစ်(စက္ကန့်ခြောက်ဆယ်) ပဲ ရှည်ကြာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တိုတိုနဲ့ ထိထိမိမိ ရှိပါတယ်။ စကားလုံး ပြောင်မြောက်သလောက် Aနှစ်သာရကလည်း ပြည့်ဝပါတယ်။ တစ်ခုတော့ရှိတယ်
ဆိုရတာပါပဲ။ေAာက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ Aဆုံးပိုဒ်ကလေးကို ကြည့်ပါ။ တိုတောင်းသလောက် ထိမိတာ တွေ့ရပါမယ်။
We dare to dream We care to share For it's the way of Asean. ၁၄ကြိမ်မြောက် Aာဆီယံ ထိပ်သီးA စည်းA ဝေးမှာ Aဲဒီ ‘Aာဆီယံ လမ်းစU်’ ဆိုတဲ့ သီချင်းကို သီဆိုသူ ၅၂ Uီးက ထိုင်းဘုရင်ရေတပ်မတော် တီးဝိုင်းနဲ့A တူ A ခမ်းA နားA ဖွင့် သီဆိုခ့ပဲါတယ်။ သီချင်းက ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘိုလိုချည်း ဆိုနေရမယ်ဆိုရင် မနိပ်ဘူး ထင်ပါတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံA လိုက် (ထိုင်းလည်း ထိုင်းA လျောက်၊ ဗီယက်နမ်လည်း ဗီယက်နမ်A လျောက်) ဒီသီချင်းတေးသွား (မယ်လိုဒီ) A တိုင်း
ပိုကောင်းမလားလဲ တွေးမိပါတယ်။ ဘယ်လို သဘောရကြပါသလဲ ခင်ဗျာ။
နမော်နမဲ့များ၏ နောက်ဆက်တွဲ မော်တော်ကားချင်း တိုက်မိတယ်တဲ့။ နေ့စU်လောက်နီးပါး ကြားနေရတဲ့ သတင်းစကားပါပဲ။ ထူးတယ် မခေါ်နိုင်ပါဘူး။ ကိုယ်သွားနေတဲ့
မကြားဖူးတဲ့ စကားတော့ မတော်တဆမှုဆိုတာ ဆန်းတယ်လို့
ဖြစ်ဖြစ်၊ တခြားAကြောင်းကြောင့်ပဲ ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာ
မထိတ်သာ မလန့်သာ။ Aဲဒီသင်္ဘောတွေကလည်း နျူကလီးယားလက်နက်တွေ တပ်ဆင်ထားတယ်တဲ့။ မပေါက်ကတွဲာကံကောင်းပေါ့။ ဒီလောက်ကျယ်တဲ့ သမုဒ္ဒရာထဲမှာမှ တိုက်မိေAာင် တိုက်မိတာက ဆန်းလှတယ် ဆိုရမယ်။ တစ်စီးက ဗြိတိန်ပိုင်။ တစ်စီးက ပြင်သစ်ပိုင်။ သင်္ဘောနှစ်စီလုံးကလည်း ခေတ်မှီထောက်လှမ်းရေး ကိရိယာတွေ တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ ဒါတောင် တစ်စီးန့တဲစ်စီး ကြိုတင် မထောက်မိကြဘူးလား။ သိရသလောက်တော့ သူတို့ ရေငုပ်သင်္ဘောတွေဟာ တခြားသူတွေ ထောက်လှမ်းမရနိုင်ေAာင် စီမံဆောင်ရက်ွထားကြတယ် ဆိုတာပါပဲ။
ပုစန်ွဆိတ်တစ်ကောင်ရဲ့
Aဲဒီနှစ်နိုင်ငံဟာ ရေငုပ်သင်္ဘောသွားမယ့် လမ်းကြောင်းတွေကို ညှိနှိုင်းဖို့ တိုက်တနွ်းကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခက်တာက
နျူကလီးယားလက်နက် တပ်ဆင်ထားတဲ့ ရေငုပ်သင်္ဘောတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုဆိုတာ နိုင်ငံတော် လျှို့ဝှက်ချက် ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ တိုက်မိတဲ့ ရေငုပ်သင်္ဘောတွေ ဗြိတိန်ရဲ့ရေငုပ်သင်္ဘော HNS vanguard က ၁၉၉၃ ခုနှစ်ကစပြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်တာ ပြင်သစ်ရေငုပ်သင်္ဘော Le Triomphant ကတော့ ၁၉၉၇ ခုနှစ်ကစပြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်တာတဲ့။ နှစ်သက်ရှည်ကြာ Aိုမင်းလာတော့ ရေငုပ်သင်္ဘောတွေလည်း လူတွေလိုပဲ နမော်နမဲ့နိုင်လေသလား သံသယပွားစရာပေါ့ခင်ဗျာ။ ဟော... လာပြန်ပါပြီ ခင်ဗျ။ သမုဒ္ဒရာထဲမှာ ရေငုပ်သင်္ဘောနှစ်စီး တိုက်မိတာကို သိပြီး Aားကျမခံ ဂြိုဟ်တုနှစ်လုံးကလည်း Aာကာသထဲမှာ တိုက်မိပြန်သတဲ့။ ဒီAတိုင်းဆို ဗြဟ္မာပြည်က Aပ်တစ်စင်းနဲ့ လူ့ပြည်က
ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာပဲ ဖြစ်တာ။ Aီရီဒီယမ် ၃၃ ဆိုတာ Aမေရိကန်ဆက်သယ်ွရေး ဂြိုဟ်တုပါ။ တစ်နာရီကို မိုင် ၁၇၀၀၀ နှုန်းနဲ့ မိနစ် ၁၀၀ ကို ကမ္ဘာတစ်ပတ် ပတ်နေတဲ့ ပုဂ္ဂလိကပိုင် ဆက်သယ်ွရေးဂြိုဟ်တုပါ။ မိုဘိုင်းဖုန်းလို
Aာကာသဆက်သယ်ွရေးကိစ္စတွေ
Aာကာသလမ်းကြောင်းထဲမှာ ဂြိုဟ်တုတွေ တစ်နေ့တစ်ခြား များပြားလာတာလည်း ပြဿနာတစ်ရပ်ပဲ ခင်ဗျ။ သူနဲ့ တိုက်မိတဲ့ ဂြိုဟ်တုကေAာ်စမို ၂၂၅၂ ဆိုတဲ့ Aငြိမ်းစား ရုရှားဂြိုဟ်တု တစ်လုံးပါ။ ဒီဂြိုဟ်တုက ၁၉၉၅
ဂြိုဟ်ပတ်လမ်းထဲမှာ လေလွင့်ခြင်း ခရီးသည်လုပ်နေတဲ့ရာက တဖြည်းဖြည်း နိမ့်ဆင်းလာပြီး Aီရီဒီယမ်ရဲ့
မလွှမဲရှောင်သာတဲ့
ဘွားခနဲ တိုက်မိတာပဲ။ ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် ကမ္ဘာမြေကို ပတ်နေတဲ့ ဂြိုဟ်တုပေါင်းဟာ နိုင်ငံပေါင်းစုံက လွှင့်တင်ထားတာ ၁၂၀၀၀ ကျော် ရှိတယ်တဲ့။ Aများစုက AခုAချိန်မှာ Aလုပ်မလုပ်နိုင်ကြတော့ပါဘူး။ Aဲဒီထကဲ၆ ရာခိုင်နှုန်းလောက်သော ဂြိုဟ်တုတွေသာ Aလုပ်လုပ်နိုင်တော့တယ်တဲ့။ တခြားAချင်း တစ်မီတာထက် ကြီးတဲ့
Aဲဒါတွေက တစ်နာရီကို မိုင် ၁၇၀၀၀ နှုန်းနဲ့ လည်ပတ်နေတော့ Aာကာသထဲမှာ ယာU်Aပြင်ဘက် Aလုပ်လုပ်နေတဲ့
Aခုတိုက်မိတ့ေဲနရာက ဆိုက်ဘေးရီးယားဒေသ Aထက်ကောင်းကင် ၄၈၅ မိုင် AကွာAတွင်းမှာတဲ့။ Aဲဒီက ထွက်လာတဲ့ ယာU်Aပျက်Aစီး မြောက်မြားစွာဟာ ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းထဲမှာ နှစ်သောင်းနဲ့ချီ လှည့်လည်နေလိမ့်မယ်တဲ့။ ‘Aာကာသကို
Aကြောင်းAရာ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ Aာကာသဆိုတာ ဘယ်သူမှ ပိုင်တ့ေဲနရာဟုတ်တော့ ထိန်ချုပ်ဖို့ Aခက်သားလား ခင်ဗျာ။
သတိထားရမယ့် ကုသိုလ် နှစ်ဟောင်းကုန်လို့ သဲခဲ့သမျှကို
သက်ကြီးရွယ်Aိုတွေကို ခေါင်းလျှော်ပေးတယ်။ Aခုလို ပူပြင်းတဲ့ ရာသီမှာ ခေါင်းပဲ ကွက်လျှော်ရတဲ့ ကိစ္စဟာ ထိုက်သင့်သလောက် Aန္တရာယ် ရှိတာမို့ စေတနာက ဝေဒနာမဖြစ်ရေAာင် ဂရုစိုက်ကြဖို့ လိုပါတယ်။
ဘေးမဲ့လွှတ်တဲ့ ဓလေ့က ဖက်ရှင်တစ်ခုလို ဖြစ်နေပါတယ်။ Aသင်းလိုက် Aဖဲ့လွိုက်သော်လည်းကောင်း၊ တစ်Uီးချင်းသော်လည်းကောင်း
ငါးလွှတ်တဲ့သူတွေAနေနဲ့ Aာဖရိကငါးခူလို့ခေါ်တဲ့ သားစားငါးခူကြီးတွေကို မလွှတ်မိကြဖို့ သက်ဆိုင်ရာက တာဝန်ရှိသူတွေက နှစ်စU်န့Aဲမျှ သတိပေး နှိုးဆော်တတ်ပါတယ်။ ဖွတ်မိချောင်းဖြစ် မြစ် မချမ်းသာလို့ ဆိုရမယ်
ကြီးထွားနှုန်းမြန်တဲ့ ငါးကြီးတွေ ဖြစ်တ့Aဲပြင်
ဒေသခံငါးတွေတောင် မျိုးတုန်းကုန်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Aဲဒီငါးတွေ မွေးမြူခြင်းကို Aမိန့်ကြေညာချက် ၅/၂၀၀၁ နဲ့ ပိတ်ပင်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကုသိုလ်ယူမယ့်သူများ သိုးAုပ်ထဲ ကျားလွှတ်သလို မဖြစ်ေAာင် သတိထားကြရပါလိမ့်မယ် ခင်ဗျာ။
ရယ်စရာမဂ္ဂဇင်း၊ ဇန်နဝါရီလ၊ ၂၀၀၉ခုနှစ်။
ချစ်သူတို့ နယ်မြေသစ် မျက်နှာချင်းဆိုင် လမင်းမှာ ဆုံစို့ကယွ် ဆိုသော စကားမှာ ခေတ်မမှီတော့။ Aခုတော့ ချစ်သူချင်းလမင်းမှာ ဆုံနိုင်ဖို့ခေတ် ရောက်ပြီဟု ဆိုနိုင်သည်။ မကြာမီက ကွန်မြူနစ် မီလျံနာချယ်လ်ဆီး ဘောလုံးAသင်းပိုင်ရှင်ေAဘရာမိုဘစ်ခ်ျသည် လပေါ်မှာ မြေEက ၁၀၀ ကို ဝယ်လိုက်သည်။ စားAုန်းဆီပင် စိုက်ရန်မဟုတ်ပါ။ သူ့ချစ်သူ ဒါရှာဇူကိုဗာနှင့်Aတူ
နေဖို့ဟု ဆိုလေသည်။ ပေးလိုက်ရတဲ့ငွေက ဒေါ်လာ ၂ သိန်းခွဲ။
သူတို့ဆီတွင် ထုံးစံAတိုင်း Aများနဲ့ မတူေAာင် ထွင်ကြရာ၌ တစ်ခုAပါAဝင်ဟု ဆိုနိုင်သည့် Lunar Embassay ဆိုသော တရားမဝင် Aဖွ့Aဲစည်း ရှိသည်။ ထိုပေါကြောင်ကြောင် Aဖွ့Aဲစည်းက လပေါ်၌ သူတို့ဆောင်ရက်ွမည့် ပေါကြောင်ကြောင် စီမံကိန်းများကို ချပြကာ (Uပမာ-၂၀၂၀ မတိုင်မီ လပေါ်၌ ကွန်ပျူတာသုံးနိုင်ရန် စီစU်ပေးမည်) ဘယ်သူမှ မပိုင်သည့် လပေါ်က မြေကို ရောင်းစွံေAာင် AကြံAဖန် လုပ်သည်။
သူဌေးတွေက ဝယ်ယူကြသည်။ တစ်ခုတော့ တော်ပါသေးသည်။ လပေါ်တွင် ဝယ်ယူထားသောမြေAတွက် မြေခွန်ဆောင်ရန် မလိုပါတဲ့။
ဂလိုဘယ် ဇီးရိုးခေတ် နှစ်သစ်မှာ မင်္ဂလာရှိသော သတင်းတစ်ပုဒ်ကို ပြောချင်ပါသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်Aပြီး (ဟီရိုရှီးမားနှင့် နာဂစကီ Aဖျက်Aဆီးကို မြင်ကာ) ကျွန်တော်တို့ကို နျူကလီးယားတစ္ဆေကြီး ခြောက်လှန့်နေခဲ့သည်မှာ Aနှစ်ငါးဆယ် ရှိခြဲ့ ပီ။ Aဏုမြူလက်နက်တွေက တစ်နေ့တခြား တိုးပွားလာကာ တစ်နေ့တခြားလည်း ပို၍ပို၍ စွမ်းAားပြင်းလာကြလေရာ ကျွန်တော်တို့မှာ ပေါက်ကလွဲုလု ယမ်းပုံကြီးပေါ် ဖင်ခုထိုင်နေရသလို ရှိတော့သည်။
ပို၍ဆူပက်ွလာ၏။
လက်နက်များ ပိုင်ဆိုင်ရန် AတိAလင်း ကြိုးစားလာကြသည်။ နျူကလီးယားလက်နက်များကို ငါတို့သာ ပိုင်ရမည်။
တံခန်ွထူနေခြင်းမှာ
လူ့လောကကြီးAတွက် ကောင်းသော Aခြင်းAရာ မဟုတ်။ တကယ်လုံခြုံစိတ်ချရသော ကမ္ဘာကြီး၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဘဝ တည်ဆောက်ရန် ဆိုသည်မှာ ကမ္ဘာကြီးကို ‘နျူလက်နက် လုံးဝကင်းမဲ့သောဇုန်’ Aဖြစ် ထူထောင်နိုင်မှ ဖြစ်ပေမည်။ ယင်းAယူAဆကို Global Zero ဟု ခေါ်သည်။ ထိုAမည်နှင့် သဘောတူကြေညာချက် တစ်စောင်ကို လွန်ခ့ေဲသာ Aနှစ် ၃၀ လောက်ကပင် ကမ္ဘာတွင် သြဇာရှိသော လူများ (ဂေါ်ဘာချော့၊ ဂျင်မီကာတာ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်များ၊ တရုတ်၊ Aိန္ဒိယနှင့် ပါကစ္စတန်မှ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ) လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။ သို့သော်
Aကောင်Aထည် မဖော်နိုင်ခဲ့။ မကြာခင်ကာလကမူ ပြင်သစ်၌ နိုင်ငံရေး၊ စစ်ဘက်၊ Aရပ်ဘက်ခေါင်းဆောင် ၁၀၀ ကျော်တို့နှင့် တွေ့ဆုံကာ နျူလက်နက်များAားလုံး
ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွတဲစ်ခု
ဗလာဒီမာပူတင်၊ ဘားရက်Aိုဘားမားတို့လည်း ပါ၏။ သူတို့က ၂၀၁၀တွင် Aပြည့်Aဝ Aကောင်Aထည် ဖော်နိုင်ရန် Aဘက်ဘက်က ခေါင်းဆောင် ၂၀၀ ကျော် ပါဝင်နိုင်မည့် ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွတဲစ်ရပ် ကျင်းပရန် စီစU်နေလေရာ ယခုနှစ်UီးAတွက် မင်္ဂလာသတင်းUီးဟုပင် ခေါ်နိုင်လေတော့သည်။
Aသွားမတော် တစ်လှမ်း Aကြမ်းဖက်သမားတွေ
ပိုမိုတိုးမြှင့်လာကြရသည်။ ထိုAထဲတွင် Aီးယူခေါ်
Aသည်းယားစရာ AစီAစU်တစ်ခုကို တင်ပြလာပါသည်။ Uရောပနိုင်ငံAသီးသီးရှိ
လူတစ်ကိုယ်လုံးကို ကိုယ်လုံးတီးဗလာAဖြစ် မြင်တွေ့နိုင်သော Strip Scanner များ တပ်ဆင်ရန် ဖြစ်သည်။ ထိုစက်ထတွဲင်
တစ်Uီးကဲ့သို့ ဖြစ်တော့မည်။ တော်ပါသေးသည်။ ထိုပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးများ Aစည်းAဝေးတွင် ထိုကိစ္စကို ဂျာမန်
ကန့်ကက်ွသည်။
ချောင်းကြည့်တတ်သူတွေAဖြစ် Aထင်မခံနိုင်ဘူးဟု ဆိုသည်။ ဒါဟာ ညစ်ညမ်းမှုတစ်ခုဟု ယူဆသည်။ ဂျာမန် လက်ဝပဲါတီကလည်း ‘ဒီAတိုင်းဆိုရင် လေဆိပ်တွေဟာ နေပူဆာAသင်းတွေရဲ့ Aပန်းဖြေရာ ပင်လယ်ကမ်းခြေနဲ့ တူသွားမှာပေါ့’ ဟု ဆိုလေသည်။ ထိုAသင်းများမှာ ကိုယ်လုံးတီး နေပူဆာလှုံကြ၏။ သို့သော်
ဂရုစိုက်ကြပါကုန်။ Aင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ နေထိုင်သူ Aများစုဟာ Aစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ AလေးAနက် ထားတဲ့
ဘာသာရေးAမြင်Aရ မတင့်တယ်တဲ့ ရှက်ဖယ်ွကိစ္စပေါ့။ Aဲဒီပြဿနာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Aင်ဒိုနီးရှား ခရီးသွားလုပ်ငန်းရဲ့ ဝင်ငွေဟာ လျော့ကျလာဖွယ်ရှိတဲ့Aတွက် နောက်ဆုံးတော့ လာမည့်နှစ်ကို
ဘီကီနီကိစ္စဟာ လွှတ်တော်တင် နိုင်ငံခြားခရီးသည်
ဆွေးနွေးရတဲ့ဘ၀ ရောက်ရပါတော့တယ်။ သူတို့
Aင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ Aခြားသော ပင်လယ်ကမ်းခြေများ မပါဘဲ ဘာလီကျွန်းတွင်သာ Aမျိုးသမီးများ ဘီကီနီ ဝတ်ဆင်ခွင့်ပြုတဲ့ Uပဒေကို Aတည်ပြုပြဌာန်းနိုင်ခ့ပဲါတယ်။ (ဒီAထဲမှာ မွတ်စလင် Aမျိုးသမီးတွေ ပါ၊ မပါတော့ သဲသကဲကွဲ မသိပါဘူး) Aခုထက်တိုင် Aဲဒီဗိုက်နဲ့ ကျော လွတ်လပ်ခွင့်ကို ဘာသာရေး Aစွန်းရောက်တွေက ကန့်ကက်ွနေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်ခင်ဗျား။
ရယ်စရာမဂ္ဂဇင်း၊ Eပြီလ၊ ၂၀၀၉ခုနှစ်။
လူမိုက်နောက်မှ Aကြံရ Aမေရိကန်သမ္မတ ရွေးကောက်ပြွဲ ကီးတော့ ပြီးသွားပြန်ပါပြီ။ Aများသိကြတဲ့Aတိုင်း Aိုဘားမားဆိုတဲ့ လူမည်းကလေးကပဲ Aနိုင်ရသွားပါတယ်။ တကယ်တော့ Aမေရိကန်သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာလည်း သိပ်တော့
ရီပတ်ဘလစ်ကင် ဆိုတဲ့ ပါတီကြီးတွေက မူဝါဒချင်း သိပ်မကြွဲ ပားလေတော့ (ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ် လျှောက်နေတာက
ရီပတ်ဘလစ်ကင်သမ္မတ တစ်လှည့် တက်လိုက်၊ ဒီမိုကရက်တစ်က သမ္မတ တစ်လှည့် တက်လိုက်နဲ့ စခန်းသွားနေကြတာပဲ။ ဒီပမွှဲာတော့ Aိုဘားမား နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် ကြိုတွေးမိပါတယ် ခင်ဗျ။ နိုင်ငံရေးAမြင်နဲ့ Aကဲခတ်တဲ့ နေရာမှာတော်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့နိုင်ငံမှာ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲ လုပ်တယ်ဆိုတာ တိုင်းပြည်က ခိုင်းလို့ ကောင်းမယ့်လူ ရွေးတာပဲ။ (Aမေရိကန်သမ္မတဆိုတာ ကမ္ဘာမှာ Aလုပ်Aများဆုံး
နွားAိုဝယ်မလား၊ နွားပျိုဝယ်မလား။ ဒီAချက်နဲ့ တွက်ကြည့်ရင် Aသက် ၇၀ ကျော် ဂျွန်မက်ကိန်းလို Aဘိုးကြီးကိုကျော်ပြီး Aိုဘားမား Aရွေးခံရတာ ဘာမှ မဆန်းလှပါဘူး။ နောက်တစ်ချက်က Aမေရိကန်ပြည်သူတွေက Aသစ်Aဆန်းကို ကြိုက်နှစ်သက်တယ်။ သူတို့နိုင်ငံမှာ ပထမဆုံး လူမည်းသမ္မတကို ရွေးချယ် တင်မြောက်လိုက်တယ် ဆိုတာကိုလည်း ဂုဏ်ယူလိုဟန် တူတယ်။ AသားAရောင် ခြွဲ ခားတဲ့ ဓလေ့ကြီးက Aမေရိကန်ပြည်ထောင်စု စတင်တည်ထောင်စU်ကတည်းက Aမြစ်တယ်ွခ့တဲ့ ဓလေ့ကြီးကိုး။ လင်ကနွ်းဟာ ပြည်တွင်းစစ်ဆင်နြွှဲ ပီးတောင် ဒီဓလေ့ကို တွန်းလှန်ခဲ့ရတယ် မဟုတ်လား။ ဟော... လူမိုက်နောက်မှ Aကြံရတာက ရီပတ်ဘလစ်ကင်တွေ ခင်ဗျ။ သူတို့ကလည်း လူမည်းတစ်Uီးဖြစ်တဲ့ မေရီလင်းပြည်နယ် ဒုUက္ကဌဟောင်း မိုက်ကယ်စတီးလီကို ရီပတ်ဘလစ်ကင်ပါတီ Aမျိုးသားကော်မတီ
တကယ်လို့ ရီပတ်ဘလစ်ကင် ပါတီသမ္မတလောင်းဟာ ဟယ်လာရီ ဖြစ်ခြဲ့ ပီး သူမက သမ္မတဖြစ်ခဲ့ရင် ရီပတ်ဘလစ်ကင်ပါတီဟာ
ခန့်Aပ်လေမလားဆိုတာ စU်းစားစရာ ဖြစ်ရကြောင်းပါခင်ဗျာ။
သူတို့ဆီက ဖူးစာရှင်ရွေးပွဲ တရုတ်နိုင်ငံဆိုတာ Aရင်က ဆင်းရဲမွဲတေမှုနဲ့ ပတ်သက်လာရင် စံချိန်တင်ရမယ့် နိုင်ငံဖြစ်ခပ့ဲါတယ်။ ဒီတုန်းက လူUီးရေ သန်း ၈၀၀ ကျော်ဟာ ဆန်ပြုတ်တောင် မှန်မှန်မသောက်နိုငခ့်ြဲ ကပါဘူး။ လူပုလေး တိန်ရှောက်ဖိန်နောက်ပိုင်း ဈေးကွက်စီးပွားရေးကို ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ တရုတ်နငိုငံဟာ တစ်မုဟုတ်ချင်း စီးပွားရေး တိုးတက်လာခဲ့တာလည်း
စီးပွားရေး Aင်Aားကြီးနိုင်ငံ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ Aခု တစ်ကမ္ဘာလုံး စီးပွားပျက်ကပ် ဆိုက်တဲ့Aခါ သူလည်း Aထိုက်Aလျောက် ထိခိုက်မှု ရှိပါတယ်။ သူက Aမေရိကန်ဒေါ်လာကို Aများဆုံး ကိုင်ထားတဲ့ နိုင်ငံကြီး ဖြစ်နေတာကိုး။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံကြီးက
ကျင်းပခဲ့တ့ေဲနရာက ရှန်ဟိုင်းမြို့။ ဒီရှန်ဟိုင်းဆိုတဲ့ မြို့က ရာဇဝင်န့ပဲါ။ တရုတ်ကန်ွမြူနစ်ပါတီ စတင် တည်ထောင်ခ့တဲ့ေဲနရာ။ ပြီးတော့ ပထမဆုံး စီးပွားရေး စမ်းသပ်ဇုံAဖြစ်နဲ့ ဈေးကွက်စီးပွားရေး စတင် ကျင့်သုံးခဲ့ရာနေရာ
ရုပ်ရှင်မင်းသမီးမေရီမြင့်ဟာ ရှန်ဟိုင်းမယ်ဘ့ရွဲ ခဲ့သူ တစ်ယောက်တဲ့) ချိုင်းနားဒေလီ
ရွေးချယ်ပပွဲါတီကို
ဝင်ကြေးဟာ ဒေါ်လာ ၈၀၀၀ (ရှစ်ထောင်)တဲ့။ ဒီတော့ တော်ရုံတန်ရုံ လူပျိုဆို Aနားကပ်နိုင်မယ့်ပုံ မပေါ်ဘူး။
ထည့်တက်ွရင်
ဘာဘာညာညာ Aဲဒီပကွဲို
ဖြစ်ပုံရတဲ့ တရုတ်ပလေးဘွိုင် ၂၀ လောက် တက်ရောက်ခ့တဲယ်။ ရွေးချယ်ထားတဲ့ မိန်းကလေးတွေက တကယ့် AချောAလှလေးတွေပတဲ့။ ပွဲတော်လာတဲ့သူတွေကတော့ သူတို့ရဲ့ ပုံမှန်ရုပ်ကို မမြင်ရေAာင် မျက်နှာဖုံးတွေ တပ်ဆင်ထားကြတယ်တဲ့။ တချို့ကတော့ စက္ကူAိတ်တွေတောင် Aသုံးပြုခဲ့ကြသေးတယ် တဲ့။ ဘယ်သူတွေ
တေမိမင်းကို Aရွဲ့တိုက်သူများ ဇာတ်ကြီးဆယ်ဘ့ဆွဲိုတာ
Aဲဒီထမှဲာ
ထူးခြားပါတယ်။ စကားပြောတာရဲ့ Aပြစ်ကို မြင်တွေးပြီး မွေးကတည်းက စကားမပြောဘဲ နေလာတဲ့ Aလောင်းတော်ဟာ
စကားကျွံလျှင် နှုတ်မရ’ ‘ဆိတ်ဆိတ်နေက ထောင်တန်၏’ စသဖြင့် စကားပြောခြင်းရဲ့ Aပြစ်တွေကို ဖော်ပြထားတဲ့ ဆုံးမစကားတွေကလည်း Aများကြီးပါပဲ။ သို့သော်လည်း Aလောင်းတော်လို ပါရမီမရင့်သန်တဲ့ ကျန်ွတော်တို့ခမျာ လူကလည်း ဖြစ်နေပြန်တော့ ဆိုရေးရှိက ဆိုAပ်လှ ဆိုသလို
ပြောရဆိုရ ပြန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မပြောမပြီး တီးမမမြည်နေတာ
Aကောင်းပဲဆိုတဲ့ Aသိတော့ ရှိပါရဲ့။ Aခုဟာက Aလောင်းတော်တေမိမင်းကို Aရွဲ့တိုက်သလို မာရသွန် စကားပြောသူတွေ ပေါ်နေတာပဲ။ မကြာခင်က ပြင်သစ်လူမျိုး လွိုက်စ်ကိုလက်ဆိုတဲ့သူဟာ မရပ်မနား နာရီပေါင်း ၁၂၄ နာရီကြာေAာင် စကားတွေ တရစပ် ပြောနေခဲ့တယ်။ ရူးနေတဲ့သူတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဂင်းနစ်မှတ်တမ်းဝင်ေAာင်
ကြိုးစားခဲ့တာပါတဲ့။ Aသက် ၆၂ နှစ်ရှိတဲ့ ဒီလူဟာ သူနေထိုင်ရာ Perpignan မြို့လေးမှာ ၅ ရက်နဲ့ ၄ ညတိုင်တိုင် မရပ်မနား စကားပြောပြခဲ့တယ်။ သူပြောတာတွေကတော့
Aကြောင်းAရာ Aစုံပါပဲ။ သူ့Aရင်စံချိန်တင်ထားသူက Aိန္ဒိယလူမျိုးတစ်ယောက်တ့။ဲ သူက နာရီပေါင်း ၅၀ ကြာေAာင် စကားပြောခဲ့တယ်။ ကဲ. .. သူတို့စံချိန်ကို ချိုးနိုင်မယ့်လူများ မြန်မာပြည်မှာ ရှိသလား။
ရယ်စရာမဂ္ဂဇင်း၊ မေလ၊ ၂၀၀၉ခုနှစ်။
ကွေး သုံးကွေး ပေါင်းမိခြင်း Aခုတလော ကံမကောင်း Aကြောင်းမလှ ဖြစ်ရတဲ့သူတွေက ဝူခုန်းသူငယ်ချင်း ပါကျဲတို့ Aမျိုးတွေပါပဲ။ ဘယ်Aချိန်ကတည်းက မျက်မုန်းကျိုးနေတယ် ဝက်Aကောင်ရေ
ရောက်နေပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့နဲ့ Aိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ ထိုင်းကိုတောင်
ရောက်နေပြီဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်း Aလေးထား ဂရုပြုရမယ့် AခြေAနေ ရောက်နေပါပြီ။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးAဖွဲ့ (WHO)က တပ်လှန့်မှုက Aဆင့် ၅ တောင် ရောက်နေပြီ။ တစ်နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ ကူးစက်နေပြီဆိုတဲ့ သဘောပေါ့။ Aမြင့်ဆုံးAဆင့်က Aဆင့် ၆ ပါ။ Aဆင့် ၆ဆိုတာက ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကပ်ရောဂါလို့ သတ်မှတ်လိုက်တာပါပဲ။ သေဆုံးသူ ရာဂဏန်း ကူးစက်ခံရသူ ထောင်ဂဏန်းသာ ဖြစ်လို့ စိုးရိမ်ဖယ်ွမရှိဘူးလို့တော့ ငှက်တုပ်ကွေး၊ ဆိုပါတယ်။
ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာA ဖြွဲ့ ကီးကတော့
မသိသေးတဲ့A တွက် ဝက်တုပ်ကွေးလို့
ကမ္ဘာ့တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးA ဖွ့တဲ့။ဲ
AဲဒီA ဖွ့ကဲတော့
ကန့်ကက်ွပါတယ်။ ဝက်တွေကြားထဲက
A ချောင်နာမည်ပျက်ရတာ မရှုစိမ့်ဘူး ထင်ပါရဲ့ ခင်ဗျာ။ မက္ကစီကိုက စဖြစ်တာမို့ မက္ကစီကိုတုပ်ကွေးလို့ ခေါ်သင့်တယ်လို့ A ကြံပေးပါတယ်။ မက္ကစီကို နိုင်ငံသားတွေ နာမည်ပျက်ရင် ပျက်ပါစေဆိုတဲ့ သဘောလား မသိပါဘူး။ A ခုတော့ ဒီကိစ္စဟာ လုံးလည်လိုက်နေဆဲ ရှိပါတယ်။ A မေရိကန်က သူ့လူတွေ မက္ကစီကို မသွားဖို့ တားတယ်။ Uရောပသမဂ္ဂ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးကလည်း Uရောပသားတွေ A မေရိကန်မသွားဖို့ တားတယ်။ မက္ကစီကိုမှာတော့
ဖြစ်နိုင်တ့ေဲနရာဖြစ်တဲ့
ရုပ်ရှင်ရုံတွေကို ပိတ်ပင်ထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခက်တာက ဒီရောဂါကူးစက်မှု A ဖြစ်ဆုံး နေရာတွေက ဆေးရုံ ဆေးခန်းတွေတဲ့။ ဒါကြောင့် လူထုကို မလိုA ပ်ဘဲ ဆေးရုံ ဆေးခန်းမသွားဖို့ လှုံ့ဆော်ပညာပေးနေရတယ်။ မက္ကစီကိုမှာ ခေတ်စားတဲ့ ပါးချင်းA ပ် နှုတ်ဆက်တာ၊ ပွေ့ဖက်နှုတ်ဆက်တာတွေကိုလည်း ရှောင်ကြU်ကြဖို့ ဆော်သြနေရတယ်။
ခွစဲိတ်ခန်းသုံး
လှပနေတာ မြင်ရပါတယ်။ တစ်ခုခက်တာက နာလန်ထဖို့ A ရှိန်ယူနေတဲ့ ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ်ကို ဒီရောဂါက A ရှိုက်ထိုးလိုက်သလို A ထိနာစေတာပါပဲ။
A စားA စာနဲ့
ထိခိုက်ကုန်ပါတယ်။ တရုတ်က A မေရိကန်နဲ့ မက္ကစီကိုက ဝက်သားတင်ပို့မှုကို ပိတ်ပင်ထားပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ဒီရောဂါ ဖြစ်ပွားတဲ့ သတင်းကို မကြားရသေးပေမယ့် သက်ဆိုင်ရာက လိုAပ်တဲ့ သတိပေးမှုနဲ့
တစ်ဆက်တည်းပဲ ဒဏ်န့Aဲတူ
ခေတ်ပေါ် ယU်ကျေးမှုတစ်ခုလို ဖြစ်နေတဲ့ လမ်းဘေးက ဝက်သားတုပ်ထိုးဆိုင်ကလေးတွေ Aတွက်တော့ ဝမ်းနည်းစရာပဲပေါ့ ခင်ဗျာ။ ကဲ. .. ကျွန်တော်တို့ ဝက်သားစားတာ ခဏရှောင်ကြစို့။
မိုးကို မျှော်သည် Aမှန်Aတိုင်း ပြောရလျှင် Eပြီလကတည်းက ပူတယ်လေ ဆယ်နေကဲဟု ဆိုရလောက်ေAာင် နံပြားဖိုထဲ ရောက်နေသည့်Aလား Aခံရခက်သူများက နွေAမြန်ကုန်စေချင်ကြကာ မိုးကို မျှော်ကြသည်။ ဖားသား စားချင်လို့ မျှော်သူလည်းပါသည်။ မိုးတွင်းဆို မြန်မာ့Aသံက Aမြဲဖွင့်တတ်သည့် ကိုမြကြီး၏ ‘မိုး’ သီချင်းကို နားထောင်ချင်လို့ မျှော်သူလည်းပါမည်။ တီဗကွီ Aဆက်မပြတ်
မိုးကာဂျာကင် လှလှတွေကို ရှိုးတပြပြဝတ်ချင်ကြ၍ မိုးမျှော်သူလည်းပါမည်။ ကျွန်တော်မျှော်တာကတော့ တစ်မျိုးခင်ဗျ။
သုံးစွနဲိုင်တော့မည့်Aရေး
မျှော်နေရခြင်းပါ။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက Aဓိက ရေAားလျှပ်စစ်ကို AဓိကAားပြုနေသော နိုင်ငံ။ မိုးရောက်လျှင် ဆည်တွေ ရေကာတာတွေ ရေပြည့်ရေလျှံပြီ။ ဒါဆို နွေထက် လျှပ်စစ်မီး ပိုထုတ်နိုင်ပြီ။ ဒါက နှစ်စU် ကြုံနေကျ သဘာဝပင်။ နွေပေါက်လို့ ဆည်တွေထမှဲာ ရေတွေ နည်းရင်တော့ ထုံးစံAတိုင်း Aလှည့်ကျစနစ်ပေါ့။ ပျက်တဲ့Aခါလည်း
မီးပျက်သွားတယ်တဲ့။ မနှစ်က ဇွန် ၁၃ ကပါ။ ၁၃ ကပဲ ကံမကောင်းတာလား။ ရုတ်တရက် မီးပြတ်တဲ့ဒဏ်ကို လျှပ်စစ်မီး သုံးစွဲသူပေါင်း ၇၀၀၀ ခန့် ထိခိုက်ခ့တဲယ်လို့ ပက်ကိုကုမ္ပဏီ(မြို့တော် လျှပ်စစ်ဝန်ဆောင်မှု ထောက်ပံ့ရေး)က ပါတယ်တဲ့။
ဆိုခွင့်ရသူက ပြောပါတယ်။ လျှပ်စစ်ဓါတ်Aားစက်ရုံ Aလုပ်မလုပ်လို့ ပျက်ခတ့ဲာပါ။ ဒီမတော်တဆမှုဟာ Aကြမ်းဖက်သမားတွေနဲ့
ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ငယ်စU်က လျှပ်စစ်ဌာနက ကြော်ငြာစာသားကလေးကို တစ်ခါတစ်လေ သတိရမိတယ်။ လျှပ်စစ်ကို တလက်လက်လင်းပေးတာ။
မှန်မှန်ပေးသင့်တာပေါ့။ ဟုတ်ပါရဲ့။ မီတာခ မှန်မှန်မပေးလို့
သုံးစွဲခ့တဲ့
Aရင်ကတော့ ဘုရင်မို့ မတောင်းလေသလား စU်းစားစရာပေါ့ဗျာ။ ဘုရင်လူထကွ် မစ္စတာ Gyanendra ဟာ Aခု သူAရင်က Aမဲလိုက်ရင် သုံးခဲ့တဲ့ စခန်းချAိမ်ဟောင်းမှာ စံမြန်းနေပါတယ်။ သူသာ မီတာခ မပေးနိုင်ရင် AဲဒီAိမ်ဟာ မီးဖြတ်ခံရမယ်လို့ နို့တစ်ပေးထားတယ်တဲ့။ Aင်း... ဒါလည်း တရားရစရာ တစ်ခုလို့ မဆိုနိုင်ဘူးလားခင်ဗျာ။
ကူညီပါရစေ ဆိုသော်လည်း ရယ်သောသူသည် Aသက်ရှည်၏ဆိုတဲ့ စကားကို ဖိလစ်ပိုင်ရဲချုပ်က ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ပုံ ရပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်ရဲတွေ လူထုရှေ့မှာ ပြုံးရယ်နေရမယ်လို့ Aမိန့်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ မချိသွားဖြဲကလေး ဖြစ်ဖြစ်၊ ငါးသလောက် ပြုံးလေးပဲဖြစ်ဖြစ် ပြုံးမနေရင် ဒါဟာ ရိုင်းစိုင်းကြမ်းကြုတ်တဲ့ AမူAရာ လုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်ဆိုပြီး
ကျန်ွတော်တို့
Aင်မတန်နာမည်ကြီးတဲ့ တစ်သက်လုံးမှာမှ သုံးကြိမ်ပဲ ပြုံးတယ်ဆိုတဲ့ သီလဝမင်းသားကြီးသာ Aဲဒီနိုင်ငံမှာ ရဲလုပ်ရင် မြန်မြန်Aလုပ်ပြုတ်မယ့် ကိန်းပေါ့။ ‘ကူညီပါရစေ’ ဆိုတာ ကျန်ွတော်တို့ဆီမှာ Aင်မတန်
ရေပန်းစားတဲ့ စကားလုံးလေးပါ။ မြန်မာနိုင်ငံ
ရဲတပ်ဖ့ရွဲ့ ဆောင်ပုဒ်ပါ။ ၁၉၉ ကိုသာ ဖုန်းလှည့်လိုက်။ Aမေရိကန်မှာလည်း AကူAညီလိုချင်ရင် ၉၁၁ ကိုပဲ ဖုန်းဆက်ရတာပဲ။ သို့သော်လည်း Aဆက်မတော်တစ်ခနွ်းဆိုသလို ၉၁၁ ကို
Aဖမ်းခံရတဲ့ လူလည်းရှိတယ်။ Aမေရိကားက ကားလို့စ်ဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ ပိုက်ဆံထည့်ပြီး ဈေးဝယ်တဲ့
လိုချင်တ့ပဲစ္စည်း
သူ့ပိုက်ဆံခိုးပါတယ်ဆို ၉၁၁ကို ဖုန်းဆက်လို့ Aနှောင့်Aယှက်ပေးမှုနဲ့ Aဖမ်းခံရတယ်တ့။ဲ ဖလော်ရီဒါက ငနဲတစ်ယောက်က သူ Aသားညှပ်ပေါင်မုန့် စားရာမှာ သုံးတဲ့ AချU်ရည်ဘူး မြေေAာက်ရထားပေါ်မှာ မေ့ကျန်ခ့တဲာ
တော်ရုံကိစ္စပဲ AကူAညီတောင်းဖို့ ကောင်းတာပေါ့ ခင်ဗျာ။
ရယ်စရာမဂ္ဂဇင်း၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၀၉ခုနှစ်။
စင်ဒရဲလားက စခဲ့တဲ့ ဖိနပ် ကမ္ဘာမှာ လူသိAများဆုံး ဖိနပ်ဟာ စင်ဒရဲလားရဲ့ ဖန်ဖိနပ်ကလေးလို့ ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကလေးဘဝကတည်းက ဒီပုံပြင်ကလေးနဲ့ ရင်းနှီးခဲ့ကြတယ်။ မင်းသားက သူ့Aတွက် သတို့သမီးလောင်း ရွေးချယ်ရာမှာ ဒီကျန်ခ့တဲ့ ဖိနပ်လေးတစ်ဖက်န့ေဲတာ် မတော် ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်တာကလည်း တကယ့်ကို စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ Aထက်တန်းကျောင်းသားဘဝမှာ ဆိုဗီယက်ဝန်ကြီးချုပ် ကရူးရှက်က ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာ သူ့ရှူးဖိနပ်ကို ချွတ်ပြီး စားပွကဲိုခေါက် စကားပြောတယ်ဆိုတာ ကြားရတော့ လူငယ်ပီပီ သဘောကျခဲ့တာပါပဲ။ (Aမှန်တော့ နိုင်ငံတကာAဆင့် ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက် Aနေနဲ့ဆို
တွင်ကျယ်ခ့ပဲါသေးတယ်)
စံAိမ်တော်မှာ ကျန်ခ့တဲ့ ဖိနပ်Aရန်ပေါင်း ၂၇၀၀ ကျော်ကျော်ကို ကြည်ြ့ ပီး ကမ္ဘာ့ပြည်သူတွေန့Aဲတူ Aံ့သြခဲ့ရပါတယ်။ Aခုနောက်ဆုံး Aဲဒီသူတွေကို ကျော်ပြီး ဖိနပ်နဲ့ ကျော်ကြားသွားတဲ့သူကတော့ Aီရတ်သတင်းထောက် Aယ်လ်ဇေဒီ ဖြစ်ပါတယ်။ သူက Aများသိတဲ့Aတိုင်း သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွတဲစ်ခုမှာ Aမေရိကန်သမ္မတ ဂျော့ဘုရ်ှကို ဖိနပ်နဲ့ ပေါက်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ (သူဟာ ဒီလို ဖိနပ်န့ေဲပါက်နိုင်ဖို့Aတွက် ၂ နှစ်လောက် လေ့ကျင့်ခ့တဲယ်လို့တောင်
ဂျက်ဆီဂျိမ်းတို့ Aရပ်က လာတာဆိုတော့ လွတ်ေAာင် ထုတ်လိုက်သေးတယ်။
ရှောင်နိုင်ပါတယ်။ သူက ပြက်လုံးတောင်
တော်တော်ကြီးတယ်။ နံပါတ် ၁၀ ဖြစ်ရမယ်”တဲ့။ Aဲဒီကိစ္စဟာ ကမ္ဘာမှာ ဟိုးလေးတကျော် ဖြစ်သလို Aယ်လ်ဇေဒီ (Aသက် ၃၀) ဟာလည်း Aာရပ် မွတ်စလင်ကမ္ဘာမှာ
ရှာဖွေခ့လဲို့ပဲ
ဖြစ်လို့သွားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့
တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ပါတယ်။ တဖွဖွဲ
သန်းကျော်ပေးပြီး ဖြစ်သွားရပါပြီ။
ဒီဖိနပ်ထမှဲာ
ထုတ်တဲ့ Aဲဒီဖိနပ်ဟာ ဘုရ်ှဘတွ်(ဖိနပ်)လို့တောင် နာမည်တွင်သွားပါတယ်တဲ့။ ဒါပေမဲ့ Aယ်လ်ဇေဒီ လောလောလတ်လတ်
ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ် ကျခံစေဆိုတဲ့ စီရင်ချက်သာ ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ ဒါပေမဲ့ ခံသာတာတစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်။ Aဲဒီဘုရ်ှကို
ပစ်ပေါက်ခ့တဲ့
ကလေးများUယျာU်ထမှဲာ
ပန်းပုဟာ ၃မီတာ Aမြင့်ရှိပြီး ရွှေရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ တီကရစ်ဆိုတာ
ဆက်ဒမ်ဟူစိန်ရဲ့ ဇာတိမြို့ပါ။ ၂၀၀၃ ခုနှစ် Aမေရိကန် ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်စU်ကစပြီး သေဆုံးသွားတဲ့
သူတွေရဲ့ (မိဘမဲ့) ကလေးတွေ ဖောင်ဒေးရှင်းဖြွဲ့ ပီး စောင့်ရှောက်နေတဲ့ နေရာ ဖြစ်ပါတယ်။ Aခုတော့ Aဲဒီပန်းပုကို ဖယ်ရှားပေးဖို့ တောင်းဆိုတဲ့သူက တောင်းဆိုနေပြန်ပြီတဲ့။
Aသည်းကြားက မဲတစ်ပြား ဤရာသီကို
Aတော်များများမှာ (Aိန္ဒိယ၊ Aင်ဒိုနီးရှား AပါAဝင်) ရွေးကောက်ပွဲတွေ Aပြိုင်Aဆိုင် ကျင်းပခဲ့ကြသလို မကြာခင်မှာ
သူကလည်း ခေသူ မဟုတ်ပါ။ Aီးယူဆိုတဲ့ Uရောပသမဂ္ဂမှာ ဘတ်ဂျက်ဌာန AကြီးAကဲပါတဲ့။ ဒါပေမဲ့ လစ်သူနီးယားနိုင်ငံဟာ Uရောပမှာ စီးပွားရေးကျဆင်းမှုAရ Aမြင့်ဆုံးနိုင်ငံ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့်များ (ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ် ဆိုက်ချိန်ပေါ့) ပနားမားပြည်သူတွေဟာ သမ္မတရွေးကောက်ပမွှဲာ ရီကာဒိုမာတီနယ်လီကို ရွေးလိုက်သလားလို့ တွေးတောစရာ ဖြစ်ရပါတယ်။ ရီကာဒိုက နိုင်ငံရေးသမား မဟုတ်ပါဘူး။
လက်ဝယဲိမ်း
ကြီးစိုးလေ့ရှိတဲ့ ပနားမားနိုင်ငံAတွက်လည်း ဒီကိစ္စဟာ တကယ့်Aပြောင်းAလဲပါပဲ။ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ဘဏ္ဍာရေးAကျပ်Aတည်းကို
ယုံကြည်ကြဟန်တူပါတယ်။ ဖြစ်နေတာကတော့ Aခုခေတ် မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူတွေရဲ့ မဲပေးပုံက Aကဲခတ်ရ ခက်နေတာပါပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Aင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ရွေးကောက်ပမွှဲာ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေ သုံးယောက်နဲ့
Celebrity လို့ ခေါ်ကြတဲ့
နိုင်ငံရေးAတွေ့Aကြုံထက် လူသိများတာ၊ ကျော်ကြားတာကို Aခြေခံရွေးချယ်ရင်း Aင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးAနာဂတ်ဟာ
ကြပါတယ်။ Aဲဒီလို ရွေးချယ်ခံရတဲ့ Aထဲမှာ ရမ္မက်နိုးကြားစေတဲ့ Aဝတ်Aစားတွေ Aမြဲဝတ်တတ်တဲ့ နာမည်ကြီးမော်ဒယ်လ် ‘ဝေနာမဲလင်ဒါ’ လည်း ပါ ပါတယ်။ သူကတော့ ပါလီမန်Aမတ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက် Aဝတ်Aစား AနေAထိုင် ဆင်ခြင်ပါ့မယ်လို့ ကတိပေးပါတယ်။ Aဲသလို ပုဂ္ဂိုလ်တွေက လွှတ်တော်ထမှဲာ ဘယ်လို Uပဒေတွေ ပြုကြမလဲဆိုတာ စU်းစားစရာပေါ့ခင်ဗျာ။ မကြာသေးခင်ကပဲ
Uပဒေတွေက လူရယ်စရာ ဖြစ်နေလို့ Aတိုက်Aခံတွေက ကန့်ကက်ွသံတွေ ကြားရပါသေးတယ်။ Uပမာမကြာသေးခင်က ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ Uပဒေက ‘ကြက်Uများကို Aနှောင့်Aယှက်ပေးခြင်းမှ တားမြစ်သော Uပဒေ’ တဲ့။ တနင်္ဂနွေနေ့ဆို ဗြိတိန်မှာ ကြက်Uဖောက်တမ်း ကစားကြတယ်။ AဲဒီAတွက် ရည်ရယ်ွပြီး ကြက်Uရောင်းတာကို တားမြစ်ထားတာပဲ။ ဝေဖန်ခဲ့သူတွေက ဒီလိုUပဒေတွေဟာ ဘာမှAကျိုးမရှိတဲ့Aပြင် ရာဇဝတ်မှုAသစ်လို့
မှတ်ချက်ချကြပါတယ်။ ၁၉၉၇ လေဘာပါတီ Aာဏာရပြီးကတည်းက ရာဇဝတ် ပြစ်မှုAသစ်ပေါင်း ၃၆၀၀ လောက် ဖန်တီးခဲ့ပြီးပြီလို့ ဆိုပါတယ်။ ကြောက်ခမန်းလိလိပါပဲ။ လွှတ်တော်Aမတ်တွေဟာ Aလုပ်မရှိတာနဲ့ ပျင်းပျင်းနဲ့ ကြောင်ရေချိုး လုပ်နေကြပုံ ရပါတယ်။
ထိုက်သင့်ေAာင် ကိုယ့်မြဲ ပားကို Aသုံးချတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ နိုဝင်ဘာ ၄ ရက်နေ့က Aမေရိကန်သမ္မတ ရွေးကောက်ပကျွဲင်းပတဲ့Aခါ တစ်နိုင်ငံလုံးသာမကဘူး၊ ကမ္ဘာကနေ ကီလိုမီတာ ၃၅၀ ဝေးပြီး တစ်နာရီကို ကီလိုမီတာ
၂၈၀၀၀ နှုန်းနဲ့ လည်ပတ်နေတဲ့
ကိုယ့်Aခွင့်Aရေးကို လက်လွှတ်မခံတဲ့ သဘောပဲ။ ရွေးကောက်ပကွဲာလဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ရင်ထမှဲာ တကယ်ရှိနေတဲ့ ဆန္ဒကို တကယ်ထုတ်ဖော်ပြခွင့်ကာလ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်ွတော်ဟာ ကျွန်တော့်နိုင်ငံ ပါလီမန် ရွေးကောက်ပကွဲာလကို ကောင်းကောင်းမီလိုက်တဲ့ သူတစ်Uီးပါ။ ‘Aသည်းကြားက မဲတစ်ပြား’ ဆိုတဲ့ စကားဟာ Aင်မတန် ခေတ်စားနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Aဲဒီတုန်းက ပြိုင်ကြတဲ့ ပါတီကြီးနှစ်ခုဟာ Aပြိုင်Aဆိုင် မဲဆယ်ွကြတဲ့Aခါ ထဘီဝါတွေ၊ ထဘီနီတွေ လက်ဆောင်ပေးတယ်။ မဲရုံရှိရာကို
ဒေါ့ဂျစ်ကားနဲ့ AကြိုAပို့လုပ်တယ်။ မဲတစ်ပြားကို
ဝယ်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် ခေါက်ဆွဲကြော်တစ်ထုပ် ပေးတာ ကြုံခဲ့ရဖူးပါတယ်။ ထိုင်းရွေးကောက်ပတွဲုန်းကတော့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ဒီလို ကားနဲ့ Aခမဲ့ AကြိုAပို့လုပ်ခြင်းဟာ ရွေးကောက်ပွဲUပဒေကို ချိုးဖောက်ရာကျတယ်။ Uပဒေချိုးဖောက်မှုနဲ့ Aရေးယူခံရမယ်လို့ ကြေညာတာ ကြားလိုက်ရပါတယ်။
ကျင်းပကြပါလိမ့်မယ်။ Aထက်က Uပမာတွေကို သင်ခန်းစာယူပြီး လွတ်လတ်ွလပ်လပ်
Aသည်းကြားက မဲတစ်ပြားကို Aသုံးချနိုင်ရင်တော့ Aကောင်းဆုံးနေမှာပေါ့ ခင်ဗျာ။
ရယ်စရာမဂ္ဂဇင်း၊ သြဂုတ် လ၊ ၂၀၀၉ခုနှစ်။
သူရဲကောင်း သုံးယောက် ယခုလောလောဆယ် ကမ္ဘာမှာ လူသိများပြီး စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ Aရာသုံးခုကတော့ Aီရန်သမ္မတရယ်၊ ဝက်တုပ်ကွေးရယ်၊ မြောက်ကိုရီးယား ဒုံးကျည်ရယ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာကြီး Aလက်ဇန္ဒားဒူးမားသာ Aသက်ထက်ရှားရှိသေးရင် ခေတ်သစ်သူရဲကောင်းသုံးယောက် ဝတ္ထုများ ရေးဖြစ်မလား မသိဘူး။ ကမ္ဘာက့ျန်းမာရေးAဖြွဲ့ ကီးက A/H1N1 (ဝက်တုပ်ကွေး) ကို A ဆင့်ခြောက် နိုင်ငံတကာ ကပ်ရောဂါA ဖြစ် ရာထူးတိုးပေးလိုက်ရတဲ့ A ခြေA နေ ရောက်သွားပါပြီ။ Uရောပကနေ A ခုတော့ Aာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသကိုပါ ဒီရောဂါ ခြိမ်းခြောက်နေပြီ။ ဂျပန်၊ သြစတြေးလျသာမကဘူး ထိုင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ မလေးရှားတို့မှာလည်း ဖြစ်ပွားနေပြီ။
A ထူးဂရုစိုက် ကာကွယ်ကြဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ (A ခုလောလောဆယ်ကို တချို့
စိုးရိမ်တတ်တဲ့သူတွေဟာ လူထူထူထဲ သွားလာတဲ့A ခါ နှာခေါင်းကာ တပ်သွားနေတာ တွေ့ရပါတယ်) A ခုဆိုရင် နောက်ဆုံး ထုတ်ပြန်ချက်သတင်းA ရ ဒီ A/H1N1 တုပ်ကွေးရောဂါဟာ နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၀ က လူပေါင်း ငါးသောင်းကျော်ကို ကူးစက်ပြန့်ပွားနေပြီး သေဆုံးသူUီးရေက ၂၃၁ Uီး ရှိခြဲ့ ပီလို့ ဆိုပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာ A သက် ၄၉ နှစ်A ရွယ် A မျိုးသမီးတစ်Uီး ဒီရောဂါနဲ့ သေဆုံးခဲ့ပြီး သူမဟာ Aာရှမှာ ဒီရောဂါနဲ့
မလိုချင်ကြပါဘူး) AဲဒီA ထဲမှာ ကံထူးတဲ့သူက A က်ဂါဟာနန်ဒက်ပါ။ သူက A သက် ၅ နှစ်သာရှိသေးတဲ့ မက္ကစီကိုနိုင်ငံက
ဒီရောဂါဟာ စတင်ပြီး ကမ္ဘာမှာ
ရုပ်ထုသနွ်းလုပ်ထားဖို့ A ခုဆို
ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ နေရာတစ်ခု ဖြစ်နေပါတယ်။ ကုသိုလ်ထူးတဲ့ လူကတော့ A ရှုံးထဲက A မြတ်ရခဲ့တာပေါ့။ A စ္စရေးနိုင်ငံကို ကမ္ဘာ့မြေပုံပေါ်က ပျောက်ကယ်ွသွားေAာင် လုပ်ရမယ်လို့ မဆင်မခြင် ခပ်ကြမ်းကြမ်း စကားပြောတတ်တဲ့ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးကို
Aီရန်သမ္မတရွေးကောက်ပမွှဲာ
ဖြစ်ခ့ပဲါတယ်။
(Aဲဒီရွေးကောက်ပမွှဲာ မဲလိမ်လည်မှုတွေ ရှိတယ်ဆိုပြီး Aီရန်နိုင်ငံမှာ A တိုက်A ခံ ထောက်ခံသူတွေက ဆန္ဒပြပွဲတွေ ဆင်နွှဲနေပါတယ်။ ဒီနီဂျက်ရဲ့နှိမ်နင်းပုံတွေက ပြင်းထန်တA့ဲ တွက် နိုင်ငံတကာနဲ့ ကုလသမဂ္ဂ A တွင်းရေးမှူးချုပ်ကိုယ်တိုင် ဝင်ရောက်ပြီး ဟန့်တားစကားပြောနေတာ ကြားရပါတယ်) ရန်သူတော်
A မာဒီနီဂျက် A စွန်းရောက်တစ်Uီး
A ရွေးခံရတာကိုပဲ သမ္မတဖြစ်သွားမှ
ဝမ်းသာAားရ Aီရန်နဲ့
နိုင်ငံတကာက A စ္စရေးကို A ပြည့်A ဝ ထောက်ခံကြမယ့် A ချက်ကို မျှော်တွေးပြီး ကြိုဆိုလိုက်တာပေါ့။ A မာဒီနီဂျက်ရဲ့ A ဓိကပြိုင်ဘက် မူဆာဗီကတော့ A လယ်A လတ်သမားဆိုတော့ Aီရန်ဆန့်ကျင်ရေးဟာ
AများAတွက် သွေးေAးသွားနိုင်တဲ့ AလားAလာ ရှိပါတယ်။ မူဆာဗီကို ထောက်ခံကြတဲ့သူတွေက ပြုပြင်ရေးဝါဒီတွေ၊
ခွဲခြားထားချင်တဲ့သူတွေပေါ့။ မူဆာဗီက Aမာဒီနီဂျက်န့ပဲတ်သက်ပြီး ပြောရာမှာလည်း “သူဟာ Aီရန်ကို Aာဏာရှင်နိုင်ငံဘဝ ရောက်ေAာင် တွန်းပို့နေတယ်။ သူ့ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒဟာ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမှု Aပေါ် Aခြေခံတဲ့ ပေါ့ပျက်ပျက် စွန့်စားရေးဝါဒ” လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ခက်တာက Aခုထိ Aာဏာရှိနေဆဲ ဖြစ်တဲ့ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီး ခိုမေနီက Aမာဒီနီဂျက်ကို AကာAကွယ်ပေး ထောက်ခံနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Aလေးထားရမယ့်ပြဿနာ ဖြစ်နေပါတယ်။ လာမယ့်ဘေး ပြေးတွေ့မယ် ဆိုသူကတော့ မြောက်ကိုးရီးယားက ကင်ဂျုံAီ ဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ ပါရှန်းတွေလို
လျှပ်စစ်စမွ်းAင်
ထုတ်လုပ်ဖို့လို့ ဆိုပါတယ်။ လုံခြုံရေးကောင်စီက Aရေးယူဖို့ စီစU်တာကိုလည်း ဂရုစိုက်ဟန် မတူပါဘူး။ Aခု နောက်ဆုံးသတင်းAရ (ဂျပန်နိုင်ငံ ထောက်လှန်းရေးAဖွ့၏ဲAဆို) Aမေရိကန် ဟာဝိုင်Aီကျွန်းကို Aဏုမြူထိပ်ဖူးတပ် ဒုံးပျံနဲ့ (ခရီးက မိုင် ၄၅၀၀ လောက်ကွာ ဝေးတယ်) ပစ်ခတ်ဖို့ စီစU်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သူ့ကိုယ်သူ ကာကွယ်ဖို့ ဒုံးခွင်းဒုံး AစီAစU်တွေရှိတဲ့ Aမေရိကန်ဟာ Aခုတော့ ဂြိုဟ်တုကတဆင့် စက္ကန့်မလပ်
နျူကလီးယားစစ်ပဟွဲာ
စတယ်ဆိုရင်တော့ သမိုင်းမှာ မျက်နှာပျက်စရာတော့ ဖြစ်တော့မှာပေါ့ ခင်ဗျာ။
ကလေးတို့ ဝမ်းမြောက်ဖွယ် ဒီသတင်းကတော့
တွဲလောင်းတို့Aတွက် ဝမ်းမြောက်စရာ သတင်းပါပဲ။ မြို့နယ်ငါးခုမှာ စတင်ပြီး ‘ကလေးသူငယ်များAား ညှU်းပန်းနှိပ်စက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ထိရောက်တဲ့ Aရေးယူမှုတွေ ပြုလုပ်တော့မယ်’ ဆိုတဲ့ သတင်းပါပဲ။ Aဲဒီမြို့နယ်တွေက
ဖွဲ့စည်းဆောင်ရက်ွတော့မယ်တဲ့။ မြို့နယ်တော်တော်များများမှာလည်း Aထူးသဖြင့် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်နဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။
စားပွထဲိုးတွေကို
ငြိစွန်းနေပါတယ်) Aဲဒီကလေးတွေဟာ မဖြစ်စလောက် လစာနဲ့ ထမင်းစား ကျန်ွခံ သဘောမျိုး တစ်နေ့ ၁၂ နာရီလောက်
ခေါင်းငုံ့ခံနေကြရပါတယ်။ Aခုတော့ မိဘတွေAတွက်လည်း လူနဲ့လက်နက်န့မဲမျှ၊
ကျွဲရိုက် နွားရိုက် ရိုက်တတ်ပါတယ်။
ဖတ်ရဖူးပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ့်သားသမီးကိုယ် ရိုက်ရင်လည်း ဒီUပဒေနဲ့ မငြိေAာင် ဆင်ဆင်ခြင်ခြင် ရှိကြဖို့
မိဘတွေကြောင့် ကျောင်းနေရမယ့် Aရွယ်ကလေးတွေကလည်း စာသင်ခန်းနဲ့ ပြတ်နေကြရပါတယ်။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်က Aာဆီယံထိပ်သီး Aစည်းAဝေးက ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မှာ ဒီဒေသAတွင်း ကလေးသူငယ်Aားလုံး Aခြေခံပညာ တတ်မြောက်ကြရမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချ လျာထားခဲ့ကြပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ထောင်စုနှစ် ရည်မှန်းချက်မှာလည်း
ကလေးများ ပပျောက်ရေးကို စီမံကိန်းချ ဆောင်ရက်ွနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လမ်းပေါ်နေ ကလေးတွေဟာ
UီးေAာင်ထနွ်းခိုင်က ၁၂-၅-၂၀၀၉ ရက်နေ့က ပြောကြားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းလည်း ဖတ်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လို ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံကို မဆိုထားနဲ့ Aာရှမှာ စီးပွားရေးAရ ခေါင်းဆောင်နေတဲ့ Aိန္ဒိယလို နိုင်ငံကြီးရဲ့
မှိုလိုပေါက်နေတာ မျက်မြင်ပါပဲ။ AဲဒီAကြောင်း ရိုက်ပြခဲ့တဲ့ Slumdog Millionaire ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားဟာေAာ်စကာဆုတွေ တသီကြီး ရသွားပြီး ကမ္ဘာကျော်သွားခဲ့တယ်။ Aဲဒီထကဲသရုပ်ဆောင်ကလေးတွေ သဘာဝကျတာလည်း မပြောနဲ့။ သူတို့ကိုယ်တိုင်က Aပြင်မှာလည်း တကယ့်ကျူးကျော်ရပ်ကက်ွထမှဲာ ကြီးပြင်းလာကြတဲ့
ရုပ်ရှင်ထကဲAတိုင်း Aပြင်မှာလည်း Aိုးမဲ့Aိမ်မဲ့ ဖြစ်သွားကြပါတယ်။
Aခုတော့ Aဆင်ပြေသွားပြီ။ သူတို့ ပါဝင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားက ငွေကြေးAရပါေAာင်မြင်မှု ရရှိခ့တဲ့Aတွက် ထုတ်လုပ်သူက ကလေးနှစ်ယောက်ကို ရူပီးငွေနှစ်သန်းခွဲလောက်တန်တဲ့Aိမ်ခန်းတွေ တစ်ယောက်တစ်ခန်း ဝယ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
စီစU်နေတယ်ဆိုတော့ သားရွှေAိုး ထမ်းလာတဲ့ကိန်းလို့ပဲ ဆိုရတော့မှာပေါ့ ခင်ဗျာ။ ဒါပေမယ့် Aာရှ ပစိဖိတ်ဒေသမှာ ရှိတဲ့ သန်းပေါင်းများစွာသော ဆင်းရဲမွဲတေနေတဲ့ ကလေးတွေ သူတို့လို ကံကောင်းဖို့ ဆိုတာကတော့...။
ရယ်စရာမဂ္ဂဇင်း၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၀၉ခုနှစ်။
စာAုပ်Aရောင်းမြှင့်တင်ရေး ကမ္ဘာမှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ရီဆက်ရှင်း ခေါ်တဲ့ ငွေကြေး Aကျပ်Aတည်းဟာ A/H1N1 လိုပဲ နိုင်ငံတစ်ကာကို ကပ်ရောဂါတစ်ခုလို ကူးစက်သွားခဲ့တ့Aဲတွက် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံလည်း ထိုက်သင့်သလောက် A ရိုက်ခတ်ခံခဲ့ရတာ
ကျွန်တော်တို့ စာပေလောကမှာလည်း ထိခိုက်ခ့ပဲါတယ်။ စာAုပ်တန်းမှာ ဈေးဝယ်သောသူ မရှိသလောက် နည်းပါးပြီး ခြောက်ကပ် တိတ်ဆိတ်နေတာ မြင်ရတယ်။ စာAုပ် A ရောင်းကျတယ်။ စာAုပ်ဈေးကွက် မပျက်ေAာင် A မျိုးမျိုး ကြိုးစားကြရတယ်။ Aဲဒါကတော့ စာAုပ်စာပေကို လူတွေစိတ်ဝင်စားေAာင် နည်းA မျိုးမျိုး
စုပေါင်း၍ပဲဖြစ်ဖြစ် စာAုပ်A ရောင်းပြပွဲတွေ လုပ်တယ်။ Aဲဒီမှာ ဈေးလျှော့ရောင်းတယ်။ စာAုပ်ဖြန့်ချီတ့Aဲခါ AဲဒီစာAုပ်ကို ပြုစုရေးသားတဲ့ စာရေးဆရာကိုယ်တိုင် A ရှင်လတ်လတ် ထိုင်ပြီး လက်မှတ်ထိုးပေးတယ်။
စာရေးဆရာကို မြင်လိုက်ရတော့ ကျေနပ်မှုရမှာA မှန်ပါပဲ။ နိုင်ငံခြားမှာလည်း ဒီလို ဓလေ့တွေ ရှိပါတယ်။ ပေါ်လိုကိုးဟိုဆို Aဲဒီဘက်မှာ နာမည်ကြီးပါပဲ။ သူ့လက်မှတ်ကလေး ရဖို့ လေးငါးနာရီ တန်းစီရတဲ့A ခါတွေ ရှိပါတယ်။ တချို့ကတော့ စာနယ်ဇင်းသမားတွေ စုံစုံညီညီ ဖိတ်ပြီး စာAုပ်မိတ်ဆက်ပွဲ လုပ်တယ်။ တကယ်တော့ စာAုပ်မိတ်ဆက်ပွဲဆိုတာ A ခုမှ စာပေလောကထဲ ဝင်လာတဲ့ ကလောင်သစ်ကလေးကပဲ A စU်A လာA ရ လုပ်ခြဲ့ ကတာပါ။ A ခုတော့ ကလောင်တစ်ပတ်နမွ်းတွေ၊ ကလောင်မရင့်တရင့်တွေကပါ လုပ်လာကြတာ တွေ့ရပါတယ်။
စာAုပ်မိတ်ဆက်ပလွဲုပ်လို့
တစ်ခါကတော့ ပဉ္စမံဒီရိုင်းဟာ သူ့ရဲ့ ‘တက္ကသိုလ် လူပျော်’ စာAုပ် မိတ်ဆက်ပကွဲို Aာရှပလာဇာဟိုတယ်မှာ လုပ်ပြန်တယ်။ ဒါက သူ့ရဲ့ တတိယမြောက် ဆိုတာထက်တောင်
စာAုပ်မိတ်ဆက်ပွဲ ခင်ဗျာ။ နှစ်ထပ်ရှိမှ မှတ်မိတယ် နောက်တော့
လုံးချင်းလောကမှာတော့ လူငယ် လက်တက်ကလေးလို့ ပြောလို့ရတယ်ပေါ့) လင်းညှို့သွေး၊ ပန်းရတု၊ နှင်းသီရိ ကျက်သရေစသဖြင့် A ခုA ချိန်မှာ ဒီလို စာAုပ်မိတ်ဆက်ပွဲလေးမှ မလုပ်လိုက်ရရင် ခေတ်မမှီတဲ့ A ခြေA နေ ရောက်နေပြီ။ ဒါကြောင့် ဆရာသရဝဏ်တောင် နောက်က ပြေးလိုက်ဖို့ ကြံနေပြီ။ ကောင်းပါတယ်။ စာAုပ်ကို လူတွေ စိတ်ဝင်စားေAာင် လုပ်တာ ကောင်းတာပေါ့။ ဒါမှ ရောင်းရမယ်။ စာAုပ်ရောင်းရမှ
A ဓိကAားဖြင့်
A ခြေတည်ဆောက်ထားရတာကိုး။ ဆိုတာကလည်း
ထုတ်ဝေလိုက်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ညီမတော် ယU်မင်းUီးရဲ့ ပရမတ္တA လင်္ကာဆိတုဲ့ (A ပျော်ဖတ်စာပေ
မဟုတ်ပါ။ ဘာသာရေးဆောင်းပါး ပေါင်းချုပ် ဖြစ်ပါသည်) စာAုပ်လေးဟာ MRTV4ရဲ့ Aရောင်းရဆုံး စာAုပ်စာရင်းမှာ သုံးလေးပတ်လောက် စာရင်းဝင်တာ တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ထူးခြားတာတစ်ခုက သူ့စာAုပ် ဝယ်ယူသူတိုင်းကို
သတင်းတစ်ပုဒ်မှာလည်း People မဂ္ဂဇင်းက မဂ္ဂဇင်းနဲ့Aတူ ဗီစီဒီတစ်ချပ်ကို Aခမဲ့ မေတ္တာလက်ဆောင် ထည့်ပေးထားတယ်လို့ သိလိုက်ရတယ်။ ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေကြီး ကာတွန်း ကိုဆန်းထွန်းတို့ လုပ်နေတဲ့ ပုတက် ကလေးကာတွန်းစာAုပ်မှာလည်း ဒီလို ဗီစီဒီAခွေလေးတွေ လက်ဆောင်ပါနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ တချို့ ဆေးမဂ္ဂဇင်းတွေကတော့ ငုံဆေးပြားတို့ ဘာတို့ကို ပူးတွဲ လက်ဆောင်Aဖြစ် ထည့်ပေးတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဂျပန်မှာတော့ ခပ်ဆန်းဆန်း ခင်ဗျ။ Aဲဒီ နေမျိုးနွယ် ကိုဂျူဆူဇူကီ (Koji Suzuki) ဟာ သရဲဝတ္ထု ရေးတဲ့နေရာမှာ ဟောလီးဝုဒ်က Ring Aမည်နဲ့ ရိုက်ထားတာ ကြည့်ဖူးကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်) Aခု သူဟာ သူ့ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ကို Aိမ်သာသုံး စက္ကူပေါ်မှာ ရိုက်နှိပ် ထုတ်ဝေလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ Aဲဒီ Drop လို့ Aမည်ရှိတဲ့ ဝတ္ထုကို ဖတ်ရှုနိုင်တယ်လို့
ပေ ၃၀ ရှိတဲ့ စက္ကူလိပ်မှာ ရိုက်နှိပ်ထားပြီး မိနစ်Aနည်းနယ်နဲ့ ဒါကလည်း
Aယူသီးမှုကို Aမြတ်ထုတ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာတစ်လုံး ဘုရားတစ်ဆူလို့ Aယူရခှိ့ တဲ့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာတော့ ဘယ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲ ခင်ဗျ။ မကြာသေးမီကတော့ ကျွန်တော့်ကို
ရောင်းရေAာင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဆရာတဲ့” ဒါနဲ့ ကျွန်တော်က သင့်မြတ်တဲ့ Aကြံဉာဏ်ပေးလိုက်တယ်။ “မင်းစာAုပ်ကို မကြာသေးခင်က
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွတဲစ်ခုမှာ
ဗင်နီဇလွဲားသမ္မတ
စာAုပ်တစ်Aုပ် လက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်။ Eduardo Galeano ရေးတဲ့ Open Veins of Latin America ဆိုတဲ့ စာAုပ်ပဲ။ လက်တင်A မေရိကနိုင်ငံတွေက A မေရိကန်A ပေါ် မြင်တ့Aဲမြင်ပေါ့။ Aဲသလို ပေးပြီး နောက်တစ်ရက်မှာ AဲဒီစာAုပ်ဟာ Amazon.com A မေဇုန်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ A ရောင်းရဆုံး နံပါတ် ၂ နေရာကို ရောက်ရှိသွားတယ်တဲ့။ ကဲ… ဒီA ရောင်းမြှင့်တင်ရေးနည်းလေးကတော့ သုံးကြည့်ဖို့ မသင့်ပါလား ခင်ဗျာ။
Uသျှစ်သီး ကြွေကျခြင်း စကြဝဠာဟာ Big Bang ဆိုတဲ့ မဟာပေါက်ကမွှဲုကြီးက စတင်တယ်
Aယူဝါဒကို ယခုAခါ သိပ္ပံပညာရှင်တော်တော်များများက ယုံကြည်လက်ခံထားခဲ့ကြပါတယ်။ Aဲဒီလို ပေါက်ကမွှဲုကနေ Aာကာသဟင်းလင်းပြင်ထမှဲာ Aင်မတန် ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ Aလင်းရောင်တောင် မလွတ်ေAာင် စုပ်မျိုနိုင်တဲ့ တွင်းနက်ကြီးတွေ (Black Hole) ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့လည်း ယူဆကြတယ်။ Aဲဒီလို စကြဝဠာAစ
သိပ္ပံပညာရှင် တစ်သောင်းကျော်ဟာ စီမံကိန်းဖြွဲ့ ပီး စုပေါင်းတည်ဆောက်ခြဲ့ ကတယ်။ Aဲဒီစက်ကြီး Large Hardon
ဆွစ်ဇာလန်နယ်စပ်မှာ ရှိပါတယ်။ Aဲဒီစက်ကြီးရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်က ယူရိုငွေ ၄ ဒဿမ ၄ ဘီလျံ ရှိတယ်။
ခလုတ်တွေကို ထွက်ခ့တဲယ်။
ပေါက်ကပျွဲက်စီးသွားလိမ့်မယ်လို့
ရှိတယ်လို့ ခန့်မှန်းတွေးတောခဲ့ကြတယ်။ Aဲဒီရုပ်သံသတင်းကို ကြည့်ပြီး ကြောက်ရွံ့သွားတဲ့ Aိန္ဒိယက ၁၆ နှစ်သမီးလေး ချာယာဟာ ကမ္ဘာပျက်မှာ ကြောက်ပြီး သူ့Aိမ်မှာ Aဆိပ်သောက် သေသွားရတယ်။ တကယ်တမ်း Aဲဒီစက်ကြီးကို လည်တော့ ကမ္ဘာမပျက်ဘဲ Aဲဒီစက်ကြီးဟာ ပျက်သွားတာ တွေ့ရတယ်။ ပြန်ပြင်ရင်လည်း ပြင်စရိတ်က ၁၄ သန်းလောက် ကုန်Uီးမယ်တဲ့။ ကဲ… နေရာတကာ တွေးကြောက်မနေဖို့ တွေးမိကြေAာင် ပြောလိုက်ရပါတယ် ခင်ဗျာ။
ရယ်စရာမဂ္ဂဇင်း၊ေAာက်တိုဘာလ၊ ၂၀၀၇ခုနှစ်။
နွားနို့၊ နွားကျင်ငယ်ရည်၊ ဗော့လ်ကာနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စက် ဒီတစ်ပတ်တော့ ဖတ်လိုက် သိလိုက်ရတဲ့ တိုတိုထွာ ထွာ မှတ်စရာလေးတွေAကြောင်း ဖောက်သည် ချချင်ပါတယ်။ ‘မင်းက နို့မသောက်ဘူးလား’ ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကား မဟုတ်ပါ။ မော်ဒယ်လ်ဂဲလောကရဲ့ မိခင်ကြီးဆိုတဲ့ တင်မိုးလွင်ရဲ့ PEP နို့မှုန့်ကြော်ငြာက Aဖွင့်စကားပါ။ ညတိုင်း ရုပ်မြင်သံကြား၊ ကြေငြာမှာ တွေ့မြင်နေကြမယ် ထင်ပါတယ်။ တင်မိုးလွင်ကို Aားနာလို့ပဲ သောက်သောက်၊ ကိုယ်တိုင် နွားနို့ကို ကြိုက်လို့ပဲ
ရှိပါတယ်တဲ့။ ကြည်လင်တဲ့ နွားနို့ပုလင်းတွေ ထည့်ထားတဲ့ မှန်ပုံးတွေက နွားနို့ပုလင်းကို ယူမယ်ဆိုရင် နောက်ဘက် ခပ်ကျကျ Aမှောင်ထကဲပုလင်းကို ယူပါတဲ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Aလင်းရောင်ထမှဲာ ထားတဲ့ နွားနို့ဟာေAာက်ဆီဂျင်နဲ့ ဓါတ်ပြုပြီး Aရသာ ပျက်စီးသွားတတ်လို့ပါတဲ့။ ဒါကြောင့်လည်း နွားနို့တွေကို Aလင်းပိတ် Aရာဝတ္ထုဖြစ်တဲ့ စက္ကူကတ်ထူဘူးတွေထမှဲာ ထည့်ရောင်းကြတာပေါ့။ ဒါက နွားနို့ဝယ်တဲ့သူတွေ သတိထားရမယ့် Aချက်ပေါ့။ တချို့ကတော့ နွားနို့ မကြိုက်ကြဘူး။ ဖျော်ရည်မျိုးစုံကိုတော့ စုံစုံမက်မက် သောက်သုံးကြတယ်။ ဒါကြောင့် လူ့Aဖွ့Aဲစည်းမှာ ကုတ်ယU်ကျေးမှု
(ကိုကာကိုလာ ယU်ကျေးမှု) ရယ်လို့ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာပေါ့။
ဖျော်ရည်တွေကလည်း Aမယ်စုံ တံဆိပ်Aစုံပါပဲ။ ညည ရုပ်မြင်သံကြား ကြော်ငြာတွေ စောင့်ကြည့်ရင်တော့ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ လိမ္မော် သောက်မလား၊ စတော်ဘယ်ရီ သောက်မလား၊ ကမ္ဗလာ သောက်မလား၊ မန်ကျည်း၊ စပျစ် သောက်မလား၊ ဒါမှမဟုတ် Aရော သောက်မလား။ Aဲဒါကိုမှ မကျေနပ်နိုင်သေးဘဲ ဆန်းဆန်းပြားပြား သောက်ချင်သူတွေAတွက် ထပ်ထွင်လိုက်ပြန်ပါတယ်။ Aိန္ဒိယ Aမျိုးသားရေးဝါဒီ လှုပ်ရှားမှုAဖွ့ကဲဝူဂျာဆိုတဲ့ Aဖျော်ရည်တစ်မျိုးကို သောက်သုံးရေAာင် ဖန်တီးထုတ်လုပ်လိုက်တာပါ။ Aဲဒါကတော့ နွားကျင်ငယ်ရည်နဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဖျော်ရည်တဲ့။ နွားကျင်ငယ်ရည်နဲ့ စိမ်ထားတဲ့ ဖန်ခါးသီးဟာ ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ကတည်းက ထိရောက်တဲ့ လေနိုင်ဆေးတစ်မျိုး ဖြစ်ခ့ပဲါတယ်။ ဝူဂျာဖျော်ရည်ဟာ နွားကျင်ငယ်ရည်နံ့ လုံးဝမရှိတဲ့Aတွက် လူကြိုက်များနိုင်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးAတွက် ကောင်းကောင်း Aထောက်Aပံ့ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ထုတ်လုပ်သူတွေက ပြောပါတယ်။ Aဲဒီဖျော်ရည်ကို နိုင်ငံခြားဈေးကွက်ကို တင်ပို့ဖို့Aတွက် ရည်ရယ်ွချက်ရှိတယ်လို့ ပြောတဲ့Aတွက် တကယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံ ဈေးကွက်ကိုများ ရောက်ရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင်… … … ဖျော်ရည်တွေ ဘယ်လိုကောင်းကောင်း နွားနို့တွေ ဘယ်လိုကောင်းကောင်း တို့ကတော့ ယမကာဆိုရင် Aရက်မှ Aရက်ပဲဆိုတဲ့ Aသူရာမင်းသားတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ရမ်၊ ဘရန်ဒီ၊ ဝီစကီ၊ ဝိုင်စသဖြင့် AမျိုးAစားတွေ စုံလင်လှပါတယ်။ နိုင်ငံAလိုက် နာမည်ကြီးတဲ့ Aရက်တွေလည်း ရှိသေးတယ်။ ဂျပန်က ဆာကေ၊ Aခု ကိုးရီးယားက ဆိုဂျူ၊ သူတို့မတိုင်ခင်က ယမကာလောကမှာ နာမည်ကြီးတာက ရုရှားနိုင်ငံက ထုတ်လုပ်တဲ့ ဗော့လ်ကာ Aရက်ပါပဲ။ တစ်နိုင်ငံနဲ့ တစ်နိုင်ငံ ပစ္စည်းတင်သွင်းတဲ့Aခါ ဒီလို စီးကရက်၊ Aရက်စတဲ့
ဒီလိုပစ္စည်းတွေကို Aကောက်ခန်ွလတွ်ေAာင် နယ်ခြားမှာ ခိုးသွင်းလေ့ရှိကြတယ်။ ရုရှားနဲ့ နယ်နိမိတ်ချင်း ဆက်စပ်နေတဲ့
လောက်ပါတယ်။ လူမြင်သူမြင်လည်း မဟုတ်ဘူး။ ပုလင်းလိုက် သယ်ရတာထက်လည်း ထိရောက်တယ်။ ဘယ်လို ပို့သလဲဆိုတော့ နှစ်နိုင်ငံAကြား သွယ်ထားတဲ့ ရေေAာက်ပိုက်လိုင်းကနေတစ်ဆင့် ပို့တာတဲ့။ ကဲ…
သုံးပုံတစ်ပုံ ဈေးချိုတယ်တဲ့။ ဒါဟာ တရားမဝင် Aခွန်ရှောင်နည်းပေါ့။ Aခုတော့ Aကောက်ခန်ွဌာနက ဖော်ထုတ်နိုင်လို့ လူ ၁၁ ယောက်ကို ဖမ်းဆီးAရေးယူထားတယ်တဲ့။ Aခုတလော ရေပန်းစားပြီး လူသိများနေတာကေAးမြတ်သူလည်း မဟုတ်၊ စီရော်နယ်ဒိုလည်း မဟုတ်၊ ဘရစ်တနီစပီးယားလည်း မဟုတ်ပါ။ ဝက်ကစဖြစ်လို့ ဝက်တုပ်ကွေးလို့ ခေါ်ရာမှ Aခု လူတုပ်ကွေးလို့ ခေါ်ဝေါ်နေတဲ့ မြန်မြန်နဲ့
သွားလာနေကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဘယ်လောက်တောင် A ဝယ်လိုက်သလဲ ဆိုရင် ဈေးကွက်ထမှဲာ Aဲဒီနှာခေါင်းစည်းကာဘာတွေ A ဆမတန် ဈေးတက်သွားရုံမက ဈေးကွက်ထမှဲာတောင် ပြတ်လပ်တ့Aဲထိ ဖြစ်သွားပါတယ်တဲ့။ (ဒါပေမယ့် Aဲဒီနှာခေါင်းစည်းပဝါကို စနစ်တကျ မှန်မှန်ကန်ကန် မသုံးတတ်တဲ့ သူတွေ များပါတယ်။
တိုက်တနွ်းတာ
ရှူရှိုက်မိခြင်းAားဖြင့် ကာကွယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့
A ယူA ဆ
ကိုယ်ခံစမွ်းAား
(Immunity) ပြောင်းလဲခ့တဲာပါ။
တုပ်ကွေးပိုးကို Aဲဒီရောဂါကို
ပိုလီယိုရောဂါဆေး ဆိုတဲ့ ကာကွယ်ဆေး A မျိုးမျိုးဟာလည်း မွေးမြူထားတဲ့ ပိုးA ယU်ကောင်တွေကို လူခန္ဓာကိုယ်ထဲ
ဒီဆရာဝန်ကြီးရဲ့စကားဟာ လေးစားလိုက်နာစရာ ကောင်းတယ်လို့ ကျွန်တော်ကတော့ တွေးဆမိပါတယ် ခင်ဗျာ။ သားသမီးA ပေါ် ထားတဲ့ မိဘမေတ္တာဆိုတာ A နှိုင်းမဲ့တဲ့ A ကြောင်း ပြောဆိုရေးသားထားတာတွေကို ကျွန်တော်မကြာခဏ Eဝံ မေ သုတံ မိပါတယ်။ မိဘတိုင်းလိုလိုပဲ ကိုယ့်သားသမီးကို ဆင်စီးမြင်းရံတာ မြင်ချင်တယ်။ ဒါ သဘာဝပဲ။ ဒါကြောင့် တတ်နိုင်သလောက် တတ်နိုင်သူတွေက ချဲ့ကားကြတယ်။ I.L.B.C
သြစတြေးလျလွှတ်၊ A မေရိကား လွှတ်ပညာသင်ကြတယ်။ ငယ်ငယ် မွေးကင်းစ A ရွယ်ကတည်းက Pre မူကြိုပေါ့။ လသားA ရွယ်ကလေးကို ရင်ခွင်ပိုက်ကျောင်းပို့တဲ့သူက ပို့တယ်။ မိဘပါ A တူလိုက်နေရတယ်။ တစ်ပတ် နှစ်ခါ သုံးခါ ကျောင်းကို သွားရတယ်။ Aဲဒီကျောင်းက သီချင်းတွေ ဖွင့်ပြတယ်။ A င်္ဂလိပ် စကားပြောသံတွေ
ပင်ကိုယ်A ရည်A သွေး
တိုးတက်စေဖို့ A ထောက်A ပံ့ ဖြစ်စေတယ်လို့ ယုံကြည်ကြတယ်။ Aဲဒါထက် တစ်ဆင်တ့က်လာတာက Aဲဒီကလေး A ပြင်ကို မရောက်ခင် ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်လောင်းတွေက ဗိုက်ထကဲကလေးA တွက် ရည်ရယ်ွပြီး ကျူရှင် သွားတက်ကြတာပဲ။ ဗိုက်ထကဲသန္ဓေသား ကလေးငယ်တွေဟာ မိခင်းစားသမျှ Aာဟာရတွေကို တစ်ဆင့်ခံ စားသုံးနိုင်သလို သူတို့A တွက် ရည်ရယ်ွပို့ချတဲ့ သင်ခန်းစာတွေကိုလည်း ဗိုက်ထကဲခံယူနိုင်ကြတယ်ဆိုလို့ ယုံကြည်ယူဆကြတယ်။ သြော်… မိဘတွေများ သားသမီးA တွက်ဆို
ဘာပဲ လုပ်ရလုပ်ရ ဆိုတဲ့ ခံယူချက်ပဲ ထင်ပါရဲ့။ Aခု ခပ်ကကဲ မိခင်လောင်းတွေAတွက် ခပ်ဆန်းဆန်း ပစ္စည်းတစ်မျိုး ထပ်မံထက်ွပေါ်လာပြန်ပါပြီ။ Aဲဒါကတော့ Baby Plus လို့ Aမည်ရတဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာသုံး ပညာသင်ကိရိယာ Aသစ်ကလေးပါပဲ။ Aဲဒီကိရိယာလေးကို မိခင်လောင်းရဲ့ ဗိုက်မှာ ကပ်ထားရုံနဲ့ ဗိုက်ထကဲသန္ဓေသားဟာ ဉာဏ်ရည်ဖြွံ့ ဖိုးတိုးတက်လာစေမယ်တ။ဲ့ ကိုယ်ဝန် ၁၈ ပတ်ကနေ ၃၂
စတင်သုံးစွနဲိုင်ပြီး Aမေဖြစ်သူရဲ့
မှတ်သားနိုင်မယ်တဲ့။ Aမေရိကန် ဝါရှင်တန် စိတ်ဖံြွ့ ဖိုးမှုပါရဂူ ဒေါက်တာ ဘရန့်လိုဂန် (Brient Logan) ၂၅ နှစ်တိုင်တိုင်
Aမြဲတပ်ထားဖို့ မလိုပါဘူး။ တစ်နေ့ နာရီAနည်းငယ် တပ်ထားရုံနဲ့ လုံလောက်ပါတယ်တဲ့။ တန်ဖိုးကတော့ မြန်မာငွေ
ငွေပိုငွေလျှံလေးများ ရှိရင် စမ်းသပ်ကြည့်ဖို့ မကောင်းပေဘူးလား ခင်ဗျာ။
ရယ်စရာမဂ္ဂဇင်း၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၀၉ခုနှစ်။
Aခွင့်မရှိ မရိတ်ရ ကမ္ဘာက Aရှေ့Aလယ်ပိုင်းဒေသလို့ သတ်မှတ် ခေါ်ဝေါ်လေ့ရှိတဲ့ Aာရပ်ကမ္ဘာဟာ Aစ္စလာမ်ဘာသာရေး ကြီးစိုးလွှမ်းမိုးတဲ့ ဒေသဆိုတာ Aများသိပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနဲ့ ယU်ကျေးမှု Aနုပညာပါမကျန် Aရာရာဟာ ဘာသာရေးရဲ့ လက်ေAာက်ခံပြီး သူတို့ဆီက ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် ဆိုသူတွေဟာလည်း (ခိုမေနီတို့လို) နိုင်ငံAုပ်ချုပ်သူတွေAပေါ် သြဇာညောင်းတဲသူ့တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဆီက Aမျိုးသမီးတွေဟာ ခေါင်းမြီးခြုံ မပါဘဲ Aပြင်ထက်ွခွင့် မရှိဘူး။ မော်တော်ကားမောင်းခွင့် မရှိဘူး။ Aရက်ဆိုင် မရှိဘူး။ ရုပ်ရှင်ရုံ မရှိဘူး။ (Aရက်ဆိုင် မရှိဘူးဆိုတော့ သူတို့ဆီက ကဗျာဆရာတွေ ဘာသောက်နေကြသလဲ မသိဘူး။ Aိုမာခယမ်ကို သတိရစရာပေါ့ဗျာ) Aီရန်သမ္မတလောင်း မစ္စတာ မော်ဆာလီကတော့ လစ်ဘရယ်Aမြင် ရှိပုံရပါတယ်။ သူက ၁၉၇၉ က စတင်ခ့တဲ့ Aစ္စလာမ် တော်လှန်ရေးရဲ့ ရည်မှန်းချက်ဟာ လွတ်လပ်မှုပလဲို့ မဲဆယ်ွပမွှဲာ ကြွေးကြော်ခ့တဲယ်။ ရွေးကောက်ပကျွဲတော့ Aမာဒီနီဂျက်ကို ရှုံးပါလေရော။ Aဲဒီ Aီရန်ရဲ့ သြဇာဟာ Aိမ်နီးချင်း Aီရတ်နိုင်ငံ Aပေါ်မှာပါ
ရှိခ့ပဲါတယ်။
Aုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကို ထူထောင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်) Aီရတ်Aမျိုးသမီးတွေ ခေါင်းမြီးပြန်ခြုံရပြီး Aရက်ဆိုင်တွေလည်း
Aပြိုင်းAရိုင်း ပေါ်ပေါက်လာတယ်။ Aယူသီးလွန်းတယ်လို့
Aိန္ဒိယမြောက်ပိုင်း ကန်ပူရ်မြို့က ကောလိပ်ကျောင်းလေးခုမှာ ကျောင်းသူတွေ ဂျင်းဘောင်းဘီ ဝတ်တာကို ပိတ်ပင်တဲ့
ပွလဲမ်းသဘင်တွေထမှဲာ
လူ့Aဖွ့Aဲစည်းထဲက
Aိန္ဒိယရုပ်ရှင်တွေထကဲလို
ဆိုပါတယ်။ Aမျိုးသမီးရေးရာဝန်ကြီးဟောင်း ရာနူကာ ချောင်ဒရီကတော့ “ဒါဟာ Aိန္ဒိယမှာ တာလီဘန်ပုံစံ သွတ်သွင်းလာတာ”လို့ ဝေဖန်ခ့ပဲါတယ်။ Aဲဒီ Aိန္ဒိယမှာပဲ ဂါလင်ကောလို့ Aမည်ရတဲ့ ကျောင်းသူတစ်ယောက်ဟာ ဆစ်ဘာသာရေးမြို့တော် Aာမီစတာက ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကောလိပ်ဝင်ခွင့် Aပယ်ခံရပါတယ်။ သူ့Aပြစ်က မျက်ခုံးမွှေး နှုတ်လို့တဲ့။ Aဲဒီကိစ္စကို တရားရုံးတင်ပေမယ့လည်း Aိန္ဒိယတရားရုံးက ကျောင်းသူလေးကို Aရှုံးပေးလိုက်ပါတယ်။ (မျက်ခုံးမွှေးကို
မော်လဝီဆရာတွေရဲ့ မုတ်ဆိတ်လို နေမှာပေါ့။ တစ်ကျောင်း တစ်ဂါထာပဲပေါ့ ခင်ဗျာ။
Aကြီးကြီးနဲ့ သေးသေးလေး သေးသေးလေးဆိုတော့
ခွဲစိတ်လိုက်ရင် ပရိုတနွ် နျူထရွန် Aီလက်ထရွန်စသဖြင့် Aစိတ်စိတ်Aမြွှာမြွှာ ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ Aဲဒီမတိုင်မီကတော့ Aက်တမ်ကိုပဲ Aခိုင်မာဆုံး AခြေခံAကျဆုံး ရုပ်ပစ္စည်းလို့ လက်ခံခြဲ့ ကဖူးတယ်ပေါ့။ မကြာမီက ဂျာမန်သိပ္ပံပညာရှင် ဟော့ဖ်မင်း ခေါင်းဆောင်တဲ့ လူစုဟာ ဒြပ်စင်Aသစ်တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ ဒြပ်စင် ၁၁၂ ခုကို တွေ့ရှိခြဲ့ ကလို့ ဒြပ်စင်ဇယားလို့ခေါ်တဲ့ Periodicatable မှာ ထည့်သွင်းဖို့ စီစU်နေပါတယ်။ လောလောဆယ် Aဲဒီဒြပ်စင်ကို ပေးထားတဲ့ Aမည်ကတော့ Ununbiun တဲ့။ သေးသေးလေး Aရာသွင်းခံရတဲ့ Aချိန်မှာ Aကြီးကြီးကတော့ ငယ်စာရင်း ဖျက်ခြင်း ခံလိုက်ရပါတယ်။ Aဲဒါကတော့ နှစ်ကြာေAာင်
ပလူတိုဂြိုဟ်ပါပဲ။ ဒီဂြိုဟ်ဟာ နေစကြဝဠာAတွင်း မိသားစုဝင်Aဖြစ် နှစ်ပေါင်း ၂၄၈ Aသိမှတ်ပြုခံခဲ့ရတဲ့
ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးမှ ဒီပလူတိုဂြိုဟ်ဟာ ဂြိုဟ်တစ်ခု ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ Aင်္ဂါရပ်တွေနဲ့ မပြည့်စုံဘူးဆိုပြီး (Aရန်ဂြိုဟ်မရှိတဲ့ Aချက်လည်း ပါတယ်) ဂြိုဟ်စာရင်း Aဖျက်ခံရတော့တာပဲ။ နက္ခဗေဒင်ဆရာတွေနဲ့ ဘုရားကိုးဆူဆရာတွေ Aတွက်တော့ ကသိကေAာက် ဖြစ်စရာပေါ့ခင်ဗျာ။ သူ့ခမျာ ဂြိုဟ်ပြုတ်ဘဝ ရောက်ခါမှ နာမည်ပါ ပြောင်းပေးခံရသေးတယ်။ Aခုနာမည်က ပလူတွို က်တဗ့ျဲာ။
ကျွန်ုပ်တို့ Aပူကင်းရေး မိုးကုန်စ ရှိသေးတယ်။ လူတွေ ပူပြင်းဒဏ်ကို AလူးAလဲ စတင်ခံကြရပါတော့တယ်။ Aဲဒီလို ရာသီUတု ပြောင်းလဲမှုဟာ
ဖောက်ပြန်ခြင်းကို ထိန်းသိမ်းဖို့ဆိုရင် လူတွေရဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံကို ပြောင်းလဲဖို့ လိုတယ်လို့ A ကြံပေးပါတယ်။ ဖန်လုံAိမ်ဓါတ်ငွေ့ Aာနိသင် လျော့နည်းဖို့ (လေေAးပေးစက် တပ်ဆင်မယ့်A စား ယပ်တောင်တွေ မသုံးသင့်ဘူးလား) (ခရီးတိုတွေမှာ
ပြုန်းတီးမှုဘေး။ Aိုဇုန်းလွှာ A ပေါက်လျော့ကျေAာင် ကျန်ွတော်တို့ ဘာတွေလုပ်ကြမလဲ။ ဖန်လုံAိမ်ဓါတ်ငွေ့ ၆ မျိုးမှာ မီသိန်းဓါတ်ငွေ့လည်း တစ်ခု ပါပါတယ်။ Aဲဒီ ဓါတ်ငွေ့က မိလ္လာတွင်း၊ ကျောက်မီးသွေးတွင်းတွေကသာ ထွက်လာတာ မဟုတ်ဘူး။ ကျွဲ၊ နွား၊ သိုး၊ ဝက်စတဲ့ မွေးမြူရေး တိရစ္ဆာန်တွေ လေးပုံတစ်ပုံ
လေပျို့လေA န်ရာကလည်း ရှိတယ်တဲ့။
ထိန်းသိမ်းရေးပညာရှင်တွေA တွက် ခေါင်းခဲစရာပဲ ဖြစ်၍နေပါတယ် ခင်ဗျား။
ရယ်စရာမဂ္ဂဇင်း၊ ဇန်နဝါရီလ၊ ၂၀၁၀ခုနှစ်။